व्यवस्था – 2माछा
घर / बाइबल / पुरानो नियमका / व्यवस्था
1:1 यी मोशाले इस्राएलका सबै कुरा जो शब्दहरू हुन्, यर्दन मार्फत, लाल समुद्र विपरीत उजाडस्थानमा को सादा मा, पारान र Tophel र लाबानले र Hazeroth बीच, जहाँ सुन धेरै धेरै छ,
1:2 एघार दिन Horeb देखि, माउन्ट Seir बाटो जहाँसम्म Kadesh-barnea द्वारा.
1:3 को fortieth वर्षमा, को एघारौँ महिना, महिनाको पहिलो दिन, मोशाले प्रभु उहाँलाई निर्देशन दिनुभएको थियो सबै कि इस्राएलका छोराहरू भन्नुभयो. र यति उहाँले तिनीहरूलाई,
1:4 उहाँले सीहोन तल प्रहार गरेको थियो पछि, को एमोरीहरूमाथि राजा, जो Heshbon मा बस्ने, र अनि, बाशानका राजा, जो Ashtaroth मा र Edrei मा रहते,
1:5 मोआब देशमा यर्दन मार्फत. अनि त, मोशाले व्यवस्था व्याख्या गर्न थाले, र भन्न:
1:6 "हाम्रो प्रभु परमेश्वर Horeb हामीलाई कुरा, यसो: 'तपाईंले यो पहाड लामो पर्याप्त रहेको छ.
1:7 फिर्ता गर्नुहोस् र एमोरीहरूमाथि को पहाड जाने, र जो यो नजिकै अन्य ठाउँमा: फाँटमा साथै पहाडी क्षेत्रहरु, र दक्षिण विपरीत र समुद्रको किनारमा साथ कम-झूट स्थानहरू, कनानीहरूको भूमि, र लेबनान, रूपमा ठूलो नदी युफ्रेटिस सम्म। '
1:8 'के,' उसले भन्यो, 'म तपाईंलाई यो बुझाइएको छ. प्रविष्ट गर्नुहोस् र प्रभु तपाईंको पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो जो कि अधिकार, अब्राहाम, इसहाक, र याकूब, उहाँले तिनीहरूलाई यो दिन भनेर, र आफ्नो सन्तानलाई तिनीहरूलाई पछि। '
1:9 र म तपाईंलाई भन्नुभयो, त्यो समयमा:
1:10 'म एक्लै तपाईं धान्न सक्षम छु. प्रभु लागि, आफ्नो परमेश्वरको, तपाईं गुणन छ, र तपाईं स्वर्ग को तारा जस्तै आज, धेरै धेरै.
1:11 प्रभु May, आफ्नो बाबु परमेश्वर, हजारौं थप यो संख्या थप्न, र उहाँले तपाईंलाई आशिष सक्छ, उहाँले भन्नुभयो छ जस्तै.
1:12 एक्लै, म आफ्नो मध्यस्थता र इन्साफ र विवाद सहने बल छैन.
1:13 प्रस्ताव, तपाईं बीचबाट, बुद्धिमानी र अनुभवी मानिसहरू, जसको कुराकानी ती आफ्नो कुल भित्र सिद्ध गरिएको छ, त्यसैले म आफ्नो शासक रूपमा नियुक्त। 'गर्न सक्छ भन्ने
1:14 त्यसपछि मलाई प्रतिक्रिया: 'तपाईं के गर्ने अभिप्राय राम्रो कुरा हो।'
1:15 अनि त, म आफ्नो कुल मानिसहरूबाट लिए, बुद्धिमानी र महान, र म शासक रूपमा नियुक्त, tribunes र centurions रूपमा, र पचास भन्दा बढी र दश भन्दा बढी नेता रूपमा, जसले तपाईंलाई प्रत्येक कुरा सिकाउनुहुन्छ.
1:16 र म तिनीहरूलाई निर्देशन, यसो: 'तिनीहरूलाई सुन्नुहोस्, र न्याय के बस, उहाँले आफ्नो नागरिकहरु मध्ये एक वा एक sojourner छ कि छैन भनेर.
1:17 त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति कुनै favoritism हुनेछ. त्यसैले तपाईं सानो गर्न साथै ठूलो सुन्न पर्छ. र तपाईं जो कोहीले गरेको प्रतिष्ठा स्वीकार गर्नेछैनन्, यो लागि परमेश्वरको न्याय हो. तर केहि तपाईं गाह्रो देखिन्छ भने, त्यसपछि मलाई यो उल्लेख, र म यो सुन्न हुनेछ। '
1:18 र म तपाईं के गर्न बाध्य थिए सबै तपाईं निर्देशन.
1:19 त्यसपछि, Horeb देखि बाहिर सेट, हामी एक भयानक र ठूलो wasteland मार्फत पार, जो तपाईं एमोरी को पहाड को बाटो साथ देखे, हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो जस्तै. र हामी Kadesh-barnea आइपुगेको थियो जब,
1:20 म भने: 'तपाईं एमोरी को पहाड मा आइपुगेको छ, हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई दिनेछु जो.
1:21 प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं दिनुहुन्छ कि देशमा मा हेर्न. चढ्नु र यो अधिकार, बस प्रभुको रूपमा हाम्रो परमेश्वरले तपाईंको पुर्खाहरूले गर्न बोली छ. नडराऊ, र केहि द्वारा आत्तिनुपर्ने बन्न छैन। '
1:22 र तपाईं सबै मलाई नजिक आयो र भन्यो: 'हामीलाई देशमा विचार हुन सक्छ जो मानिसहरू पठाउन गरौं, र तरिका रूपमा गर्ने रिपोर्ट सक्छ जो हामी चढ्नु पर्छ, र जो यात्रा हामी गर्नुपर्छ शहर। रूपमा गर्न '
1:23 र पछि शब्द मलाई खुसी, म बीच तपाईं बाह्र मानिसहरूबाट पठाइएको, एक प्रत्येक कुलको देखि.
1:24 यी, तिनीहरूले बाहिर सेट थियो र हिमालहरू जानुभयो थियो जब, अङ्गुरका क्लस्टर को बेसी रूपमा टाढा आइपुगेको. र देशमा छलफल भएको,
1:25 यसको प्रजनन देखाउन क्रममा यसको फल लिइएका भएको, तिनीहरूले हामीलाई यी ल्याए, र तिनीहरूले भने: 'प्रभु हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई दिनेछु भनी भूमि राम्रो छ।'
1:26 अहिलेसम्म के तपाईं त्यहाँ जान तयार थिएनन्. बरु, प्रभु हाम्रो परमेश्वरको वचन गर्न बदगुमान हुनुको,
1:27 तपाईं आफ्नो पालमा गनगन गरे, र तपाईं भन्नुभयो: 'प्रभु हामीलाई घृणा गर्छ, र त्यसैले उहाँले हामीलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व छ, उहाँले एमोरी हातमा हामीलाई छुटकारा र हामीलाई नष्ट हुन सक्छ भनेर.
1:28 हामी कहाँ चढ्नु पर्छ गर्न? को दूत भन्दै हाम्रो हृदय आत्तिनुपर्ने छ: "द भीड धेरै ठूलो छ, र हामीलाई भन्दा taller. र शहर ठूलो हो, र पर्खालको आकाश पनि विस्तार. हामी त्यहाँ Anakim छोराहरू देखेको छु। " '
1:29 र म तपाईंलाई भन्नुभयो: 'चिन्तित नगर्नुहोस्, न त उनलाई डर गर्नुपर्छ.
1:30 प्रभु परमेश्वर आफैले, जो आफ्नो नेता, आफ्नो तर्फबाट लड्न हुनेछ, उहाँले मिश्र सबै को दृष्टि मा गरे जस्तै.
1:31 र उजाडस्थानमा (तिमीहरू देखे रूपमा), प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं लगे, आफ्नो सानो छोरा पूरा गर्न accustomed छ मानिस जस्तै, तपाईं हिंडे सबै सँगसँगै, यो स्थान मा तपाईं आइपुगे सम्म। '
1:32 र अझै, यो सबै बावजुद, तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको विश्वास गरेनन्,
1:33 बाटो मा जसले तपाईंलाई अघि गए, र जसले तपाईंलाई आफ्नो पाल पिच गर्नुपर्छ ठाउँमा बाहिर चिन्ह लगाइएको, रात मा आगो द्वारा मार्ग देखाउन, र दिनमा बादल खाँबो द्वारा.
1:34 र प्रभु तपाईंको शब्दहरू आवाज सुनेका गर्दा, क्रोधित बन्ने, उहाँले कसम खाएँ र भन्नुभयो:
1:35 'यस दुष्ट पुस्ता को मानिसहरूको कुनै पनि असल भूमि हेर्न हुनेछ, जो म आफ्नो बाबु गर्न शपथ द्वारा प्रतिज्ञा गरेका छन्,
1:36 कालेबले Jephuneh छोरा बाहेक. उहाँले आफूलाई यो देख्ने, र म त्यो उहाँलाई र उहाँको छोराहरूलाई हिंडे छ जो मा भूमि दिनेछु, किनभने उहाँले प्रभु पछि छ। '
1:37 न त मान्छे एक आश्चर्य आफ्नो indignation छ, पछि प्रभु पनि मेरो साथ रिसाए किनभने तपाईं को, र यति उहाँले भन्नुभयो: 'न त तपाईं ठाउँ प्रवेश गर्नेछ.
1:38 तर यहोशूले, नन छोरा, तपाईंको सेवक, आफूलाई आफ्नो तर्फबाट प्रविष्ट पर्छ. सल्लाह दिन्छ र यो मानिस बलियो, र उहाँले इस्राएललाई धेरै द्वारा देशमा विभाजित गर्नेछ.
1:39 आफ्नो साना, जसलाई बारेमा तिनीहरूले कैदीहरूलाई रूपमा टाढा नेतृत्व हुनेछ भन्नुभएको, र आफ्नो छोरा, यो दिन जो असल र खराब बीचको भिन्नता को नजान्ने हो, तिनीहरूले प्रविष्ट पर्छ. र म तिनीहरूलाई भूमि दिनेछु, र तिनीहरूले पाउनेछ.
1:40 तर तपाईं को लागि रूपमा, फिर्ता बारी र उजाडस्थानमा बाहिर जाने, लाल समुद्र को बाटो द्वारा। '
1:41 र तपाईंले मलाई प्रतिक्रिया: 'हामी प्रभु विरुद्धमा पाप गरेका. हामी चढ्नु र लड्न हुनेछ, बस प्रभुको रूपमा हाम्रा परमेश्वर निर्देशन छ। 'अनि हतियार सुसज्जित गरिएको होने, तपाईं पहाड लागि बाहिर सेट थिए,
1:42 प्रभु मलाई भन्नुभयो: उनलाई भन्नुहोस्: चढ्नु छैन र लड्न छैन. म तपाईं संग छैन. अन्यथा, तपाईं आफ्नो शत्रुहरू को दृष्टि मा पर्न सक्छ। '
1:43 मैले बोले, र तपाईं सुनेनन्. तर, प्रभुको आदेश विरोध, र गर्व साथ सुनिंनु, तपाईं पहाड मा जानुभयो.
1:44 अनि त, निस्किआएका भएको, एमोरी, जसले पहाड बसिरहेको थियो, तपाईं विरुद्ध आए र तपाईं अपनाए, मौरीले एक दल के थियो जस्तै. र उहाँले तपाईंलाई सबै बाटो Hormah गर्न Seir बाट प्रहार.
1:45 प्रभुको दृष्टि र तपाईं फर्कंदा र रोइरहेका थिए, उहाँले तपाईं सुन्नेछ, न त उहाँले आफ्नो आवाज गर्न सहमत इच्छुक थियो.
1:46 त्यसैले, तपाईं लामो समय को लागि Kadesh-barnea मा छाउनीमा बसोबास गरे। "
2:1 "अनि त्यहाँ बाहिर सेट, हामी लाल समुद्र तिर जान्छ जो उजाडस्थानमा आइपुगेको, प्रभु मलाई बोली थियो जस्तै. र हामी एक लामो समय को लागि माउन्ट Seir encompassed.
2:2 र परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो:
2:3 'तपाईंले लामो पर्याप्त लागि यो पहाड encompassed छ. जानुहोस्, उत्तरी तिर.
2:4 र मान्छे निर्देशन, यसो: तपाईं आफ्नो भाइहरूको सीमाना मार्फत पार गर्नेछ, एसाव छोराहरू, जो Seir मा बाँच्न, र तिनीहरूले तपाईंलाई डर हुनेछ.
2:5 त्यसैले, लगनशील भई हेरचाह, तपाईंले तिनीहरूलाई विरुद्ध सारिने नत्र. म एउटा खुट्टा मा tread गर्न सक्छन् चरण रूपमा आफ्नो भूमि देखि दिनेछु छैन पनि धेरै रूपमा लागि, किनभने म एक सम्पत्तिको रूपमा एसाव गर्न माउन्ट Seir दिनुभएको छ.
2:6 तपाईं मुद्रा को लागि तिनीहरूबाट खानेकुरा किन्न पर्छ, र तपाईं खानु पर्छ. तपाईं मुद्रा को लागि पानी तान्न पर्छ, र तपाईं लगाउँला.
2:7 प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आफ्नो हात को हरेक काममा आशिष् दिनुभएको छ. प्रभु आफ्नो परमेश्वरको, तपाईं संग वासस्थान, तपाईंको यात्रा थाह, तपाईं चालीस वर्ष भन्दा यो ठूलो उजाड मार्फत पार कसरी, र तपाईं कसरी केही घटी गरिएको छ। '
2:8 र हामी हाम्रा भाइहरूको मार्फत पारित गरेको थियो जब, एसाव छोराहरू, जो Elath देखि र Eziongeber देखि सादा बाटो द्वारा Seir मा जीवित थिए, हामी मोआबका मरुभूमि तिर जान्छ बाटो आइपुगेको.
2:9 र परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो: 'तपाईं मोआबीहरू लडाइँ हुँदैन, न त तिनीहरूलाई विरुद्ध लड्न जानु पर्छ. म तिनीहरूको भूमि तपाईंले केहि दिन छैन, किनभने म एक सम्पत्तिको रूपमा लट को छोराहरूलाई Ar दिनुभएको छ। '
2:10 को Emim बासिन्दाहरूले को पहिलो थिए, एक मान्छे ठूलो र बलियो, यस्तो ठूलो उचाइ को र, को Anakim को दौड जस्तै.
2:11 तिनीहरूले दिग्गज जस्तै मानिन्छ थिए, र तिनीहरूले Anakim छोराहरू थिए. र, साँच्चै, मोआबीहरू तिनीहरूलाई कल: को Emim.
2:12 को Horites पनि पूर्व Seir मा बस्ने. जब यी बाहिर निकालियो र नष्ट गरिएको थियो, एसाव छोराहरू त्यहाँ बस्ने, इजरायल आफ्नो सम्पत्तिको देशमा गरे जस्तै, जो प्रभु उहाँलाई दिनुभयो.
2:13 त्यसपछि, को धार भन्दा पार गर्न ताकि अप बढ्दो Zered, हामीले स्थान आइपुगेको.
2:14 त्यसपछि, हामी धार भन्दा क्रस सम्म हामी Kadesh-barnea देखि उन्नत कि समय देखि Zered, त्यहाँ तीस-आठ वर्ष थिए, युद्ध को लागि फिट थियो जो मानिसहरू सम्पूर्ण पुस्ता शिविर बाहिर खपत भएको थियो सम्म, जस्तै प्रभु sworn थियो.
2:15 आफ्नो हात तिनीहरूलाई विरुद्ध थियो लागि, तिनीहरूले शिविर बीचमा टाढा जानु थियो भनेर.
2:16 त्यसपछि, पछि सबै सिपाही खसेको थियो,
2:17 प्रभु मलाई कुरा, यसो:
2:18 'आज, तपाईं मोआबका सीमाना पार गर्नेछ, Ar नाम शहर मा.
2:19 र तपाईं अम्मोनका छोराहरू वरपर आइपुगे जब, तपाईंले तिनीहरूलाई लडाइँ छैन भनेर सावधान, न त लड्न उत्प्रेरित हुनुपर्छ. म अम्मोनका छोराहरू भूमि देखि दिनेछु लागि, किनभने म एक सम्पत्तिको रूपमा लट छोराहरू यसलाई दिइएको छ। '
2:20 यो दिग्गज भूमि हुन प्रतिष्ठित थियो. र दिग्गज पटक विगतमा त्यहाँ बस्ने, ती जसलाई अम्मोनीहरूलाई को Zamzummim कल.
2:21 तिनीहरूले एक मान्छे छन्, ठूलो र धेरै, उच्च कद को र, को Anakim जस्तै, जसलाई प्रभु आफ्नो अनुहार अघि टाढा सखाप. र उहाँले तिनीहरूलाई ती ठाउँमा त्यहाँ बस्न कारण,
2:22 उहाँले एसाव छोराहरू लागि गरेको थियो जस्तै, जो Seir मा बाँच्न, को Horites बाहिर wiping र तिनीहरूलाई आफ्नो भूमि निम्त्याउने, जो पनि वर्तमान समय अधिकार.
2:23 त्यसै गरी यस Hevites, जो गाजा रूपमा टाढा सानो गाउँमा बस्ने थिए, को Cappadocians द्वारा निकालिदिए, जो काप्पाडोसिया देखि गयो, तिनीहरूले सखाप र आफ्नो ठाउँमा बस्ने.
2:24 'खडा र धार Arnon पार! हेर, म सीहोन बुझाइएको छ, Heshbon राजा, एमोरी, आफ्नो हातमा, र त्यसैले, आफ्नो भूमि अधिकार गर्न सुरु र उहाँको विरुद्धमा युद्ध मा संलग्न.
2:25 आज म आतंक पठाउन सुरु र स्वर्गमा सबै अन्तर्गत बाँचिरहेका छौं जसले मानिसहरूका बीचमा तपाईं को भय हुनेछ, ताकि, तिनीहरूले आफ्नो नाम सुन्दा, तिनीहरूले डर हुन सक्छ, र एक महिला दिने जन्म तरिका मा डर हुन सक्छ, र वेदनामा द्वारा gripped हुन सक्छ। '
2:26 त्यसैले, म सीहोन गर्न Kedemoth को उजाडस्थानमा देखि दूत पठाएको, Heshbon राजा, शान्तिपूर्ण शब्दहरू, यसो:
2:27 'हामी आफ्नो भूमि मार्फत पार. हामी सार्वजनिक तरिका द्वारा अग्रिम हुनेछ. हामी अलग बारी छैन, न सही गर्न, न त बायाँ.
2:28 मूल्य लागि हामीलाई खाना बेच्न, हामी खान सक्छ भनेर. पैसा को लागि पानी हामीलाई प्रदान, र त हामी पिउन हुनेछ. हामी मात्र तपाईं हामीलाई पास गर्न अनुमतिको अनुरोध,
2:29 जस्तै एसाव छोराहरू गरेका, जो Seir मा बाँच्न, र मोआबीहरू, जो Ar मा पालन, जब सम्म हामी यर्दन मा आइपुग्दा, र हामी हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई दिनेछु जो देशमा पार। '
2:30 र सीहोन, Heshbon राजा, हामीलाई गर्न खण्डमा प्रदान गर्न इच्छुक थियो. प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरले आफ्नो आत्मा कठोर थियो, र आफ्नो हृदय fastened थियो, ताकि उहाँले आफ्नो हातमा वितरित हुनेछ, बस रूपमा अब देख्न.
2:31 र परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो: 'हेर, म तपाईंलाई सीहोन र आफ्नो भूमि उद्धार गर्न थालेका छन्. यो अधिकार गर्न थाल्छन्। '
2:32 र सीहोन आफ्ना सबै मानिसहरूलाई हामीलाई भेट्न बाहिर गए, Jahaz मा लड्न.
2:33 र हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई उहाँको वितरण. र हामी उहाँलाई तल प्रहार, आफ्नो छोरा र आफ्ना सबै मानिसहरूलाई.
2:34 र हामी सबै समयमा आफ्नो शहर जफत, मृत्यु राख्दै आफ्नो बासिन्दाहरू: मानिसहरू साथै महिला र बच्चाहरु. हामी तिनीहरूलाई को केही बाँकी,
2:35 को गाई बाहेक, जो तिनीहरूलाई लुटेका गर्नेहरूलाई को शेयर गए. र हामी शहर को भताभुंग पार्छ जफत,
2:36 Aroer देखि, जो धार Arnon को बैंक माथि छ, एक उपत्यकाका स्थित छ जो एक शहर, गिलियड गर्न सबै बाटो. हाम्रो हात बाट बच जो एक गाउँ वा शहर थिएन. हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई सबै बुझाइएको,
2:37 अम्मोनका छोराहरू भूमि बाहेक, जुन हामीले दृष्टिकोण छैन, र सबै धार Jabbok आसन्न छ, हिमाल मा र शहर, र हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई निषेधित जो सबै ठाउँमा। "
3:1 "र त्यसैले, फिर्ता गरिएका भएको, हामी बाशानका तरिका द्वारा जानुभयो. र र, बाशानका राजा, Edrei मा युद्धमा हामीलाई भेट्न आफ्नो मान्छे संग गयो गर्न.
3:2 र परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो: 'तपाईं उहाँलाई डराउनु पर्दैन. उहाँले आफ्नो हातमा वितरित गरिएको छ लागि, आफ्ना सबै मानिसहरूलाई साथै आफ्नो भूमि संग. र तपाईं उहाँलाई गर्नु पर्छ तपाईं सीहोन गर्न गरेका गरेझैं, को एमोरीहरूमाथि राजा, जो Heshbon मा बस्थे। '
3:3 त्यसैले, हाम्रो प्रभु परमेश्वर हाम्रो हातमा वितरित, अहिले र, बाशानका राजा, र आफ्ना सबै मानिसहरूलाई. र हामी बोल्न विनाश निम्ति तल तिनीहरूलाई प्रहार,
3:4 एक समयमा आफ्ना सबै शहर गर्न बर्बाद बिछाउने. हामीलाई बाट बच जो एक गाउँ छैन भयो: साठी शहर, Argob सम्पूर्ण क्षेत्र, अनि राज्यको, Bashan मा.
3:5 सबै शहर धेरै उच्च पर्खालहरु संग सुदृढ थिए, र फाटक र बारहरू संग, अनगिन्ती गाउँमा जो कुनै पर्खाल थियो बाहेक.
3:6 र हामी तिनीहरूलाई सखाप, हामी सीहोन गर्न गरेको थियो जस्तै, Heshbon राजा, हरेक शहर जलाएर, र यसको मानिसहरू, साथै महिला र बच्चाहरु रूपमा.
3:7 को गाई र शहर को भताभुंग पार्छ तर, हामी लुटेका.
3:8 र समयमा, हामी एमोरीहरूमाथि दुई राजाहरूको हात बाट भूमि लिए, जो यर्दन मार्फत थिए: को धार Arnon जहाँसम्म पहाड हेर्मोन देखि,
3:9 जो Sidonians Sirion कल, र एमोरीहरूमाथि Senir कल,
3:10 सादा स्थित छन् सबै शहर, र गिलियड र बाशानका सम्पूर्ण भूमि, Salecah र Edrei गर्न सबै बाटो, Bashan मा ओगलाई राज्यका शहर.
3:11 लागि मात्र अनि, बाशानका राजा, यस दिग्गज को दौड बाहिर छोडेर थियो. फलाम को आफ्नो ओछ्यानमा प्रदर्शनमा छ, (यो Rabbah छ, अम्मोनका छोराहरू बीचमा) लम्बाइमा नौ हात रहेको, र चार चौडाई मा, मानिसको हात को cubit को उपाय अनुसार.
3:12 र हामी देशमा नजिकै, त्यो समयमा, Aroer देखि, जो धार Arnon को बैंक माथि छ, रूपमा माउन्ट गिलादका बीचमा सम्म. र म Ruben र गाद आफ्नो शहर दिए.
3:13 त्यसपछि म गिलादका बाँकी अंश वितरण, र बाशानका सबै, अनि राज्यको, जो Argob सम्पूर्ण क्षेत्र छ, मनश्शेका कुलका एक आधा गर्न. र बाशानका सबै दिग्गज भूमि भनिन्छ.
3:14 Jair, मनश्शेका छोरा, नजिकै सबै Argob को क्षेत्र, जहाँसम्म Geshur र Maacath सीमानाहरू रूपमा. र उसले आफ्नो नाम Bashan भनिन्छ, Havvoth Jair, छ, Jair को गाउँमा, पनि वर्तमान दिन.
3:15 त्यसै गरी, Machir गर्न, म गिलियड दिनुभयो.
3:16 र Ruben र गाद को कुल गर्न, म धार Arnon रूपमा टाढा गिलादका भूमि देखि दिनुभयो, को धार र यसको दायरे को आधा, पनि धार Jabbok गर्न, जो अम्मोनका छोराहरू सीमाना साथ छ,
3:17 र उजाडस्थानमा को सादा, रूपमा यर्दन साथै, र Chinnereth सीमानाहरू, मरुभूमिमा को समुद्र गर्न सबै बाटो, जो धेरै नूनिलो छ, पूर्व तिर माउन्ट Pisgah को आधार गर्न.
3:18 र म त्यतिबेला तपाईं निर्देशन, यसो: 'प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एक सम्पत्तिको रूपमा यो भूमि तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ. सशस्त्र आफूलाई भइरहेको, आफ्नो भाइ अघि जाने, इस्राएलका छोराहरू, सबै बलियो मानिसहरू.
3:19 पत्नीलाई र साना पछि छोड्न, साथै गाई. म धेरै गाई भनेर थाहा लागि, र तिनीहरूले म तिमीलाई सुम्पिएको छ जो शहर मा रहनुपर्छ,
3:20 सम्म प्रभु तपाईंको भाइहरूलाई बाँकी प्रदान, उहाँले तपाईंलाई लागि प्रदान गरेको छ जस्तै. तिनीहरूले र, पनि, देशमा अधिकार गर्नेछन्, उहाँले यर्दन परे तिनीहरूलाई दिनेछु जो. त्यसपछि प्रत्येकले सम्पत्तिको फर्कन पर्छ, जो म तिमीहरूलाई छुट्याइयो छन्। '
3:21 त्यसै गरी, म त्यतिबेला यहोशू निर्देशन, यसो: 'तपाईंको आँखा प्रभु आफ्नो परमेश्वरको यी दुई राजाहरूलाई गरेको छ के देखेको छु. त्यसैले पनि उहाँले जो मार्फत पारित गर्नेछ सबै राज्यहरू के गर्नेछ.
3:22 तपाईंले तिनीहरूलाई डराउनु पर्दैन. प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो तर्फबाट लड्न हुनेछ। '
3:23 र म समयमा प्रभु beseeched, यसो:
3:24 'प्रभु परमेश्वरको, तपाईं आफ्नो सेवक आफ्नो महानता र आफ्नो धेरै बलियो हात प्रकट गर्न थालेका छन्. लागि कुनै अन्य भगवान छ, स्वर्गमा वा पृथ्वीमा या त, जो आफ्नो काम पूरा गर्न सक्षम छ, वा आफ्नो बल तुलना गर्न.
3:25 त्यसैले, म भन्दा पार, र म जोर्डन परे यो उत्कृष्ट भूमि हेर्न हुनेछ, र यो Singular पहाड, र लेबनान। '
3:26 र प्रभु मेरो साथ रिसाए किनभने तपाईं को, र उहाँले मलाई पालन छैन. तर उहाँले मलाई भन्नुभयो: 'यो तपाईं को लागि पर्याप्त छ. तपाईं अब यो कुरा बारे सबै मलाई बोल्न पर्छ.
3:27 Pisgah को शिखर गर्न चढ्नु, र पश्चिम आफ्नो आँखाले वरिपरि हेर्न, र उत्तर गर्न, र दक्षिण, र पूर्व, र यो हेर. लागि यो जोर्डन पार छैन.
3:28 यहोशू निर्देशन, र प्रोत्साहन र उसलाई बलियो. उहाँले यो मान्छे अगुवाई गर्नेछ लागि, र उहाँले तपाईंलाई देख्ने देशमा तिनीहरूलाई वितरण गर्नेछ। '
3:29 र हामी उपत्यकाका बाँकी, Peor तीर्थ विपरीत। "
4:1 "र अब, हे इस्राएलका, जो म तिमीहरूलाई सिकाउने छु को आदेश र इन्साफ सुन्न, ताकि, यी गरेर, तपाईं बाँच्न सक्छ, र तपाईं प्रविष्ट गर्नुहोस् र देशमा अधिकार सक्छ, जो प्रभु, आफ्नो बाबु परमेश्वर, दिनेछु.
4:2 मैले तिमीहरूलाई कुरा जो शब्द थप्न पर्छ, न तपाईं यसलाई दूर गर्नेछ. जो म तिमीहरूलाई सिकाउने छु प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आज्ञा संरक्षण.
4:3 आफ्नो आँखा प्रभु विरुद्ध बाल-peor गरेको सबै देखेको छु, के तरिका उहाँले तपाईं बीचबाट आफ्ना उपासकहरूलाई सबै चोट छ.
4:4 तर प्रभु आफ्नो परमेश्वरको पालन जसले तपाईंलाई सबै अझै जीवित छन्, वर्तमान समयका.
4:5 तपाईं म साथै आदेशहरू justices सिकाएको भनेर थाहा, बस प्रभुको रूपमा मेरो परमेश्वरले मलाई आज्ञा छ. र यति तपाईं पाउनेछ कि देशमा गर्नु पर्छ.
4:6 र तपाईं पालन र व्यवहार मा यी पूरा गर्नेछु. यस को लागि आफ्नो बुद्धि र समझ भएको मानिसहरूका को दृष्टि छ, ताकि, यी सबै आदेशहरू सुनेपछि, तिनीहरूले यसो भन्न सक्छन्: 'के, एक बुद्धिमानी र बुझ्न मान्छे, एउटा ठूलो जाति। '
4:7 न त कुनै पनि अन्य जाति त्यहाँ त ठूलो छ, जो आफ्नो देवताहरूलाई छ तिनीहरूलाई नजिकै त, हाम्रा परमेश्वर हाम्रो सबै माग गर्न उपस्थित रूपमा.
4:8 अन्य के राष्ट्र त्यहाँ समारोह छ ताकि प्रसिद्ध छ, र बस न्यायलाई, र सम्पूर्ण व्यवस्था कि म निस्कने आज आफ्नो आँखा अगाडि सेट गर्नेछ?
4:9 अनि त, ध्यान दिएर आफू र आफ्नो प्राण रक्षा. तपाईं आफ्नो आँखा देखेको छ कि शब्द बिर्सनु हुँदैन, र आफ्नो हृदय देखि टाढा कटौती होस् छैन, आफ्नो जीवन को सबै दिन भर. तपाईं आफ्नो छोरा र आफ्नो grandsons तिनीहरूलाई सिकाउन पर्छ,
4:10 तपाईं आफ्नो परमेश्वरले प्रभु Horeb मा अघि उभिए भएको दिन देखि, प्रभु मलाई कुरा गर्दा, यसो: 'मलाई मानिसहरूले भेला, तिनीहरूले मेरो शब्दहरू सुन्न सक्छ भनेर, र मलाई डर सिक्न सक्छ, तिनीहरूले पृथ्वीमा जीवित छन् कि सबै समय भर, र तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाउन सक्छ ताकि। '
4:11 र तपाईं पहाड को आधार नजिक, जो पनि स्वर्गमा तिर जल थियो. र त्यहाँ मा एक अन्धकार थियो, र बादलले, र एक तुवालो.
4:12 र प्रभु आगोको बीचमा तपाईंले कुरा. तपाईं आफ्नो शब्द को आवाज सुने, तर तपाईं सबै कुनै पनि फारम हेर्न गर्नुभयो.
4:13 र उहाँले तपाईं आफ्नो करार प्रकट, जो उहाँले तपाईंलाई पूरा गर्न निर्देशन, र उहाँले पत्थर को दुई पाटीमा लेखे जो दस शब्द.
4:14 अनि उहाँले मलाई आज्ञा, त्यो समयमा, तपाईं पूरा गर्नुपर्छ जो म तपाईं समारोह र इन्साफ सिकाउन पर्छ भनेर, देशमा तपाईं अधिकार हुनेछ कि.
4:15 अनि त, ध्यान दिएर आफ्नो प्राण रक्षा. तपाईं मा परमेश्वरले आगो को बीचमा देखि Horeb मा तपाईं बोल्नुभयो भन्ने दिन कुनै स्वरूपमा देखे.
4:16 अन्यथा, सायद धोका भइरहेको, तपाईं एक graven छवि बनाएको हुन सक्छ, पुरुष वा महिला को छवि वा,
4:17 को जनावरहरु को कुनै पनि एक स्वरूपमा, जो पृथ्वीमा हो, वा चरा को, जो स्वर्गमा अन्तर्गत उड,
4:18 वा सरीसृप को, जो पृथ्वीमा भर सार्न, वा माछा, जो पृथ्वीमा अन्तर्गत पानी मा पालन.
4:19 अन्यथा, सायद स्वर्ग आफ्नो आँखा माथि उठाने, तपाईं सूर्य र चन्द्र र स्वर्गमा सबै तारा हेर्न सक्छ, र त्रुटि द्वारा धोका भइरहेको, तपाईं पुजा गर्नु र यी कुराहरू उपासना सक्छ, जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सबै जातिका सेवाका लागि सिर्जना, जो स्वर्गमा अन्तर्गत छन्.
4:20 तर प्रभु तपाईं लिएको छ, र मिश्र को फलाम भट्टियों टाढा तपाईं नेतृत्व, उत्तराधिकार एक मान्छे छन् गर्न, यो वर्तमान दिन छ जस्तै.
4:21 र प्रभु किनभने तपाईंको शब्दहरू मेरो विरुद्धमा रिसाए, र उहाँले म जोर्डन भन्दा पार छैन भनेर कसम खाएँ, न त उत्कृष्ट भूमि प्रवेश, उहाँले तपाईंलाई दिनुहुनेछ जो.
4:22 हेर, म यो माटो मा मर्नेछन्. म जोर्डन भन्दा पार छैन. तपाईंले यसलाई पार गर्नेछ, र तपाईं Singular भूमि अधिकार गर्नेछन्.
4:23 होस् गर, नत्र तपाईं मा कहिलेकाँही प्रभु तपाईंको परमेश्वरको करार बिर्सनु, जसमा उनले तपाईंसँग गठन गरेको छ, र तिमीहरू लागि जो प्रभु प्रतिबन्ध गरेको छ ती कुराहरू एक graven स्वरूपमा बनाउन नत्र बनाइने गर्न.
4:24 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वर खपत आगो छ, एक जलन परमेश्वरको.
4:25 देशमा तपाईं छोरा र grandsons गर्भधारण हुनेछ जब पालन गर्दा, र यदि, धोका गरिएको होने, तिमीहरू कुनै पनि स्वरूपमा लागि बनाउन, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा दुष्ट पूरा, क्रोध उसलाई प्रकुपित रूपमा त,
4:26 म यो दिन स्वर्ग र पृथ्वी साक्षी कल, तपाईं चाँडै देशमा बाट नष्ट गर्नेछ भन्ने, जो, तपाईं जोर्डन भन्दा क्रस जब, तपाईं पाउनेछ. तपाईं लामो समय को लागि यो छैन बस्नेछन्; सट्टा, प्रभु तपाईं नाश.
4:27 र उहाँले सबै जातिका बीचमा तपाईं छरिनु हुनेछ, र तपाईं को केही ती जातिहरूलाई बीच रहनेछ, जो प्रभु तपाईं नेतृत्व गर्नेछन्.
4:28 र त्यहाँ, तपाईं मानिसहरूको हात द्वारा निर्मित थिए देवताहरूको सेवा गर्नेछन्: काठ को र पत्थर को देवताहरूको, जो न देख्न, न त सुन्न, न त खान, न त गन्ध.
4:29 र तपाईं प्रभु भनेर ठाउँमा आफ्नो परमेश्वरको खोजी हुनेछ जब, तपाईं उसलाई फेला पर्छ, तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उहाँको खोजी भने मात्र, र आफ्नो प्राण को सबै सङ्कष्टहरूमा.
4:30 पछि यस्तो भविष्यवाणी गरिएको छ जो यी सबै कुराहरू तपाईं फेला, अन्त समय मा, तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको फर्कन पर्छ, र तपाईं आफ्नो आवाज सुन्न हुनेछ.
4:31 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ. उहाँले तपाईंलाई त्याग्न छैन, न त उहाँले तपाईं सम्पूर्ण नाश, न त त्यो करार बिर्सनु हुनेछ, जसमा उनले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो.
4:41 त्यसपछि मोशाले तर्फ तीन शहर सेट, पूर्वी क्षेत्र तिर जोर्डन मार्फत,
4:42 उहाँले आफ्नो इच्छा विपरित आफ्नो छिमेकीलाई हत्या भएको छ भने जो कोहीले यी गर्न भाग्न सक्छ भनेर, जो उहाँको शत्रु एक दिन वा दुई पहिले थियो, र यति भनेर उहाँले यी शहर को एक भाग्न सक्ने थियो:
4:43 उजाडस्थानमा Bezer, जो Ruben कुलका फाँटमा स्थित छ; र गिलियड मा Ramoth, जो गाद कुलका छ; र Bashan मा गोलान, जो मनश्शेका कुल छ.
4:44 यो व्यवस्था छ, जो मोशाले इस्राएलका छोराहरू अघि निस्केको सेट.
4:45 र यी करार र समारोह साथै इन्साफ, जो उहाँले इस्राएलका छोराहरू कुरा, तिनीहरूले मिश्र बाट प्रस्थान गर्दा,
4:46 यर्दन मार्फत, Peor तीर्थ विपरीत बेसी मा, सीहोन देशमा, को एमोरीहरूमाथि राजा, जो Heshbon मा बस्ने, जसलाई मोशाले तल प्रहार. तदनुसार, इस्राएलका छोराहरू, मिश्रबाट प्रस्थान होने,
4:47 आफ्नो भूमि नजिकै, र ओगलाई भूमि, बाशानका राजा, को एमोरीहरूमाथि दुई राजाहरूको भूमि, जो यर्दन परे थिए, तिर सूर्य को बढ्दो:
4:48 Aroer देखि, जो धार Arnon को बैंक माथि स्थित छ, रूपमा सियोन सम्म, जो पनि Hermon भनिन्छ,
4:49 यर्दन मार्फत सम्पूर्ण सादा, यसको पूर्वी क्षेत्रबाट, रूपमा उजाडस्थानमा को समुद्र सम्म, र पनि माउन्ट Pisgah को आधार गर्न.
5:1 मोशाले इस्राएलका सबै बोलाए, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "सुन्नुहोस्, हे इस्राएलका, को समारोह र इन्साफ गर्न, जो म मा यो दिन आफ्नो कान बोल्दै छु. तिनीहरूलाई सिक्न, र काम तिनीहरूलाई पूरा.
5:2 हाम्रो प्रभु परमेश्वर Horeb हामीलाई एउटा करारमा गठन.
5:3 उहाँले हाम्रो पुर्खाहरूले संग करार बनाउन गर्नुभयो, तर हाम्रो साथ, जो जीवित र वर्तमान समय मा हो.
5:4 उहाँले हामीलाई बोल्नुभयो पर्वतमा सामना गर्न सामना, आगो को बीचमा देखि.
5:5 म मध्यस्थ थियो, म प्रभु र तपाईं बीच बीचमा थियो, त्यो समयमा, तपाईं आफ्नो शब्द घोषणा गर्न. तपाईं आगो डराएका थिए लागि, र त्यसैले तपाईंलाई पर्वतमा चढ्नु छैन. अनि उहाँले भन्नुभयो:
5:6 'म प्रभु तपाईंको परमेश्वर हुँ, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, servitude को घर देखि.
5:7 तिमी मेरो दृष्टि मा अनौठो देवताहरूको छैन पर्छ.
5:8 तपाईं आफैलाई एक graven छवि लागि बनाउन हुँदैन, केहि को न त स्वरूपमा, जो माथि स्वर्गमा छ, वा पृथ्वी तल मा, वा पृथ्वी अन्तर्गत पानी मा जो abides.
5:9 तपाईं पुजा गर्नु हुँदैन र तपाईं यी कुराहरू उपासना छैन. म प्रभु तपाईंको परमेश्वर हुँ, एक जलन परमेश्वरको, मलाई घृणा गर्नेहरूलाई तेस्रो र चौथो पुस्ता गर्न छोराहरू मा भएको पुर्खाहरूले को iniquity repaying,
5:10 र कृपा मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मेरो आदेशहरू तरिका हजारौं मा अभिनय र राख्न.
5:11 तपाईं व्यर्थमा आफ्नो परमेश्वरको प्रभुको नाम प्रयोग हुँदैन. उहाँले unpunished जानेछ लागि जो एक महत्वहीन कुरा भन्दा आफ्नो नाम लिन्छ.
5:12 विश्राम दिन को दिन पालन, त्यसैले तपाईं यसलाई पवित्र सक्छ, बस प्रभुको रूपमा आफ्नो परमेश्वरको तपाईं निर्देशन छ.
5:13 छ दिनको लागि, तपाईं श्रम हुनेछ र सबै आफ्नो काम.
5:14 सातौं विश्राम दिन को दिन छ, छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको बाँकी. तपाईंले यसलाई कुनै पनि काम हुँदैन, न त आफ्नो छोरा हुनेछ, न त छोरी, न त मानिस दास, न त महिला सेवक, न त गोरु, न त गधा, न त आफ्नो गाई को कुनै पनि, न त गर्ने sojourner आफ्नो ढोकाहरू भित्र छ, त्यसैले आफ्नो पुरुष र महिला सेवकहरू आराम गर्न सक्छ भन्ने, तपाईं जस्तै.
5:15 तपाईं पनि मिश्रको सेवकहरू थिए कि सम्झना, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको बलियो हात संग ठाउँ र एक outstretched हात टाढा तपाईं नेतृत्व. किनभने यो, तपाईं शबाथ थियो भनेर उहाँले तपाईंलाई निर्देशन छ.
5:16 आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू, बस प्रभुको रूपमा आफ्नो परमेश्वरको तपाईं निर्देशन छ, तपाईं लामो समय बाँच्न सक्छ भनेर, र यति छ कि यो देशमा तपाईं संग राम्रो हुन सक्छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
5:17 तपाईं हत्या हुँदैन.
5:18 र तपाईं व्यभिचार हुँदैन.
5:19 र तपाईं चोरी प्रतिबद्ध छैन.
5:20 न त तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई विरुद्धमा झूटा गवाही बोल्न पर्छ.
5:21 तपाईं आफ्नो छिमेकीको पत्नी Covet छैन, न त आफ्नो घर, न त आफ्नो क्षेत्र, न त आफ्नो मानिस दास, न त आफ्नो महिला सेवक, न त आफ्नो गोरु, न त आफ्नो गधा, न त सबै भन्ने बाहिर केहि आफ्नो छ। '
5:22 प्रभु पर्वतमा तपाईं को सम्पूर्ण भीड यी शब्दहरू, आगो को बीचमा र बादल र अन्धकार बाट, एक जोर आवाज, केही थप थप्नु. र उहाँले पत्थर को दुई पाटीमा तिनीहरूलाई यस्तो लेखे, जो उहाँले मलाई सुम्पिएको.
5:23 त्यसपछि, तपाईं अन्धकारको बीचमा देखि आवाज सुने पछि, र तपाईं पहाड बलिरहेको देखे, तिमी मलाई नजिक, सबै तपाईं कुल नेता र जन्म द्वारा ती ठूलो. र तपाईं भन्नुभयो:
5:24 'हेर, हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई उहाँको बडाई र आफ्नो महानता प्रकट गरेको छ. हामी आगो को बीचमा आफ्नो आवाज सुनेका, र हामी आज सिद्ध गरेका छन्, परमेश्वरको मानिस संग बोल्ने छ हुनत, मानिस बस्ने भएको छ.
5:25 त्यसैले, हामी किन मर्न गर्नुपर्छ, र यो धेरै ठूलो आगो हामीलाई किन निल्न गर्नुपर्छ? हामी अब कुनै पनि प्रभु हाम्रो परमेश्वरको आवाज सुन्न यदि लागि, हामी मर्नेछन्.
5:26 सबै प्राणी के हो, यो जीवित परमेश्वरको आवाज सुन्न भनेर, जो आगो को बीचमा देखि बोल्छ, हामी यसलाई सुनेका जस्तै, र बाँच्न सक्नेछन्?
5:27 बरु, तपाईं दृष्टिकोण र सबै हाम्रो प्रभु परमेश्वर तिमीहरूलाई भन्दछु कुराहरू सुन्न गर्नुपर्छ. र तपाईंले हामीलाई बोल्न हुनेछ, र हामी सुन्न र यी कुराहरू गर्नेछन्। '
5:28 तर प्रभु जब यो सुनेका, उहाँले मलाई भन्नुभयो: 'म यो मान्छे को शब्द को आवाज सुनेको छु, जो तिनीहरूले तपाईंलाई कुरा. याे सबै, तिनीहरूले बोलेको छु.
5:29 जो यस्तो मन छ तिनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ, त्यसैले तिनीहरू मलाई डर सक्छ, र मेरो सबै समय सबै आज्ञा पालन गर्न सक्छ, यो राम्रो तरिकाले तिनीहरूलाई र सधैंभरि आफ्नो छोरा संग हुन सक्छ भनेर?
5:30 जानुहोस् र तिनीहरूलाई भन्न: आफ्नो पाल फर्कन.
5:31 तर तपाईं को लागि रूपमा, मसँग यहाँ खडा, र म मेरो सबै आज्ञा र समारोह तपाईं कुरा हुनेछ, साथै इन्साफ. यी, तपाईंले तिनीहरूलाई सिकाउन पर्छ, तिनीहरूले भूमि तिनीहरूलाई के हुन सक्छ भनेर, जो म एक सम्पत्तिको रूपमा तिनीहरूलाई दिनेछु.
5:32 अनि त, राख्न र जो परमेश्वरले तपाईंलाई आज्ञा छ कामहरू. तपाईं अलग बारी छैन, न सही गर्न, न त बायाँ.
5:33 तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको निर्देशन छ भनेर बाटो हिंड्न पर्नेछ, तपाईं बाँच्न सक्छ भनेर, र यो तपाईं संग राम्रो हुन सक्छ, र आफ्नो दिन आफ्नो सम्पत्तिको देशमा विस्तार हुन सक्छ। ' "
6:1 "यी आदेशहरू र समारोह हो, साथै इन्साफ, जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको म तपाईंलाई सिकाउन आज्ञा दिनुभयो छ, जो तपाईं देशमा गर्नु पर्छ तपाईं यसलाई अधिकार गर्न यात्रा हुनेछ जो.
6:2 त्यसैले तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर हुन सक्छ, र आफ्नो सबै आज्ञा र आदेशहरू पालन, जो म तिमीहरूलाई entrusting छु, र आफ्नो छोरा र grandsons गर्न, आफ्नो जीवनको सबै दिन, तपाईंको दिन लामो समयसम्मको हुन सक्छ कि त.
6:3 सुन्न र पालन, हे इस्राएलका, तपाईं बस सक्छ भनेर प्रभु तपाईं निर्देशन छ रूपमा, र यो तपाईं संग राम्रो हुन सक्छ, र तपाईं गुणन हुन सक्छ सबै थप, प्रभु लागि, आफ्नो बाबु परमेश्वर, तपाईं दूध र मह संग बगिरहेको भूमि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ.
6:4 सुन्नुहोस्, हे इस्राएलका: हाम्रो प्रभु परमेश्वर एक प्रभु हुनुहुन्छ.
6:5 तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईंका परमेश्वर प्रभु प्रेम पर्छ, र आफ्नो सबै प्राण संग, र आफ्नो सबै शक्ति.
6:6 र यी शब्दहरू, जो म यो दिन तपाईं निर्देशन, आफ्नो हृदयमा हुनेछ.
6:7 र तपाईं आफ्नो छोराहरूलाई तिनीहरूलाई व्याख्या गर्नेछ. र तपाईं तिनीहरूलाई मा आफ्नो घर बसेर मनन गर्नेछु, र एउटा यात्रा मा हिड्ने, तल झूट गर्दा र माथि बढ्दो गर्दा.
6:8 र तपाईं आफ्नो हात मा एउटा चिन्ह जस्तै तिनीहरूलाई बाँध्न पर्छ, र तिनीहरूले राखिएको गरिनेछ र आफ्नो आँखा बीच सार्न पर्छ.
6:9 र तपाईं सीमा र तपाईँको घर को ढोका मा उनलाई लेख्न पर्छ.
6:10 र प्रभु तपाईंको परमेश्वरले भूमिमा तपाईं नेतृत्व हुनेछ जब, जो बारेमा उहाँले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो, अब्राहाम, इसहाक, र याकूब, र उहाँले तपाईंलाई ठूलो र उत्कृष्ट शहर दिनुभएको छ जब, जो तपाईं को निर्माण गरेन;
6:11 सामान को पूर्ण घरहरू, जो तपाईं amass थिएन; इनार, जो तपाईं खन्नुहोस् थिएन; दाखबारी र जैतून को बगैंचाहरु, जो तपाईं रोपेर थिएन;
6:12 र तपाईं खानु भएको छ जब र हुनेछ सन्तुष्ट भएको:
6:13 लगनशील भई हेरचाह, तपाईं प्रभु भूल नत्र, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, servitude को घर देखि. तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर पर्छ, र तपाईं उसलाई एक्लै सेवा गर्नेछौं, र तपाईं आफ्नो नाम कसम पर्छ.
6:14 तपाईं सबै अन्यजातिहरूको को अनौठो देवताहरूको पछि छैन जानेछौ, जसले तपाईंलाई वरिपरि छन्.
6:15 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो बीचमा एक जलन परमेश्वर हुनुहुन्छ. अन्यथा, कहिलेकाँही मा, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको उतेजना तपाईं विरुद्ध enraged हुन सक्छ, र उहाँले पृथ्वीका अनुहार टाढा तपाईं लाग्न सक्छ.
6:16 तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको लोभ्याउन छैन, तपाईं प्रलोभनमा को ठाउँमा उहाँलाई परीक्षा रूपमा.
6:17 प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आदेशहरू पालन, साथै करार र समारोह रूपमा, जो उहाँले तपाईंलाई निर्देशन छ.
6:18 र के प्रभुको दृष्टि मा खुसी र राम्रो छ, यो राम्रो तरिकाले तपाईं संग हुन सक्छ भनेर, र यति भनेर, जब तपाईं प्रविष्ट, तपाईं उत्कृष्ट भूमि अधिकार सक्छ, जो बारेमा प्रभु तपाईंको पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो
6:19 उहाँले आफ्नो सबै तपाईंले पहिले शत्रुहरू हटाउन टाढा भनेर, उहाँले बोलेको छ जस्तै.
6:20 र आफ्नो छोरा भोलि सोध्न हुनेछ जब, यसो: 'यी करार र समारोह र इन्साफ अर्थ के, जो हाम्रो प्रभु परमेश्वर हामीलाई सुम्पिएको छ?'
6:21 तपाईं उहाँलाई भनौं: 'हामी मिश्रमा फिरऊनको दासहरू थिए, र प्रभु हामीलाई बलियो हातले मिश्र टाढा नेतृत्व.
6:22 र उहाँले संकेत र विचित्रताहरू गढा, ठूलो र धेरै Grievous, मिश्रको, फिरऊन र तिनका सबै घर विरुद्ध, हाम्रो दृष्टि मा.
6:23 र उहाँले हामीलाई त्यस स्थान देखि दूर नेतृत्व, उहाँले हामीलाई नेतृत्व र हामीलाई भूमि दिनु सक्छ भनेर, जो बारेमा उहाँले हाम्रो पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो.
6:24 र प्रभु हामी यी सबै नियमहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन, र हामी हाम्रो प्रभु परमेश्वर डर गर्नुपर्छ भनेर, यो राम्रो तरिकाले हाम्रो साथ हुन सक्छ भनेर सबै हाम्रो जीवन को दिन, जस्तै यो आज हो.
6:25 र उहाँले हामीलाई दयालु हुनेछ, हामी राख्न र आफ्ना सबै आदेशहरू प्रदर्शन भने, हाम्रो प्रभु परमेश्वर को दृष्टि मा, उहाँले हामीलाई आज्ञा छ रूपमा। ' "
7:1 "प्रभु आफ्नो परमेश्वरको देशमा तपाईं नेतृत्व हुनेछ जब, जो तपाईं यसलाई हासिल गर्न ताकि प्रविष्ट हुनेछ, र उहाँले तपाईंलाई अघि धेरै जातिहरूलाई नाश हुनेछ जब, को हित्ती, र Girgashite, र एमोरी, र कनानी, र Perizzite, र Hivite, र Jebusite, तपाईं भन्दा धेरै धेरै सातवटा राष्ट्र, र तपाईं भन्दा बढी मजबूत,
7:2 र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं तिनीहरूलाई बुझाइएको छ जब, तपाईं बोल्न विनाश निम्ति तिनीहरूलाई तल प्रहार गर्नेछु. तपाईं तिनीहरूलाई संग एक सम्भ्कौता प्रवेश गर्नेछैनन्, न त उनलाई कुनै पनि दया देखाउन पर्छ.
7:3 र तपाईं विवाह तिनीहरूलाई संगत छैन. तपाईं आफ्नो छोरा आफ्नो छोरी दिन हुँदैन, न त आफ्नो छोरा को लागि आफ्नो छोरी स्वीकार.
7:4 लागि उनले आफ्नो छोरा बहकाउने हुनेछ, त्यसैले उहाँले मलाई पछ्याउने कि, र उहाँले सट्टा विदेशी देवताहरूको सेवा गर्नेछन् भनेर. र प्रभुको उतेजना enraged गरिनेछ, र उहाँले तपाईं चाँडै नाश.
7:5 त्यसैले बरु, तपाईं तिनीहरूलाई यो गर्नु पर्छ: आफ्नो वेदीहरू उल्टिनु, र आफ्नो मूर्तिहरू तोड्न, र आफ्नो पवित्र बगैंचाहरु तल कटौती, र आफ्नो graven छविहरू बाल्न.
7:6 लागि प्रभु तपाईंको परमेश्वरको पवित्र मानिसहरू हुन्. तपाईं आफ्नो विशेष मानिसहरू पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले बाहिर हुनेछ भनेर प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं छान्नुभएको छ.
7:7 यो तपाईं प्रभु तपाईं संग सामेल भएको छ नम्बर सबै राष्ट्रहरूले पार किनभने छैन र तपाईंले रोजेको छ, लागि कुनै पनि मान्छे को कम से कम धेरै छन्.
7:8 तर यो प्रभु तपाईं प्रेम छ किनभने, र आफ्नो शपथ राखिएको छ, जसमा उनले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो. र त्यो एक बलियो हातले टाढा तपाईं नेतृत्व छ, र उहाँले servitude घरमा तपाईंले उद्धार गरेको छ, फिरऊनले को हात बाट, मिश्र राजा.
7:9 र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरले आफूलाई बलियो र विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुनेछ, र उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई एक हजार पुस्तामा लागि आफ्नो आदेशहरू गर्ने राख्न ती लागि आफ्नो करार र उहाँको दया संरक्षण,
7:10 र उसलाई घृणा गर्नेहरूलाई द्रुत repaying, utterly तिनीहरूलाई बर्बाद गर्न ताकि, थप ढिलाइ बिना, चाँडै तिनीहरूलाई प्रतिपादन तिनीहरूले के योग्य.
7:11 त्यसैले, को आदेश र समारोह साथै इन्साफ राख्न, जो म यो दिन तपाईं आदेश, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई के गर्न सक्छ भन्ने.
7:12 यदि, तपाईंले यी नियमहरूले सुनेका पछि, राख्न र तिनीहरूलाई के, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको पनि तपाईं र उहाँले आफ्नो पिता शपथ खानुभयो कि कृपा आफ्नो करार पालन गर्नेछु.
7:13 र उहाँले तपाईंलाई प्रेम र तपाईं गुणा गर्नेछन्. र उहाँले आफ्नो गर्भमा को फल दिनुहुनेछ, र आफ्नो भूमि को फल: आफ्नो अन्न साथै आफ्नो पुराना, तेल, र बथान, र आफ्नो भेडाको बगाल, उहाँले तपाईंलाई यो दिन भनेर आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो जो बारेमा भूमि मा.
7:14 अनमोल तपाईं सबै मानिसहरूका बीचमा हुनेछ. कुनै एक या त लिङ्ग तपाईं बीच बंजर गरिनेछ, आफ्नो बथान बीच रूपमा मानिसहरूलाई धेरै.
7:15 प्रभु तपाईं टाढा सबै रोग हुनेछ. र मिश्र को धेरै Grievous रोगबिमारीले, जो तपाईं ज्ञात छ, उहाँले तिमीहरूमा ल्याउन छैन, तर आफ्ना शत्रुहरूलाई मा.
7:16 तपाईंले सबै मानिसहरूका निल्न पर्छ, जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं बचाउनुहुनेछ. आफ्नो आँखा तिनीहरूलाई छोडूँगा छैन, न तपाईं आफ्नो देवताहरूलाई सेवा गर्नेछौं, तिनीहरूले आफ्नो विनाश हुन नत्र.
7:17 तपाईं आफ्नो हृदयमा भन्न भने, 'यी जातिका मभन्दा धेरै छन्, त्यसैले म तिनीहरूलाई कसरी नष्ट गर्न सक्षम हुनेछ?'
7:18 चिन्तित हुन छैन. बरु, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको फिरऊनलाई र सबै मिश्रीहरू गर्न गरे के सम्झन:
7:19 धेरै ठूलो विपत्तिहरूका, जो आफ्नो आँखा देख्यो, र संकेत र विचित्रताहरू, शक्तिशाली हात र outstretched हात र, जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं दूर नेतृत्व. त्यसैले उहाँले सबै मानिसहरूलाई के हुनेछ, जसलाई तपाईं भय.
7:20 यसबाहेक, प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तिनीहरूलाई बीच hornets पठाउने, सम्म उहाँले नाश र तपाईंबाट बच गरेका सबै छरिन्छ, वा जो लुकाउन सक्षम भएको.
7:21 तपाईंले तिनीहरूलाई डर छैन, प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो बीचमा छ: ठूलो र भयानक परमेश्वर.
7:22 उहाँले आफ्नो दृष्टि यी जातिका उपभोग गर्नेछ, एक समयमा एक सानो, डिग्री गरेर. तपाईं एकैचोटि ती सबै नष्ट गर्न सक्षम हुने छैन. अन्यथा, पृथ्वीको जङ्गली जनावर तपाईं विरुद्ध वृद्धि हुन सक्छ.
7:23 अनि त, प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको दृष्टि तिनीहरूलाई प्रस्तुत हुनेछ, तिनीहरूले राम्ररी टाढा सखाप नभएसम्म र तपाईं तिनीहरूलाई मार्नु पर्छ.
7:24 र उहाँले आफ्नो हात मा आफ्नो राजा छुटकारा दिनेछु, र तिमी स्वर्ग को तल देखि आफ्नो नाम उठाउन् पर्छ. कुनै एक तपाईं सामना गर्न सक्षम हुनेछ, तपाईंले तिनीहरूलाई नाश नगरेसम्म.
7:25 आफ्नो graven तस्बिरहरू, तपाईं आगोले बाल्न पर्छ. उनीहरूले गरेका छन् जो देखि चाँदी वा सुन Covet छैन. र तपाईं आफै यी देखि केहि लागि लिन हुँदैन, तपाईं अपमान नत्र, किनभने यो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एक abomination छ.
7:26 न त तपाईंले आफ्नो घर मा मूर्ति को केहि बोक्न पर्छ, नत्र तपाईं श्रापित बन्न, जस्तै यो पनि छ. तपाईं गोबर जस्तै यो detest पर्छ, र तपाईं मालिन्य र फोहर जस्तै यो तिरस्कार गर्नेछन्, किनभने यो एक श्रापित कुरा हो। "
8:1 "सबै जो म यो दिन तपाईं entrusting छु आज्ञाहरू, तिनीहरूलाई लगनशील भई पालन गर्न हेरविचार, तपाईं बाँच्न सक्छ र गुणन गर्न भनेर, र यति भनेर, प्रवेश गरेसँगै, तपाईं भूमि अधिकार सक्छ, जो बारेमा प्रभु तपाईंको पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो.
8:2 र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं नेतृत्व जो साथ सम्पूर्ण यात्रा सम्झनेछैनँ, मरुभूमिमा मार्फत चालीस वर्ष, तपाईं दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु गर्न, र तपाईं परीक्षण गर्न, र आफ्नो प्राण मा खोल्दै थिए कुराहरू प्रकट गर्न, कि वा तपाईं आफ्नो आज्ञा पालन हुनेछ.
8:3 उहाँले आवश्यकता तपाईंलाई दुःख, र उहाँले आफ्नो खाना रूपमा मन्ना तपाईं दिनुभयो, जो तपाईं न त आफ्नो बाबु न थाह, तपाईं प्रकट रूपमा त यो रोटी द्वारा एक्लै कि मानिस जीवन छैन भनेर, तर हरेक शब्द द्वारा कि परमेश्वरको मुखबाट निस्कने जान्छ.
8:4 आफ्नो लुगा, जो तपाईंलाई ढाकिएको थियो, कुनै हालतमा उमेर कारण decayed छ, र आफ्नो खुट्टा तल थकित गरिएको छैन, पनि यो fortieth वर्ष,
8:5 तपाईं आफ्नो हृदयमा पहिचान थियो त भन्ने, मानिस आफ्नो छोरा educates जस्तै, त्यसैले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं शिक्षित छ.
8:6 त्यसैले तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सक्छ, र उहाँको मार्गमा हिंड्न, र उसलाई डर.
8:7 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको राम्रो भूमिमा तपाईं नेतृत्व गर्नेछन्: ब्रूक्स र पानी र फोहराहरू भूमि, जसमा गहिरो नदी यसको फाँटमा र पहाड देखि निस्कने फुट्छ,
8:8 बाली भूमि, जौ, र दाखबारी, जसमा नेभाराको र दारिम र भद्राक्षको रूखहरू वसन्त अप, तेल र मह भूमि.
8:9 त्यस स्थान मा, कुनै पनि आवश्यकता बिना, तपाईं आफ्नो रोटी खान र सबै कुराको एउटा प्रशस्त आनन्द पर्छ: जहाँ पत्थर फलाम जस्तै छन्, र जहाँ पीतल लागि अयस्क यसको पहाड बाहिर dug छ.
8:10 त्यसैले त, तपाईं खाएको र सन्तुष्ट भएको हुँदा, उहाँले तपाईंलाई दिइएको छ जो उत्कृष्ट भूमि लागि आफ्नो परमेश्वरको प्रभु आशीर्वाद गर्नुपर्छ.
8:11 सावधान र सतर्क हुन, मा कहिलेकाँही नत्र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको भूल हुन सक्छ, र उहाँको आज्ञा बेवास्ता, साथै इन्साफ र समारोह रूपमा, जो म यो दिन तपाईं निर्देशन.
8:12 अन्यथा, तपाईं खाएको र सन्तुष्ट भएको गरेपछि, र सुन्दर घरहरू निर्माण गरेका छन् र तिनीहरूलाई बस्थे छन्,
8:13 र बैलों बथान प्राप्त गरेका छन्, र भेडाको बगाल, सुन र चाँदीको र सबै कुराको एक plentitude,
8:14 आफ्नो हृदय माथि उठाएर हुन सक्छ, र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सम्झना छैन सक्छ, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, servitude को घर देखि,
8:15 र कसले ठूलो र भयानक उजाडस्थानमा आफ्नो नेता थियो, जसमा एक जल सास संग सर्पले थियो, र बिच्छी, र तिर्खा को सर्प, र कुनै पानी सबै. उहाँले मुश्किल रक बाहिर प्रवाहको नेतृत्व,
8:16 र उहाँले मन्ना संग उजाडस्थानमा तपाईं nourished, जो आफ्नो बाबु ज्ञात थिएन. र उहाँले कष्ट र परीक्षण गरेको थियो पछि, धेरै अन्त मा, उहाँले तपाईं मा दया.
8:17 अन्यथा, तपाईं आफ्नो हृदयमा भन्न सक्छ: 'मेरो आफ्नै बल, र मेरो आफ्नै हात शक्ति, मेरो लागि यी सबै कुराहरू निस्कने ल्याए छन्। '
8:18 तर प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सम्झना, उहाँले शक्ति तपाईंले प्रदान गरेको छ कि, उहाँले आफ्नो करार पूरा हुन सक्छ भनेर, जो बारेमा उहाँले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो, बस वर्तमान दिन प्रकट रूपमा.
8:19 तर तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको बिर्सनुभयो भने, ताकि तपाईं विदेशी देवताहरूको पालना, र सेवा र तिनीहरूलाई पुजा गर्नु: हेर, म अब तपाईं भविष्यवाणी तपाईं utterly नष्ट गर्नेछ भन्ने.
8:20 बस राष्ट्रहरूले जस्तै, जो प्रभु तपाईंको आगमन मा नष्ट, त्यसैले तपाईं पनि नष्ट गर्नेछु, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज आज्ञा पालन नगर्ने भएको छ भने। "
9:1 "सुन्नुहोस्, हे इस्राएलका: तपाईं आज भन्दा पार गर्नेछ यर्दन, राष्ट्रका अधिकार गर्न, धेरै ठूलो र आफैलाई बलियो, पनि आकाश गर्न विशाल र पर्खालले घेरिएको शहर,
9:2 एक मान्छे ठूलो र उच्च, को Anakim छोराहरू, जसलाई तिमीहरू देखेका र सुनेका, कसको विरुद्धमा कुनै एक खडा गर्न सक्षम छ.
9:3 त्यसैले, तपाईं आज थाहा पर्छ प्रभु तपाईंको आफूलाई परमेश्वरले तपाईंलाई अघि भन्दा पारित हुनेछ, एक भक्षण र खपत आगो जस्तै, दबाउन र टाढा हटाउन र utterly आफ्नो अनुहार अघि तिनीहरूलाई बर्बाद गर्न, चाँडै, उहाँले तपाईंलाई भनिएको छ जस्तै.
9:4 तपाईं आफ्नो हृदयमा भन्न हुँदैन, जब प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको दृष्टि तिनीहरूलाई नाश गर्नेछ: 'यो मेरो न्यायको छ प्रभु मलाई नेतृत्व गर्ने, त्यसैले म यो भूमि अधिकार हुन सक्छ, जबकि यी जातिहरूलाई उनीहरूको impiety को नष्ट गरिएको छ। '
9:5 यसलाई किनभने तपाईंको justices वा तपाईं प्रविष्ट हुनेछ तपाईँको हृदयको सोझो को छैन, त्यसैले तपाईं आफ्नो मुलुकमा अधिकार सक्छ. बरु, तिनीहरूले तपाईंको आगमन मा नष्ट छन् wickedly कि हुन्थे किनभने यो छ, र त प्रभु उहाँको वचन पूरा गर्न सक्छ भन्ने, जसमा उनले आफ्नो बाबु गर्न शपथ अन्तर्गत प्रतिज्ञा, अब्राहाम, इसहाक, र याकूब.
9:6 त्यसैले, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं कारण आफ्नो justices एक सम्पत्तिको रूपमा यो उत्कृष्ट भूमि दिनु छैन भनेर थाहा, लागि धेरै कडा-necked मान्छे हो.
9:7 सम्झनु, र कहिल्यै बिर्सन, तपाईं कसरी उजाडस्थानमा रिस गर्न प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सुनेपछि. तपाईं सधैं प्रभुको विरुद्ध contended छ, तपाईं मिश्रबाट गयो कि दिन देखि, पनि यो ठाउँमा.
9:8 Horeb पनि मा लागि, तपाईं उसलाई सुनेपछि, र, क्रोधित बन्ने, उहाँले तपाईंलाई नष्ट गर्न इच्छुक थियो,
9:9 जब म पहाड मा जानुभयो, म पत्थर को ट्याब्लेटको प्राप्त हुन सक्छ भनेर, जो प्रभु तपाईंसँग गठन गर्ने करारको पाटी. र म चालीस दिन र रातका लागि पर्वतमा persevered, न खाने रोटी, न त खानेपानी.
9:10 र परमप्रभुले मलाई पत्थर को दुई पाटी दिनुभयो, परमेश्वरको औंला लिखित र सबै उहाँले आगोको बीचमा देखि पर्वतमा तपाईं बोल्नुभयो भनेर शब्दहरू समावेश, मानिसहरूले गर्दा, भड्काए भइरहेको, सँगै भेला भए.
9:11 र चालीस दिन जब, र धेरै रात, पारित गरेको थियो, प्रभु मलाई पत्थर को दुई पाटी दिनुभयो, करारको को ट्याब्लेटको.
9:12 अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो: 'खडा, र यहाँ चाँडै धमकना. आफ्नो मान्छे को लागि, तपाईं मिश्र टाढा नेतृत्व कसलाई, चाँडै तपाईं तिनीहरूलाई देखाउनुभएको बाटो त्यागेर छ, र तिनीहरू को लागि एक पिघला मूर्ति गरेका छन्। '
9:13 अनि फेरि, प्रभु मलाई भन्नुभयो: 'म यो मान्छे कडा-necked छ कि बुझ्न.
9:14 मलाई देखि आउट, त्यसैले म तिनीहरूलाई नाश गर्न सक्छ भन्ने, र स्वर्गमा अन्तर्गत देखि आफ्नो नाम उठाउन्, र राष्ट्रको नियुक्त, जो यो भन्दा ठूलो र बलियो हुनेछ। '
9:15 र रूपमा म बलिरहेको डाँडाबाट घट्दो थियो, र म दुवै हात संग करार को दुई ट्याब्लेटको आयोजित,
9:16 र म तपाईंलाई प्रभु आफ्नो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको देखेका थिए, र आफूलाई लागि एक पिघला बाछो बनाएको, र चाँडै आफ्नो बाटो त्यागेका थिए, जो उहाँले तपाईंलाई प्रकट गर्नुभएको थियो,
9:17 म मेरो हात बाट ट्याब्लेटको तल फाले, र म तपाईंको दृष्टि तिनीहरूलाई भङ्ग.
9:18 र म प्रभु अघि लमतन्न परेर पसारिएका, बस अघि रूपमा, चालीस दिन र रातका लागि, रोटी खाने छैन, र पानी पिउने छैन, किनभने तपाईंका सबै पापहरू को, जो तपाईं प्रभु विरुद्ध प्रतिबद्ध थियो, र तपाईं रिस उसलाई सुनेपछि किनभने.
9:19 आफ्नो indignation र क्रोध म मानिसहरू डराउँदैनन्, जो तपाईं विरुद्ध भड्काए गरिएको थियो, ताकि उहाँले तपाईंलाई नष्ट गर्न इच्छुक थियो. र प्रभु पनि यो समयमा मलाई पालन.
9:20 त्यसै गरी, उहाँले हारून विरुद्ध vehemently रिसाए, र उहाँले तिनलाई नाश गर्न इच्छुक थियो, र म पनि त्यस्तै उहाँलाई लागि प्रार्थना.
9:21 तर आफ्नो पापको लागि रूपमा जो तपाईं प्रतिबद्ध, छ, को बाछो, यो पकड लिइरहेको, म आगो यसलाई भस्म. र टुक्रा यसलाई भंग, र धूलो गर्न सम्पूर्ण यसलाई कम, म डाँडाबाट उतरती कि धार यसलाई फाले.
9:22 त्यसै गरी, बलिरहेको मा, र प्रलोभनको मा, र Lust को लास मा, तपाईं प्रभु सुनेपछि.
9:23 र उहाँले Kadesh-barnea देखि पठाएको गर्दा, यसो, 'Ascend र देशमा अधिकार, जो म तिमीहरूलाई दिनुभएको छ,' तथापि, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आदेश spurned, र तपाईं उसलाई विश्वास गरेनन्, न त आफ्नो आवाज सुन्न इच्छुक थिए.
9:24 बरु, के तपाईं कहिल्यै विद्रोही थिए, म पहिलो तपाईंलाई थाहा गर्न थाले जब दिन देखि.
9:25 अनि त, म चालीस दिन र रातका लागि प्रभु अघि लमतन्न परेर पसारिएका राख्नु, म नम्र भएर उहाँलाई बिन्ती गरे रूपमा, उहाँले तपाईंलाई नष्ट नत्र, आफूले गर्न धम्की थियो जस्तै.
9:26 र प्रार्थना, मैले भने: 'हे प्रभु परमेश्वर, आफ्नो मान्छे र आफ्नो उत्तराधिकार नष्ट छैन, जसलाई तपाईं आफ्नो महानताको उद्धार गर्नुभएको छ, तपाईं बलियो हातले मिश्र टाढा नेतृत्व कसको.
9:27 तपाईंका सेवकहरू सम्झना, अब्राहाम, इसहाक, र याकूब. यो मान्छे को stubbornness हेर्न छैन, न त आफ्नो दुष्टताको र पापले मा.
9:28 अन्यथा, देशमा को सायद बासिन्दाहरू, जो बाहिर तपाईं हामीलाई नेतृत्व गरेको, भन्न सक्छ: "प्रभु छैन भूमिमा तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्षम थियो, जो उहाँले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा. र उहाँले तिनीहरूलाई घृणा; त्यसैले, उहाँले तिनीहरूलाई बाहिर नेतृत्व, ताकि उहाँले उजाडस्थानमा मृत्यु तिनीहरूलाई राख्नु सक्छ। "
9:29 यी आफ्नो मान्छे र आफ्नो उत्तराधिकार छन्, जसलाई तपाईं आफ्नो ठूलो बल गरेर बाहिर नेतृत्व गरेको, र आफ्नो outstretched हात संग। ' "
10:1 "त्यो समयमा, प्रभु मलाई भन्नुभयो: 'ढुङ्गा आफैलाई दुई ट्याब्लेटको लागि Hew, अघि थिए ती जस्तै, र पर्वतमा मलाई चढ्नु. र तपाईं काठ को एक जहाज बनाउन पर्छ.
10:2 र म पाटीमा लेख्न तपाईंलाई अघि भङ्ग ती थिए जो शब्द, र तपाईं जहाज तिनीहरूलाई राख्न पर्छ। '
10:3 अनि त, म setim काठ को एक जहाज गरे. र म पूर्व जस्तै पत्थर को दुई ट्याब्लेटको hewn थियो जब, म पहाड मा जानुभयो, मेरो हात मा तिनीहरूलाई भइरहेको.
10:4 र त्यो पाटीमा लेखे, कि जो अनुसार उहाँले अघि लिखित थियो, दस शब्द, जो प्रभु आगोको बीचमा देखि पर्वतमा तपाईं बोल्नुभयो, मानिसहरूलाई भेला हुँदा. अनि उहाँले मलाई तिनीहरूलाई दिनुभयो.
10:5 र डाँडाबाट फिर्ता, म descended र जहाज मा ट्याब्लेटको राखिएको, जो म बनाएको, र तिनीहरूले अब पनि त्यहाँ अझै पनि छन्, प्रभु मलाई निर्देशन गरेझैं.
10:6 त्यसपछि इस्राएलका छोराहरू तिनीहरूको शिविरमा सारियो, Beeroth देखि Jaakan छोराहरू बीचमा, Moserah मा, हारून मृत्यु र गाडे जहाँ, र आफ्नो छोरा एलाजार आफ्नो ठाउँमा पुजारीको मा स्थापना गरिएको थियो जहाँ.
10:7 त्यहा बाट, तिनीहरूले Gudgodah गए. त्यस स्थान देखि, तिनीहरूले बाहिर सेट र Jotbathah मा छाउनीमा बसोबास, पानी र बग्नेछन् एक देशमा.
10:8 त्यो समयमा, उहाँले लेवी कुलका विभाजित, उहाँले प्रभुको सन्दूक बोक्न थियो भनेर, र सेवकाईमा उहाँलाई खडा, र आफ्नो नाम मा आशिष् बोल्न, पनि वर्तमान दिन.
10:9 फलस्वरूप, लेवी आफ्ना भाइहरूलाई संग कुनै भाग वा सम्पत्तिको छ. प्रभु लागि आफूलाई आफ्नो सम्पत्तिको छ, प्रभु तपाईंको परमेश्वरले उहाँलाई प्रतिज्ञा गरेझैं.
10:10 त्यसपछि म पहाड उभिएर, पहिले जस्तो, चालीस दिन र रातका लागि. र प्रभु पनि यो समयमा मलाई पालन, र उहाँले तपाईं नष्ट गर्न इच्छुक थियो.
10:11 अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो: 'बढ्नुहोस् र मानिसहरू अघि हिंड्न, तिनीहरूले प्रविष्ट गर्नुहोस् र देशमा अधिकार ताकि, जो म तिनीहरूलाई छुटकारा भनेर आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो। '
11:1 "र त्यसैले, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम, र आफ्नो आदेश र समारोह पालन, उहाँका इन्साफ र आज्ञाहरू, सबै समय मा.
11:2 स्वीकार, यो दिनमा, आफ्नो छोरा थाहा थिएन कि कुराहरू. तिनीहरूले प्रभु तपाईंको परमेश्वरको chastisements हेर्न गर्नुभयो लागि, आफ्नो महान् कार्यहरू, र शक्तिशाली हात, र outstretched हात,
11:3 को संकेत र उहाँले मिश्र को बीचमा गरे कि काम गर्दछ, फिरऊनलाई, राजा, र आफ्नो सम्पूर्ण देशमा,
11:4 र मिश्रीहरूका सम्पूर्ण सेना गर्न, र आफ्नो घोडा र रथहरू गर्न: लाल समुद्र को पानी तिनीहरूलाई कसरी ढाकिएको तिनीहरूले तपाईंलाई पछि लाग्दा थिए, र कसरी प्रभु तिनीहरूलाई टाढा सखाप, पनि वर्तमान दिन;
11:5 उहाँले उजाडस्थानमा लागि पूरा भनेर र कुराहरू, यो स्थान मा तपाईं आइपुगे सम्म;
11:6 र Dathan र Abiram गर्न, Eliab छोराहरू, जो Reuben छोरा थियो, ती जसलाई पृथ्वीमा, यसको मुख खोल्ने, आफ्नो परिवारमा र पाल संग फसेको, र आफ्नो सम्पूर्ण पदार्थ जो संग तिनीहरूले इस्राएलका बीचमा थियो.
11:7 आफ्नो आँखा प्रभुको सबै महान कामहरू देखेका छन्, जो उहाँले पूरा भएको छ,
11:8 ताकि तपाईं आफ्नो सबै आज्ञा पालन हुनेछ, जो म यो दिन तपाईं सुम्पिन्छु, र तपाईं भनेर प्रविष्ट गर्न सक्षम र देशमा अधिकार हुनेछ, जो तिर तपाईं अग्रिम गर्दै छन्,
11:9 र यति भनेर बाँच्न सक्छ, धेरै समय सम्म, प्रभु तपाईंको पुर्खाहरूले गर्न शपथ अन्तर्गत प्रतिज्ञा जो देशमा, र आफ्नो सन्तानलाई, दूध र मह संग बगिरहेको भूमि.
11:10 देशमा लागि, जो तपाईं प्रविष्ट गर्नुहोस् र अधिकार गर्नेछन्, मिश्र देशमा रुचि छैन, जसबाट तपाईं प्रस्थान, जहाँ, जब बीउ छरिएको गरिएको छ, पानी सिंचाई गरेर ल्याए छन्, उद्यान को तरिका मा.
11:11 बरु, यो पहाडी क्षेत्रहरु र फाँटमा छ, जो स्वर्गबाट ​​वर्षा लागि प्रतीक्षा राख्नु.
11:12 र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सधैं दौरा, र आफ्नो आँखा यसलाई मा हो, वर्ष को सुरुदेखि, यसको अन्त गर्न सबै बाटो.
11:13 त्यसैले त, तिमी मेरो आज्ञा पालन यदि, जो म यो दिन तपाईं निर्देश छु, ताकि तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम, र आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राण उहाँलाई सेवा,
11:14 उहाँले आफ्नो देशमा प्रारम्भिक वर्षा र लेट वर्षा दिनेछु, ताकि तपाईं आफ्नो अन्न भेला सक्छ, र आफ्नो रक्सी, र आफ्नो तेल,
11:15 र क्रममा क्षेत्रहरू तपाईंको घास आफ्नो गाई खुवाउन, र आफूलाई खान र सन्तुष्ट हुन सक्छ त तपाईं.
11:16 होस् गर, सायद आफ्नो हृदय धोका हुन सक्छ नत्र, र तपाईं प्रभु देखि फिर्ता हुन सक्छ, र अनौठो देवताहरूको सेवा, र तिनीहरूलाई पुजा गर्नु.
11:17 र प्रभु, क्रोधित बन्ने, स्वर्ग माथि बन्द हुन सक्छ, कि वर्षा धमकना छैन त, न त पृथ्वी उनको बिरुवा उत्पादन हुनेछ, र त तपाईं चाँडै उत्कृष्ट भूमि देखि नष्ट हुनेछ, जो प्रभु दिनेछु.
11:18 आफ्नो हृदय र मन मा मेरो यी शब्दहरू राख्न, र आफ्नो हात मा एउटा चिन्ह तिनीहरूलाई रचनाहरू, र आफ्नो आँखा बीच तिनीहरूलाई व्यवस्था.
11:19 तिनीहरूलाई मनन गर्न आफ्नो छोरा सिकाउन, तपाईं आफ्नो घर मा बस्न गर्दा, र जब तपाईं सँगसँगै हिंड्न, र तपाईं सुत्न गर्दा वा माथि उठ्नेछ.
11:20 तपाईं doorposts र आफ्नो घर को फाटक मा उनलाई लेख्न पर्छ,
11:21 तपाईंको दिन गुणन हुन सक्छ कि त, र आफ्नो छोरा को दिन, प्रभु तपाईंको पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो जो देशमा, उहाँले लामो स्वर्ग पृथ्वी माथि निलम्बित छ रूपमा लागि तिनीहरूलाई यो दिन भनेर.
11:22 यदि तपाईं जो म तिमीहरूलाई entrusting छु को आज्ञा पालन को लागि, र तपाईं तिनीहरूलाई भने, ताकि तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम, र आफ्नो सबै मार्गमा हिंड्न, उहाँलाई clinging,
11:23 प्रभु आफ्नो अनुहार अघि यी सबै राष्ट्रका छरिनु हुनेछ, र तपाईं तिनीहरूलाई अधिकार गर्नेछन्, हुनत तिनीहरूले तपाईंलाई भन्दा ठूलो र बलियो छन्.
11:24 आफ्नो खुट्टा tread पर्छ जो मा तपाइँको हुनेछ हरेक ठाउँमा. मरुभूमिमा देखि, र लेबनान बाट, ठूलो नदी युफ्रेटिस देखि, जहाँसम्म पश्चिमी समुद्री रूपमा, आफ्नो सीमाना हुनेछ.
11:25 कुनै एक तपाईं विरुद्ध खडा हुनेछ. प्रभु तपाईंको परमेश्वरले आतंक फैलाउन र सबै तपाईं tread पर्छ जो मा भूमि माथि तपाईं को भय हुनेछ, उहाँले तपाईंलाई भनिएको छ जस्तै.
11:26 हेर, म आशिष् र श्राप आज आफ्नो दृष्टि मा निस्केको सेट छु.
11:27 यो आशिष् साबित हुनेछ, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आज्ञा पालन यदि, जो म यो दिन तपाईं निर्देश छु.
11:28 यो एक श्राप हुनेछ, यदि तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आज्ञा पालन छैन, तर यसको सट्टा तपाईं तरिकाबाट फिर्ता, जो म अब तपाईं प्रकट छु, र तपाईं ज्ञात छैन कि विदेशी देवताहरूको पछि हिंड्न.
11:29 यद्यपि साँच्चै, प्रभु तपाईंको परमेश्वरले भूमिमा तपाईं नेतृत्व हुनेछ जब, जो तपाईं एक Habitation लागि यात्रा गर्दै, तिमीहरूमा माउन्ट Gerizim आशिष् राख्न पर्छ, मा माउन्ट Ebal श्राप,
11:30 जो यर्दन मार्फत छन्, सूर्य को सेटिङ तिर स्लोपहरू जो तरिका पछि, कनानी देशमा, जो विपरीत गिलगालमा फाँटमा बसोबास, जो उपत्यका तिर विस्तार र टाढा ठाउँ प्रवेश नजिकै छ.
11:31 तिमी माथि पार गर्नेछ लागि जोर्डन, तपाईं भूमि अधिकार ताकि प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं दिनेछु जो, तपाईं यसलाई छ र यो अधिकार ताकि.
11:32 त्यसैले, यसलाई हेर्न तपाईं समारोह र इन्साफ पूरा गर्ने, जो म यो दिन आफ्नो दृष्टि मा राख्दै छु। "
12:1 "यी तपाईंले देशमा गर्नुपर्छ जो आदेश र इन्साफ जो प्रभु, आफ्नो बाबु परमेश्वर, दिनेछु, ताकि तपाईंले माटो मा हिंड्न पर्छ सबै दिन को समयमा यो अधिकार सक्छ.
12:2 सबै ठाउँमा जहाँ राष्ट्रका उल्टिनु, जो तपाईं पाउनेछ, उच्च पहाड मा आफ्नो देवताहरूलाई पूजा, र पहाड मा, र हरेक पत्तेदार रूखमुनि.
12:3 आफ्नो वेदीहरू छरिनु र आफ्नो मूर्तिहरू तोड्न. आगोले आफ्नो पवित्र बगैंचाहरु बाल्न र आफ्नो मूर्तिहरू नाश. ती स्थानबाट आफ्नो नाम उठाउन्.
12:4 तर तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको त्यसै छैन.
12:5 बरु, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको सबै कुल बीच चयन गर्नेछ जो ठाँउ भेट्नुपर्छ पर्छ, उहाँले त्यहाँ आफ्नो नाम सेट हुन सक्छ भनेर, र स्थानमा बास हुन सक्छ.
12:6 र तपाईं प्रस्ताव पर्छ, त्यस स्थान मा, तपाईंको holocausts र सिकार, दशांश र आफ्नो हात को पहिलो-फल, र आफ्नो भाकल र उपहार, को गाई को र भेडाको जेठो.
12:7 र तपाईंले यसलाई त्यहाँ खानु पर्छ, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा. र तपाईं सबै जो तपाईं आफ्नो हात सेट पर्छ कुराहरू आनन्दित हुनेछन्: तपाईं र तपाईंको परिवारलाई, जो आफ्नो परमेश्वरको लागि आशिष् दिनुभएको छ प्रभु.
12:8 तपाईं त्यहाँ आज हामी गरिरहेका छन् भनेर यहाँ कुराहरू के छैन: गरिरहेको प्रत्येक एक के आफूलाई राम्रो देखिन्छ.
12:9 पनि नभएसम्म वर्तमान समयको लागि, बाँकी र सम्पत्तिको पुग्नु भएन, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
12:10 तिमी माथि पार गर्नेछ यर्दन, र तपाईं देशमा बाँच्न पर्छ प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, तपाईंले सबै आसपास शत्रुबाट बाँकी हुन सक्छ भनेर, र तपाईं कुनै पनि डर बिना बाँच्न सक्छ भनेर,
12:11 प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ जो स्थानमा, त्यसैले आफ्नो नाम मा हुन सक्छ कि. कि ठाउँमा, तपाईं म निर्देशन सबै कुराहरू ल्याउन पर्छ: holocausts, र सिकार, र दशांश, र आफ्नो हात को पहिलो-फल, र तपाईं प्रभु गर्न भाकल पर्छ कि उपहार बीच सर्वश्रेष्ठ जो छ.
12:12 त्यस स्थान मा, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सामु भोजमा पर्छ: तपाईं, र आफ्नो छोरा र छोरी, तपाईंको पुरुष र महिला सेवकहरू, साथै लेवी रूपमा कसले शहर मा बास. उहाँले तपाईंलाई बीचमा कुनै अन्य भाग वा सम्पत्तिको छ लागि.
12:13 के तपाईं हेर्न कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो holocausts प्रस्ताव छैन भनेर हेरविचार.
12:14 बरु, तपाईं प्रभु तपाईंको कुल भित्रको चयन गर्नेछ जो ठाउँमा बलिदान प्रस्ताव पर्छ, र मैले तिमीहरूलाई निर्देशन पाठका गर्नु पर्छ.
12:15 त्यसैले, तपाईं खान चाहनुहुन्छ भने, र शरीरका खाने तपाईं प्रसन्न यदि, त्यसपछि मार्न र खान प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आशिष् अनुसार, जो उहाँले तपाईंलाई दिएको छ, तपाईंको शहर मा: यसलाई अशुद्ध छ कि छैन भनेर तपाईं यसलाई खान सक्छ, छ, दोष वा दोष भएको, वा यसलाई सफा छ कि छैन भनेर, छ, सारा र दोष बिना, प्रस्ताव गर्न अनुमति छ जो प्रकारको, जस्तै roe मृग र पुरुष रूपमा.
12:16 तपाईं खान छैन केवल रगत. बरु, तपाईं पानी जस्तै भुइँमा मा यो खन्याउन पर्छ.
12:17 तपाईं आफ्नो शहरहरूमा खान सक्छ आफ्नो बाली को दशांश, र आफ्नो रक्सी र तेल, आफ्नो बथान र आफ्नो बगाल जेठो, न त केहि जो तपाईं भाकल हुनेछ, वा तपाईंले spontaneously प्रस्ताव हुनेछ जुन, न त आफ्नो हात को पहिलो-फल.
12:18 तर तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सामु यी खानु पर्छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ जो स्थानमा: तपाईं, र आफ्नो छोरा, र आफ्नो छोरी, र आफ्नो मानिस दास र महिला दास, र आफ्नो शहर मा बास गर्ने लेवी. र तपाईं आनन्दित हुनेछन् र प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा जो तपाईं आफ्नो हात विस्तार हुनेछ सबै कुरा द्वारा ताजा गर्न.
12:19 होस् गर, तपाईं लेवी त्याग्न नत्र, कुनै पनि समयमा तपाईंलाई देशमा बस्ने बेला.
12:20 जब प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको सीमाना बढेको छ गर्नेछ, उहाँले तपाईंलाई भनिएको छ जस्तै, र तपाईं शरीर खान जब कि आफ्नो प्राण इच्छा,
12:21 तर यदि ठाउँ जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ, त्यसैले आफ्नो नाम हुन सक्छ कि, टाढा छ, तपाईं मार्न सक्छ, आफ्नो बथान र तपाईं हुनेछ जो आफ्नो बगाल देखि, तरिका मा म निर्देशन गरेका छन्, र तपाईं आफ्नो शहरहरूमा खान सक्छ, यो तपाईं प्रसन्न रूपमा.
12:22 बस roe मृग रूपमा र पुरुष खाएको हुन सक्छ, त्यसैले पनि यी खान सक्छ: तपाईं खान सक्छ दुवै सफा र अशुद्ध उस्तै.
12:23 यस को सावधान रहन: तपाईं रगत खान सक्छ. आफ्नो रगत लागि प्राण लागि हो. किनभने यो, तपाईं शरीर संग प्राण खान हुँदैन.
12:24 बरु, तपाईं पानी जस्तै भुइँमा मा यो खन्याउन पर्छ,
12:25 यो राम्रो तरिकाले तपाईं संग हुन सक्छ भनेर, र आफ्नो छोरा संग तपाईं पछि, प्रभुको दृष्टि मा खुसी छ के तपाईं हुनेछ जब.
12:26 तर तपाईं पवित्र र गरेको कुराहरू प्रभु वाचा, तपाईं लाग्न पर्छ र प्रभु चयन हुनेछ जो ठाउँमा ल्याउन.
12:27 र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको वेदीमा शरीरका र रगतको आफ्नो oblations प्रस्ताव पर्छ. तपाईं हुनेछ वेदी मा आफ्नो सिकार रगत बाहिर गरिब. र तपाईं आफै शरीरका खानु पर्छ.
12:28 पालन ​​र म तपाईंलाई निर्देशन सबै कुराहरू पालन, यो राम्रो तरिकाले तपाईं संग हुन सक्छ भनेर, र आफ्नो छोरा संग तपाईं पछि, निरन्तर, तपाईं के हुनेछ जब के प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा राम्रो र खुसी छ.
12:29 जब प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो अनुहार राष्ट्रहरूले अघि निर्मूल हुनेछ, जो तपाईंले तिनीहरूलाई अधिकार गर्न ताकि प्रविष्ट पर्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई अधिकार र आफ्नो देशमा बस्नेछन् गर्दा,
12:30 तपाईंले तिनीहरूलाई अनुकरण छैन भनेर सावधान, तिनीहरूले तपाईंको आगमन मा पल्टाइदिनुभयो भएपछि, र तपाईं आफ्नो समारोह खोजी छैन, यसो: 'जसरी यी जातिहरूलाई आफ्नो देवताहरूलाई पूजा गरेका छन्, त्यसैले पनि म उपासना गर्नेछन्। '
12:31 तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तिर तरिका जस्ता कार्य छैन. तिनीहरूले सबै abominations तिनीहरूका देवतालाई गरेका लागि प्रभु spurns कि, आफ्नो छोरा र छोरी भेटी, र आगो तिनीहरूलाई जल.
12:32 के म तपाईंलाई आदेश, यो केवल तपाईं गर्नु पर्छ, प्रभु लागि. तपाईं थप्न न सक्छ न त केहि घटाउनुहोस्। "
13:1 "तपाईंको बीचमा एक अगमवक्ता मा खडा हुनेछ भने, वा कसैले जसले सपना देखेका थिए कि दाबी, र उहाँले साइन र portent भविष्यवाणी गरेका छन् भने,
13:2 र उहाँले बोलेको छ के हुन्छ भने, र उहाँले तपाईं भन्नुहुन्छ, 'हामीलाई जाऔं र अनौठो देवताहरूतर्फ,'तपाईं ज्ञात छ जो, 'र हामीलाई तिनीहरूलाई सेवा गरौं,'
13:3 तपाईं अगमवक्ता वा सपनाहरु देखने को शब्दहरू सुन्न छैन. प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको तपाईं परीक्षण छ, यो स्पष्ट हुन सक्छन् भनेर कि वा तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले र आफ्नो सबै प्राण उहाँलाई प्रेम.
13:4 प्रभु आफ्नो परमेश्वरको पालना, र उसलाई डर, र उहाँका आज्ञा पालन, र आफ्नो आवाज सुन्न. उहाँलाई तपाईं सेवा गर्नेछौं, र उहाँलाई तपाईं अपनाउँछन् पर्छ.
13:5 तर सपना को कि अगमवक्ता वा forger मृत्युदण्ड गरिनेछ. प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं दूर बारी ताकि उहाँले बोलेको छ लागि, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व र जो servitude घरमा तपाईंले उद्धार, र तपाईं आफ्नो परमेश्वरले तपाईंलाई सुम्पनुभएको छ प्रभु भनेर बाटो बाट लक्षविना हिड्नु गर्न कारण ताकि. र यति तपाईं आफ्नो बीचमा देखि दुष्ट हटाउन पर्छ.
13:6 आफ्नो भाइ भने, आफ्नो आमा को छोरा, वा आफ्नो छोरा वा छोरी, वा आफ्नो पत्नी जो आफ्नो Bosom छ, वा आफ्नो मित्र, जसलाई तपाईं आफ्नो प्राण जस्तै प्रेम, गोप्य तपाईं सम्भ्काउनु गर्न इच्छुक थिए, यसो: 'हामीलाई जाऔं, र विदेशी देवताहरूको सेवा,'तपाईं न त आफ्नो बाबु न ज्ञात छ जो,
13:7 वरपरको राष्ट्रका कुनै पनि देवताहरू, यी कि निकट वा टाढा छन्, सुरुदेखि पनि पृथ्वीको अन्त गर्न,
13:8 तपाईं न उसलाई सहमत हुनुपर्छ, न त उसलाई सुन्न. र आफ्नो आँखा तपाईं उहाँलाई दया लिन भनेर उहाँलाई छोडूँगा हुँदैन र उहाँलाई ढाकछोप.
13:9 बरु, तपाईँले द्रुत मृत्यु उसलाई पर्छ. आफ्नो हात पहिलो उहाँमाथि होस्, र पछि, सबै मान्छे को हात गरौं पठाउनुभयो गर्न.
13:10 उहाँले ढुङ्गा बढ्तै द्वारा हत्या गरिनेछ. उहाँले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं टाढा आकर्षित गर्न इच्छुक थियो लागि, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, servitude को घर देखि.
13:11 त्यसैले इस्राएलका सबै सक्छन्, यो सुनेपछि, डराउनु, त्यसैले यो जस्तै कि केही कहिल्यै फेरि गरिनेछ.
13:12 यदि, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एक Habitation रूपमा दिनेछु जो आफ्नो शहर मध्ये, तपाईं कसैले भन्न सुन्न:
13:13 'Belial को छोराहरू आफ्नो बीचमा देखि प्रस्थान गरेका छन्, र तिनीहरूले शहर बासिन्दाहरू उक्साए छ, र तिनीहरूले भने छ: "हामीलाई जाऔं, र अनौठो देवताहरूको सेवा," 'तपाईं ज्ञात छ जो:
13:14 ध्यान दिएर र लगनशील भई सोध्नु, यसबारे को सत्य खोजिरहेका. र तपाईं फेला यदि भन्नुभयो थियो के निश्चित छ, र यो abomination perpetrated गरिएको छ जो एक काम हो कि,
13:15 तपाईँले द्रुत सहर बासिन्दाहरू तरवार किनारा तल प्रहार गर्नेछु. र तपाईंले यसलाई नष्ट गर्नेछु, कि यो हो सबै कुरा संग, पनि बगाल.
13:16 त्यसपछि सबै घरेलू सामान जो त्यहाँ, तपाईं आफ्नो सडकमा बीचमा सँगै भेला गर्नेछु, र तपाईंले यी आगो सेट पर्छ, शहर नै साथ, तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको लागि सबै उपभोग गर्न सक्छ भनेर, र यति छ कि यो एक अनन्त चिहान हुन सक्छ. यो अब माथि निर्माण गरिनेछ.
13:17 र त्यहाँ आफ्नो हात मा छ कि अभिशाप को केही रहनेछ, ताकि प्रभु आफ्नो उतेजना को क्रोध देखि बारी, र तपाईंले दया लाग्न सक्छ, र तपाईं गुणा सक्छ, उहाँले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो जस्तै,
13:18 तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज पालन हुनेछ जब, आफ्ना सबै आदेशहरू पालन, जो म यो दिन तपाईं entrusting छु, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा खुसी छ के तपाईं सक्छ भनेर। "
14:1 "प्रभु तपाईंको परमेश्वरको छोरा हुनुहोस्. तिमीहरू कटौती छैन, न त आफूलाई गंजा बनाउन, किनभने मरेका.
14:2 लागि एक पवित्र मानिसहरू हुन्, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको लागि. र उहाँले तपाईंलाई छनौट, तपाईं एक मान्छे विशेष हुन सक्छ भनेर आफ्नो, पृथ्वीमा सबै जातिका बाहिर.
14:3 तपाईं अशुद्ध हो कि कुराहरू खान हुँदैन.
14:4 यी पशुहरू छन् खान तपाईं जो पर्छ: को बैल, र भेडा, र बाख्रा,
14:5 को पुरुष र roe मृग, को gazelle, जंगली बाख्रा, को addax, को हरिण, को जिराफ.
14:6 एक टाप छ जो हरेक जनावर दुई भागमा विभाजित र जो पनि cud Chews, तपाईं खानु पर्छ.
14:7 तर ती जो फेरि माथि चपाउनु, तर एक विभाजित टाप छैन, तपाईं खान हुँदैन, को उँट जस्तै, को हरे, र hyrax. यी cud चपाउनु देखि, तर एक को खुर विभाजित छैन, तिनीहरूले तिमीहरूलाई अशुद्ध हुनेछ.
14:8 पनि सुँगुर, यो एक विभाजित टाप छ देखि, तर फेरि माथि चपाउनु छैन, अशुद्ध हुनेछ. आफ्नो शरीर खाएको हुन पर्छ, र तपाईं आफ्नो शवों छुन हुँदैन.
14:9 यी तपाईं पानी मा बास सबै बाहिर खानु पर्छ: जो पंख र तराजू छ, तपाईं खानु पर्छ.
14:10 जो पंख र तराजू बिना छ, तपाईं खान छैन, यी लागि अशुद्ध हो.
14:11 सबै सफा चरा, तपाईं खानु पर्छ.
14:12 तपाईं अशुद्ध हो कि भन्ने खान हुँदैन: को चीललाई जस्ता, र ग्रिफिन, र osprey,
14:13 को क्रेन, र गिद्घ, र काइट, आफ्नो प्रकारको अनुसार,
14:14 र काग कुनै पनि प्रकारको,
14:15 र अस्टीच, र उल्लू, र gull, र बाज, आफ्नो प्रकारको अनुसार,
14:16 को बकुल्लो, र हंस, र Ibis,
14:17 र समुद्र चरा, यस सिमसार कुखुरी, र रात काग,
14:18 को pelican र plover, प्रत्येक आफ्नो तरिका, त्यसै गरी यस Crested hoopoe र ब्याटिङ.
14:19 र crawls पनि जो केहि साना पखेटा अशुद्ध हुनेछ छ, र खाएको हुन पर्छ.
14:20 सबै सफा छ, तपाईं खानु पर्छ.
14:21 तर जे नै मृत्यु भएको छ, तपाईं यसलाई देखि खान हुँदैन. को sojourner यो दिन, कसले ढोकाहरू भित्र छ, उहाँले खान सक्छ भनेर, वा उहाँलाई यो बेच्न. लागि प्रभु तपाईंको परमेश्वरको पवित्र मानिसहरू हुन्. तपाईं आफ्नो आमा को दूध मा एक युवा बाख्रा जोश छैन.
14:22 प्रत्येक वर्ष, तपाईं आफ्नो सबै पृथ्वीबाट निस्कने वसन्त जो बाली बाहिर दशांश अलग पर्छ.
14:23 र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि यी खानु पर्छ, ठाउँ जसमा उहाँले चयन गर्नेछ, आफ्नो नाम त्यहाँ बोलाइएको हुन सक्छ भनेर: आफ्नो अन्न र रक्सी र तेल दशौं भाग, र बथान र आफ्नो भेडा बाट जेठो. त्यसैले तपाईं सबै समय मा प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर सिक्न सक्छ.
14:24 तर जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चुनिएको हुनेछ बाटो र ठाउँ टाढा हुँदा, र उहाँले तपाईंलाई आशिष् हुनेछ, त्यसैले तपाईं यसलाई यी सबै कुराहरू पूरा गर्न सक्षम छैनन् भनेर,
14:25 तपाईं सबै तिनीहरूलाई बेच्न पर्छ, पैसा तिनीहरूलाई बारी ताकि, र तपाईं आफ्नो हात मा ले गर्नेछ, र तपाईं प्रभु चयन गर्नेछ जो स्थानको लागि बाहिर सेट पर्छ.
14:26 र तपाईं संग जो तपाईं प्रसन्न नै पैसा किन्न पर्छ, को बथान बाट वा भेडा बाट त, र पनि रक्सी र रक्सी, र सबै आफ्नो प्राण इच्छा. र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा खानु पर्छ, र तपाईं भोजमा पर्छ: तपाईं र तपाईंको परिवारलाई.
14:27 लेवी लागि जाँदा, कसले ढोकाहरू भित्र छ, हेरविचार तपाईं उसलाई त्याग्न छैन भनेर, लागि उहाँले आफ्नो सम्पत्तिको भित्र कुनै अन्य भाग छ.
14:28 तेस्रो वर्षमा, तपाईं समयमा तपाईं को लागि जो निस्कने वसन्त सबै कुरा को अर्को दशौं भाग अलग पर्छ, र तपाईं आफ्नो ढोकाहरू भित्र यसलाई भण्डारण पर्छ.
14:29 र लेवी, जो कुनै अन्य भाग वा सम्पत्तिको तपाईंसँग छ, र आफ्नो ढोकाहरू भित्र छन् जो sojourner साथै अनाथ र विधवालाई, दृष्टिकोण र खान र सन्तुष्ट हुनेछ, त्यसैले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सबै तपाईं गर्नु पर्छ जो आफ्नो हात को काम मा तपाईं आशीर्वाद सक्छ। "
15:1 "सातौं वर्ष, तपाईं एक छूट प्रदर्शन गर्नेछन्,
15:2 जो यो क्रम अनुसार मनाइन्छ गरिनेछ. केहि कसलाई कसैलाई ऋण लिइएको छ, आफ्नो साथी वा छिमेकी वा भाइ द्वारा, यसको फिर्ती अनुरोध गर्न सक्ने छैनन्, यसलाई प्रभुको छूट को वर्ष छ किनभने.
15:3 को sojourner र नयाँ आगमन बाट, तपाईं आफ्नो फिर्ती आवश्यक हुन सक्छ. आफ्नो सँगी countryman र छिमेकीलाई देखि, तपाईं आफ्नो फिर्ती अनुरोध गर्न शक्ति हुनेछैन.
15:4 र कोही indigent वा तपाईं बीच फैलन हुन हुँदैन, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं देशमा आशीर्वाद सक्छ भनेर जो उहाँले एक सम्पत्तिको रूपमा तपाईंलाई बचाउनुहुनेछ.
15:5 तर यदि तपाईं केवल प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज पालन, र उहाँले आदेश छ कि सबै राख्न, जो कि म यो दिन तपाईं entrusting छु, उहाँले दिनुहुनेछ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जस्तै.
15:6 तपाईं धेरै जातिहरूलाई पैसा उधारो पर्छ, र तिमीहरू कुनै एक देखि बदलामा उधारो पर्छ. तिमी धेरै धेरै जातिहरूलाई शासन गर्नेछ, र कुनै एक तपाईं शासन गर्नेछ.
15:7 यदि तपाईंको भाइहरूको एक, जो आफ्नो शहर को ढोकाहरू भित्र बास, देशमा जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु, गरिबी मा पतन, तपाईं आफ्नो हृदय कठोर छैन, न त आफ्नो हात कस.
15:8 बरु, तपाईं गरिब आफ्नो हात खोल्न पर्छ, र तपाईं उहाँलाई उधारो पर्छ तपाईं आवश्यक उसलाई बुझ्ने जो.
15:9 हेरचाह, सायद नत्र एक impious विचार तपाईं भित्र छिर्न सक्छ, र तपाईं आफ्नो हृदयमा भन्न सक्छ: 'छूट को सातौं वर्ष नजिकिंदै।' अनि त तपाईं आफ्नो गरिब भाइ टाढा आफ्नो आँखा खोल्न सक्छ, उहाँलाई उधारो गर्न अनिच्छुक के उहाँले आग्रह गरेको छ. यदि यति, त्यसपछि उहाँले प्रभु तपाईं विरुद्ध कराउन सक्छ, र यो तपाईं को लागि पाप हुनेछ.
15:10 बरु, तपाईं उहाँलाई दिन पर्छ. न त तपाईं आफ्नो आवश्यकता उहाँलाई मदत craftily गर्दा केहि गर्नु पर्छ, त्यसैले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आशीर्वाद सक्छ, सबै समय मा र सबै कुरामा जो तपाईं आफ्नो हात राख्नु हुनेछ.
15:11 गरिब आफ्नो Habitation भूमि अनुपस्थित हुने छैन. यस कारण, म आफ्नो indigent र गरिब भाइ आफ्नो हात खोल्न तपाईं निर्देशन, जसले देशमा तपाईं बीचमा बसोबास.
15:12 जब आफ्नो भाइ, एक हिब्रू मानिस वा हिब्रू महिला, तपाईं बेचिएको गरिएको छ, र तपाईं छ वर्ष सेवा गरेको, सातौं वर्षमा तपाईं उसलाई स्वतन्त्र हुनेछ.
15:13 र जब तपाईं आफ्नो स्वतन्त्रता प्रदान, कुनै हालतमा तपाईं उसलाई जान टाढा खाली अनुमति पर्छ.
15:14 बरु, तपाईं उहाँलाई दिन पर्छ, आफ्नो यात्रा को लागि, आफ्नो बगाल र threshing तल्ला र कोलको देखि, जो संग प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आशिष् दिनुभएको छ.
15:15 तपाईं आफैलाई पनि मिश्र देशमा सेवा कि सम्झना, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं स्वतन्त्र. र त्यसकारण, अब म यस आदेश.
15:16 तर यदि त्यो भन्न हुनेछ, 'म प्रस्थान गर्न इच्छुक छैन,'उहाँले तपाईं र तपाईंको परिवारलाई प्रेम किनभने, र उहाँले तिनलाई तपाईंसँग रहन को लागि यो राम्रो हुनेछ भन्ने महसुस छ किनभने,
15:17 त्यसपछि तपाईं एक AWL लिन र आफ्नो कान पियर्स पर्छ, आफ्नो घर को ढोका मा. र उहाँले तपाईं पनि सधैंभरि सेवा गर्नेछौं. तपाईं पनि आफ्नो महिला सेवक तिर पनि त्यस्तै कार्य गर्नेछ.
15:18 तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईंको आँखा हटाउनु हुँदैन तपाईं निःशुल्क तिनीहरूलाई सेट गर्दा, उहाँले छ वर्ष लागि सेवा गरेको कारण, ज्यालादारी कामदारको को भुक्तानी एक तरिका योग्य मा. त्यसैले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं सबै काम मा तपाईं आशीर्वाद सक्छ.
15:19 जेठो को, आफ्नो बथान र भेडा बाट जन्म ती, तपाईं जो पुरुष सेक्स को छ प्रभु तपाईंको परमेश्वरको पवित्र पर्छ. तपाईं बैलों जेठो काम गर्न राख्न पर्छ, न त भेडा जेठो काट्नुहोस् पर्छ.
15:20 प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा, तपाईंले यी खानु पर्छ, प्रत्येक वर्ष, ठाउँ जो प्रभु चयन गर्नेछ, तपाईं र तपाईंको परिवारलाई.
15:21 तर यो एक दाग छ भने, वा लङ्गडा छ, वा अन्धो छ, वा यसलाई कुनै पनि भाग छ भने बिकृति वा debilitated, यो प्रभु तपाईंको परमेश्वरको immolated हुन पर्छ.
15:22 बरु, तपाईं आफ्नो शहर को ढोकाहरू भित्र यो खानु पर्छ. साथै सफा यी खान्छन् पर्छ समान को अशुद्ध, जस्तै roe मृग र पुरुष रूपमा.
15:23 यो एक्लै तपाईं पालन गर्नेछु: कि तपाईं आफ्नो रगत खान छैन, तर पानी जस्तै भुइँमा मा यो खन्याउन। "
16:1 "नयाँ अन्नको महिनाको निरीक्षण, बहार को सुरुमा, तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको निस्तार-चाडको पूरा हुन सक्छ भनेर. यो महिना मा लागि, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं रात मा मिश्र टाढा नेतृत्व.
16:2 र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको निस्तार-चाडको immolate पर्छ, भेडा बाट र बैलों देखि, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ जो स्थानमा, त्यसैले आफ्नो नाम त्यहाँ बास सक्छ.
16:3 तपाईं leavened रोटी संग खान छैन. सात दिन लागि खानु पर्छ, खमिर बिना, कष्ट को रोटी. तपाईं डरले मिश्रबाट प्रस्थान लागि. त्यसैले तपाईं मिश्र आफ्नो प्रस्थान दिन सम्झना हुन सक्छ, आफ्नो जीवन को सबै दिन भर.
16:4 कुनै खमिर सात दिनको लागि तपाईंको सबै दायरे मा उपस्थित हुनेछ. र बिहान द्वारा, साँझ पहिलो दिन immolated थियो जो शरीरको कुनै पनि त्यहाँ रहने छैन.
16:5 तपाईं आफ्नो शहर को कुनै पनि निस्तार-चाडको immolate सक्दैन, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, तपाईं चाहनुहुन्छ कि,
16:6 तर केवल ठाउँमा जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ, त्यसैले आफ्नो नाम त्यहाँ बास सक्छ. तपाईं साँझ निस्तार-चाडको immolate पर्छ, सूर्य को सेटिङ मा, जो तपाईं मिश्रबाट प्रस्थान गर्दा समय छ.
16:7 र तपाईं पकाउन र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ जो ठाउँमा यो खानु पर्छ, र, बिहान अप बढ्दो, तपाईं आफ्नो वासस्थानमा जानेछौ.
16:8 छ दिनको लागि, तपाईं अखमिरी रोटी खानु पर्छ. र सातौं दिन, यो प्रभु तपाईंको परमेश्वरको विधानसभा छ किनभने, तपाईं कुनै काम गर्नु पर्छ.
16:9 तपाईं त्यो दिन देखि सात हप्ता आफै नम्बर पर्छ, तपाईं अन्न क्षेत्र गर्न Sickle राख्नु भएको दिन.
16:10 र तपाईं हप्ता को भोज मनाउन पर्छ, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको, आफ्नो हात बाट स्वैच्छिक oblation संग, जो तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आशिष् अनुसार प्रस्ताव पर्छ.
16:11 र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा भोज गर्नेछन्: तपाईं, आफ्नो छोरा र आफ्नो छोरी, आफ्नो मानिस दास र आफ्नो महिला सेवक, र लेवी कसले ढोकाहरू भित्र छ, र नयाँ आगमन साथै अनाथ र विधवालाई, जसले तपाईंलाई साथ पालन, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन गर्नेछ जो स्थानमा, त्यसैले आफ्नो नाम त्यहाँ बास सक्छ.
16:12 र तपाईं मिश्रको सेवक थिए सम्झन पर्छ. र तपाईं संरक्षण र निर्देशन गरिएको छ कि कुरा पूरा हुनेछ.
16:13 त्यसै गरी, तपाईं सात दिन लागि Tabernacles को भोज मनाउन पर्छ, तपाईं बगैचा र कोलको आफ्नो फल भेला हुनेछ जब.
16:14 र तपाईं आफ्नो तिहार को समयमा भोज गर्नेछन्: तपाईं, आफ्नो छोरा र छोरी, आफ्नो मानिस दास र महिला दास, त्यसै गरी लेवी र नयाँ आगमन, यस अनाथ र विधवालाई, कसले ढोकाहरू भित्र छन्.
16:15 सात दिन लागि प्रभु चयन गर्नेछ जो ठाउँमा प्रभु तपाईंको परमेश्वरको चाडहरूमा मनाउन पर्छ. र प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको सबै बाली मा दिनुहुनेछ, र आफ्नो हात को हरेक काममा. र तपाईं आनन्दित हुनेछ.
16:16 एक वर्ष तीन पटक, आफ्नो सबै पुरुषहरु प्रभु आफ्नो परमेश्वरको उहाँले चयन गर्नेछ जो ठाँउ मा दृष्टि देखा पर्छ: अखमिरे रोटी को भोज मा, हप्ता को भोज मा, र Tabernacles को भोज मा. प्रभु खाली अघि कुनै एक देखा पर्छ.
16:17 तर प्रत्येक उहाँले हुनेछ के अनुसार प्रस्ताव पर्छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आशिष् अनुसार, उहाँले उसलाई दिनेछु जो.
16:18 तपाईं आफ्नो सबै ढोकाहरू मा न्यायाधीशहरूले र म्याजिस्ट्रेटको नियुक्त गर्नेछ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, आफ्नो कुल प्रत्येक भर, तिनीहरूले एक बस न्याय संग मान्छे न्याय हुन सक्छ भनेर,
16:19 र त पक्ष गर्न favoritism देखाउन छैन ताकि. तपाईं एक व्यक्तिको प्रतिष्ठा स्वीकार गर्नेछैनन्, न त उपहार. उपहार लागि बुद्धिमानी आँखा अन्धा र बस शब्दहरू बदल.
16:20 तपाईं justly बस के खेदो गर्नेछ, तपाईं बाँच्न र देशमा अधिकार ताकि, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
16:21 तपाईं एक पवित्र निकुन्ज रोपेर छैन, न त प्रभु आफ्नो परमेश्वरको वेदी नजिक कुनै पनि रूख रोपेर पर्छ;
16:22 तपाईं न बनाउन न त आफैलाई एक मुर्ति लागि सेट अप पर्छ. यी कुराहरू आफ्नो परमेश्वरको घृणा प्रभु। "
17:1 "तपाईंले प्रभु तपाईंको परमेश्वर भेडा वा गोरु गर्न immolate छैन, जसमा एक दाग वा सबै कुनै पनि दोष छ; यो लागि प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एक abomination छ.
17:2 जब तपाईं बीच पाइएको हुनेछ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो आफ्नो ढोकाहरू भित्रको, एक मानिस वा एक महिला जो प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा दुष्ट गरिरहेको छ, र आफ्नो करार गर्ने transgressing छ,
17:3 जाने र विदेशी देवताहरूको सेवा ताकि तिनीहरूलाई पुजा गर्नु, जस्तै सूर्य र चन्द्र रूपमा, वा स्वर्गको पाहुना कुनै पनि, जो म निर्देशन छैन,
17:4 र जब यो तपाईं रिपोर्ट गरिएको हुनेछ, र, यो सुनेपछि, तपाईं लगनशील भई प्रश्न छ र फेला यदि यो साँचो हुन, को abomination इस्राएलका गरेको भइरहेको:
17:5 तपाईं मानिस वा आफ्नो शहर को ढोकाहरू यो भन्दा दुष्ट कुरा perpetrated छ जो महिला अगाडी नेतृत्व गर्नेछन्, र तिनीहरूले मृत्यु ढुंगाले हानेर गरिनेछ.
17:6 दुई वा तीन साक्षीहरूको मुख द्वारा, उहाँले जो मृत्युदण्ड गर्न नष्ट गर्नेछु छ. गर्छन् कुनै एक उहाँको विरुद्धमा एउटा मात्र व्यक्ति गवाही बोल्ने संग हत्या गर्न.
17:7 पहिलो, साक्षीहरूको हात मृत्युदण्ड गर्ने उहाँमाथि हुनेछ, र अन्ततः, मान्छे को शेष को हात पठाउनुभयो गरिनेछ. त्यसैले तपाईं आफ्नो बीचमा देखि लाग्न सक्छ दूर दुष्ट.
17:8 न्यायको एक कठिन र सन्देहपूर्ण कुरा तपाईं बीच त्यहाँ छ भन्ने कथित छ भने, रगत र रक्त बीच, कारण र कारण, कुष्ठरोग र कुष्ठरोग, र तपाईं आफ्नो ढोकाहरू भित्र न्यायाधीशहरूले शब्दहरू फरक छ कि देखेको छ भने: माथि उठ्नेछ र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन हुनेछ जो ठाउँमा चढ्नु.
17:9 र तपाईं Levitical स्टक पूजाहारीहरूले भेट्नुपर्छ पर्छ, र न्यायाधीश, जो त्यतिबेला तिनीहरूलाई बीच हुनेछ, र तपाईं तिनीहरूलाई को सोध्नु पर्छ, र तिनीहरूले न्यायको सत्य तपाईं प्रकट हुनेछ.
17:10 र उनीहरूले भन्नेछन् जो स्वीकार गर्नेछु, ठाउँ मा preside गर्नेहरूलाई प्रभु चयन हुनेछ जो, र जो तिनीहरूले तपाईंलाई सिकाउन हुनेछ,
17:11 आफ्नो व्यवस्था संग अनुसार मा, र तपाईं आफ्नो वाक्य पालना गर्नेछन्. न त तपाईं सही गर्न वा बायाँ तर्फ बारी पर्छ.
17:12 तर जसले घमण्डी हुनेछ, जो सेवक प्रभु तपाईंको परमेश्वरको त्यतिबेला पुजारी क्रम आज्ञा पालन गर्न अनिच्छुक, र न्यायाधीश उर्दी, कि मानिस मर्नेछन्. र त तपाईं लिन पर्छ टाढा इजरायल बाट दुष्ट.
17:13 र मान्छे यस बारेमा सुन्दा, तिनीहरूले डर हुनेछ, त्यसैले कुनै एक कि, त्यस समय देखि, गर्व साथ सुनिनु हुनेछ.
17:14 तपाईं भूमि मा प्रवेश गर्नेछ जब प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, र तपाईंले यसलाई अधिकार, र तपाईंले यसलाई बस्ने, र तपाईं भन्न, 'म मलाई राजा नियुक्त गर्नेछ, जस्तै सबै आसपास राष्ट्रका गरेका,'
17:15 जसलाई प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको भाइहरूको संख्या बीचमा छनौट तपाईंले नियुक्त गर्नेछ. तपाईं अर्को मान्छे राजा को एक मानिस बनाउन सक्नुहुन्छ, एक होइन जसले आफ्नो भाइ.
17:16 र जब त्यो राजा नियुक्त गरिएको हुनेछ, उहाँले लागि घोडाहरू गुणन छैन, न त मानिसहरूलाई मिश्र फिर्ता नेतृत्व, आफ्नो घोडसवारले संख्या द्वारा उच्च होने, प्रभु तपाईं निर्देशन छ विशेष गरी देखि कहिल्यै एउटै तरिका साथ फर्कन.
17:17 उहाँले धेरै पत्नीहरू छैन, जो आफ्नो मन आकर्षणलाई सक्छ, र उहाँले चाँदी र सुनको विशाल वजन छैन पर्छ.
17:18 त्यसपछि, उहाँले आफ्नो राज्यको सिंहासन मा विराजमान गरिएको छ पछि, उहाँले एक मात्रा मा यो व्यवस्था को व्यवस्था आफूलाई लागि लेख्न पर्छ, को Levitical कुलको पूजाहारीहरूले एक प्रतिलिपि प्रयोग.
17:19 र उहाँले उसलाई यो पाउनेछ, र त्यो आफ्नो जीवनको सबै दिन पढ्न पर्छ, उहाँले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर सिक्न सक्छ भनेर, र आफ्नो शब्द र समारोह राख्न, जो व्यवस्थामा निर्देशन गर्दै.
17:20 र यति आफ्नो हृदय आफ्ना भाइहरूलाई भन्दा अहङ्कारको संग उच्च बन्न सक्छ, न त सही गर्न वा बायाँ तर्फ बारी, त्यसैले उहाँ र तिनका छोराहरूलाई इस्राएलको एक लामो समय को लागि शासन सक्छ। "
18:1 "पूजाहारीहरू र लेवीहरूको, र सबै नै कुलको देखि गर्ने हो, इस्राएलका बाँकी संग कुनै भाग वा उत्तराधिकार पाउनेछ. तिनीहरूले प्रभु र आफ्नो oblations बलिदान खानु पर्छ लागि.
18:2 र तिनीहरूले भाइहरूको सम्पत्तिको देखि अरू केही प्राप्त गर्नेछ. प्रभु लागि आफूलाई आफ्नो सम्पत्तिको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जस्तै.
18:3 यो मान्छे देखि पूजाहारीहरूले लागि recompense हुनेछ, र जो सिकार प्रस्ताव ती बाट, उनि एक गोरु वा भेडा immolate हुनेछ कि. तिनीहरूले पुजारी गर्न काँध र स्तन दिन पर्छ,
18:4 अन्न को पहिलो-फल, रक्सी, र तेल, र भेडाको थ्रेड देखि ऊन को एक भाग.
18:5 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वर आफैले आफ्नो सबै कुल बाहिर उहाँलाई छान्नुभएको छ, उहाँले प्रभुको नाम खडा र मन्त्री हुन सक्छ भनेर, उसलाई र तिनका छोराहरूलाई, सधैंभरि.
18:6 एक लेवीले पनि शहर को एक बाट प्रस्थान यदि, इस्राएलका सबै भर, जसमा उहाँले बसोबास, र उहाँले विल्स र प्रभु चयन हुनेछ जो ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने,
18:7 उहाँले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाममा मन्त्री हुनेछ, रूपमा आफ्ना सबै भाइहरूलाई के, लेवीहरूले, जो प्रभुको दृष्टि त्यस समयमा खडा हुनेछ.
18:8 बाँकी पनि प्राप्त उहाँले खाना को नै भाग प्राप्त गर्नेछन्, आफ्नै शहर उहाँलाई कारण हो जो कि बाहेक, आफ्नो बाबु बाट उत्तराधिकारी द्वारा.
18:9 तपाईं भूमि मा प्रवेश गर्नेछ जब प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, तपाईंले ती जातिहरूलाई को abominations अनुकरण गर्न इच्छुक छैनन् भनेर सावधान.
18:10 त्यहाँ नदेऊ आफ्नो छोरा वा छोरी आगो मार्फत तिनीहरूलाई प्रमुख द्वारा शुद्ध हुनेछ जसले तपाईंलाई एक बीचमा फेला, न त एक जो seers consults, न त सपना वा omens बताउँछ जसले एक. त्यहाँ नदेऊ तपाईं बीच पाउन एक जो तन्त्रमन्त्रमा अभ्यासहरू,
18:11 न त एक जो spells प्रयोग, न त एक जो शैतानिक आत्माको consults, न त एक diviner, न त एक मरेका बाट सत्य खोज्ने.
18:12 प्रभु लागि यी सबै कुराहरू abominates. र, किनभने यी दुष्ट तरिका, उहाँले आफ्नो आगमन तिनीहरूलाई नाश गर्नेछ.
18:13 तपाईं सिद्ध र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको साथ दोष बिना हुनेछ.
18:14 यी जातिका, जसको भूमि तपाईं अधिकार गर्नेछन्, तिनीहरूले soothsayers र diviners सुन्न. तर तपाईं अन्यथा प्रभु तपाईंको परमेश्वरले निर्देशन गरिएको छ.
18:15 प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको राष्ट्र बाट र आफ्नो भाइ तपाईंले लागि अगमवक्ता खडा हुनेछ, मलाई पनि त्यस्तै. तपाईं उहाँलाई सुन्न पर्छ,
18:16 तपाईं Horeb मा प्रभु तपाईंको परमेश्वरको बिन्ती गरेझैं, सम्मेलन भेला हुँदा, र तपाईं भन्नुभयो: 'मलाई अब प्रभु मेरो परमेश्वरको आवाज सुन्न गरौं, र मलाई अब यो धेरै ठूलो आगो देख्नु गरौं, नत्र म मर्छन्। '
18:17 र परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो: 'तिनीहरूले यी सबै कुराहरू बोलेको छु.
18:18 म तिनीहरूलाई लागि अगमवक्ता खडा हुनेछ, आफ्ना भाइहरूलाई बीचमा देखि, तपाईं समान. र म आफ्नो मुख मेरो शब्दहरू राख्नेछ, र उहाँले म उसलाई निर्देशन हुनेछ सबै कुराहरू तिनीहरूलाई बोल्न हुनेछ.
18:19 तर छैन इच्छुक जो कोहीले आफ्नो शब्दहरू सुन्न विरुद्ध, जो उहाँले मेरो नाम बोल्न हुनेछ, म avenger रूपमा निस्कने खडा हुनेछ.
18:20 तर एक अगमवक्ता यदि, अहङ्कारको दुषित भएको होने, बोल्न छनोट, मेरो नाम मा, म उहाँलाई निर्देशन गरे जो कुरा भन्न, वा विदेशी देवताहरूको नाम बोल्न, उहाँले मृत्युदण्ड गरिनेछ.
18:21 तर यदि, मौन विचार मा, तपाईं प्रतिक्रिया: "म कसरी प्रभु बोली छैन जो शब्द पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ?"
18:22 तपाईं यो साइन पाउनेछ. जो भने कि अगमवक्ता प्रभुको नाम हुँदैन मा भविष्यवाणी, त्यसपछि प्रभु यो बोली छैन. बरु, अगमवक्ता आफ्नै मन को सुनिंनु मार्फत यसलाई गठन गरेको छ. र यस कारण लागि, तपाईं उसलाई डर छैन। ' "
19:1 "प्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाश हुनेछ जब राष्ट्रहरूले, जसको भूमि उहाँले तपाईंलाई बचाउनुहुनेछ, र जब तपाईं यो अधिकार र यसको शहर र भवन बस्ने,
19:2 तपाईं भूमि को बीचमा तीन शहर आफूलाई लागि अलग पर्छ, जो प्रभु एक सम्पत्तिको रूपमा दिनेछु,
19:3 ध्यान दिएर सडक फर्श. र तपाईंले तीन भागमा उत्तिकै आफ्नो भूमि को सम्पूर्ण प्रान्त विभाजन गर्नेछ, किनभने हत्या को भाग्न बाध्य छ जसले एक ठाउँ हुन सक्छ भनेर नजिकैको जो उहाँले उम्कन गर्न सक्षम हुन सक्छ गर्न.
19:4 यो भाग्छन् गर्ने हत्यारा को व्यवस्था हुनेछ, जसको जीवन सुरक्षित छ. जसले आफ्नो इच्छा विपरित आफ्नो छिमेकीलाई तल प्रहार, र जो हिजो उहाँको विरुद्धमा कुनै घृणा र दिन अघि गरेका साबित भएको छ,
19:5 उहाँले जंगल मा उसलाई गएका थिए यस्तो छ कि काठ काट्न गर्न बस, र रूख काटेर मा, बन्चरो आफ्नो हात देखि उतर, वा फलाम को ह्यान्डल देखि उतर, र यो आफ्नो मित्र प्रहार तिनलाई मारे: उहाँले माथि यसो भएको शहर को एक भाग्न पर्छ, र उहाँले बाँच्न पर्छ.
19:6 अन्यथा, सायद उहाँलाई जसको रगत निकट नातेदार बगाएको थियो, आफ्नो शोक द्वारा उत्प्रेरित, पछि लाग्न र उहाँलाई पक्रनु सक्छ, बाटो निकै लामो छ नभएसम्म, र उहाँले छैन मृत्यु निम्ति दोषी जो को जीवन प्रहार सक्छ, उहाँले slain थियो उहाँको विरुद्धमा कुनै पूर्व घृणा थियो कि प्रदर्शन गरेका थिए देखि.
19:7 यस कारण, म तपाईंलाई एउटा अर्को देखि बराबर दूरी मा तीन शहर विभाजन गर्न निर्देशन.
19:8 र प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको सीमाना बढेको छ जब, उहाँले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो जस्तै, र उहाँ तिमीहरूका सबै देशमा दिनुभएको छ जब उहाँले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि,
19:9 (तर यो तपाईं आफ्नो आज्ञा पालन र यो दिन तपाईं म निर्देशन जो कुराहरू के हुनेछ मात्र भने त छ, ताकि तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम, र सबै समय मा उहाँको मार्गमा हिंड्न) तिमीहरू तीन अन्य शहर लागि थप्न पर्छ, र यति माथि यसो तीन शहर को संख्या दोहोरो पर्छ.
19:10 त्यसैले निर्दोष रगत देशमा बीचमा छैन बगाएको हुन सक्छ प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं अधिकार दिनेछु जो, नत्र तपाईं रगतको दोषी हुन.
19:11 तर यदि जो कोहीले, आफ्नो छिमेकीको घृणा भइरहेको, आफ्नो जीवनको लागि लुकेर मा अन्यथा हुनेछ, र, माथि बढ्दो, उसलाई प्रहार हुनेछ, र मृत्यु हुनेछ, र त्यो शहर को एक भागे छन् भने माथि भनिएको,
19:12 आफ्नो शहर को प्राचीन पठाउन पर्छ, र तिनीहरूले शरण को ठाउँमा उहाँलाई लिन पर्छ, र तिनीहरूले बगाएको थियो उहाँलाई जसको रगत सापेक्षिक हातमा उहाँलाई छुटकारा दिनेछु, र उहाँले मर्नेछन्.
19:13 तपाईं उहाँलाई दया लिन हुँदैन, र त तपाईं लिन पर्छ टाढा इजरायल बाट निर्दोष रगत, यो राम्रो तरिकाले तपाईं संग हुन सक्छ भनेर.
19:14 तपाईं लाग्न हुँदैन वा आफ्नो छिमेकीलाई को ल्यान्डमार्क सार्न, तपाईं राखेको छु पहिले जो ती, आफ्नो सम्पत्तिको मा प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु कि, देशमा तपाईं अधिकार गर्न प्राप्त हुनेछ.
19:15 एक साक्षी अर्को विरुद्ध खडा छैन, कुनै कुरा पाप वा आक्रोश हुन सक्छ. प्रत्येक शब्द दुई वा तीन साक्षीहरूको मुख द्वारा खडा गर्नेछु.
19:16 एक झूट साक्षी एक मानिस विरुद्ध खडा गरेका छन् भने, एक अपराधको को उसलाई आरोपित,
19:17 जसको मामला यो ती दिन हुनेछ जसले पूजाहारीहरू को दृष्टि मा प्रभु र न्यायाधीशहरूले खडा गर्नेछु छ ती दुवै.
19:18 र जब, धेरै मेहनती परीक्षा पछि, तिनीहरूले झूटा साक्षी आफ्नो भाइ विरुद्ध झूट भने थियो कि फेला हुनेछ,
19:19 तिनीहरूले उहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछन् उहाँले आफ्नो भाइ के गर्न अभिप्रेरित जस्तै. र यति तपाईं आफ्नो बीचमा देखि लिन पर्छ दूर दुष्ट.
19:20 त्यसपछि अरु, यो सुनेपछि, डर हुनेछ, र तिनीहरूले कुनै हालतमा यस्तो कुरा गर्न हिम्मत हुनेछ.
19:21 तपाईं उहाँलाई दया लिन हुँदैन. बरु, तपाईं एक जीवन को लागि एक जीवन आवश्यक पर्छ, एक आँखा को लागि एक आँखा, एक दाँत लागि दाँत, एक हात को लागि एक हात, एक खुट्टा को लागि एक खुट्टा। "
20:1 "तपाईं आफ्नो शत्रुहरू विरूद्ध लडाइँ गर्न बाहिर जाने भने, र तपाईं घोडसवारले र रथहरू हेर्न, र आफ्नो शत्रु सेना को भीड तपाईंको आफ्नै महान् हुनुहुन्छ भनेर, तपाईंले तिनीहरूलाई डर छैन. प्रभु आफ्नो परमेश्वरको लागि, जसले तपाईंलाई मिश्र देशमा टाढा नेतृत्व, तपाईं संग छ.
20:2 त्यसपछि, युद्धमा अब नजिक रूपमा, पुजारी अगाडि बाँध्न खडा गर्नेछु, र उहाँले यस प्रकारले मानिसहरूलाई बोल्न पर्छ:
20:3 'सुन्नुहोस्, हे इस्राएलका! आज तपाईं आफ्नो शत्रुहरू विरूद्ध लडाइँ मा संलग्न. तपाईंको हृदय डर संग अभिभूत होस् गर्छन्. चिन्तित हुन छैन. उपज छैन. तपाईंले तिनीहरूलाई कुनै खूंखार हुनुपर्छ.
20:4 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो बीचमा छ, र उहाँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो शत्रुहरूविरुद्ध contend हुनेछ, त्यसैले उहाँले peril तपाईंले उद्धार। 'गर्न सक्छ भन्ने
20:5 त्यसै गरी, को अधिकारीहरु घोषणा गर्नेछ, हरेक कम्पनी भर, सिपाहीहरूले को सुनुवाइ मा: त्यहाँ जो एक नयाँ घर निर्माण गरेको छ 'के मानिस छ, र यो समर्पित छैन? उसलाई जाने र आफ्नो घर फर्कन गरौं, सायद नत्र उहाँले युद्धमा मर्न सक्छ, र अर्को मानिस यो समर्पण सक्छ.
20:6 के मानिस छ दाखबारी लगाए छ जो, र अझै यसलाई सामान्य हुन कारण छैन, यो सबै देखि खान सक्छ भनेर? उसलाई जना देउ, र आफ्नो घर फर्कन, सायद नत्र उहाँले युद्धमा मर्न सक्छ, र अर्को मानिसले आफ्नो कार्यालय पूरा हुन सक्छ.
20:7 के मान्छे हो त्यहाँ, जो एक पत्नी betrothed छ, र उनको लिएको छैन? उसलाई जना देउ, र आफ्नो घर फर्कन, सायद नत्र उहाँले युद्धमा मर्न सक्छ, र अर्को मानिस उनको लाग्न सक्छ। '
20:8 पछि यी कुराहरू घोषणा गरिएको छ, तिनीहरूले शेष थप्न पर्छ, र मानिसहरूलाई भनौं: 'के मानिस डर बढ्तै छ त्यहाँ को छ र fainthearted छ? उसलाई जना देउ, र आफ्नो घर फर्कन, नत्र उहाँले डर गर्न आफ्ना भाइहरूलाई हृदयमा कारण, जस्तै उहाँले राम्ररी डर संग Stricken गरिएको छ। '
20:9 र सेना को अधिकारीहरु गर्दा मौन भएका छन्, र आफ्नो बोली पूरा गरेको छ, प्रत्येक एक युद्ध ज्याला आफ्नो एकाइ तयार गर्नेछ.
20:10 जब, कुनै पनि समयमा, तपाईं यसलाई युद्ध शहर दृष्टिकोण, तपाईंले पहिले शान्ति प्रस्ताव पर्छ.
20:11 यदि तिनीहरूले प्राप्त, र तपाईं गर्न ढोकाहरू खोल्न, त्यसपछि यो भएका सबै मानिसहरू सुरक्षित गरिनेछ, र तिनीहरूले आदर तिर्ने तपाईंलाई सेवा गर्नेछौं.
20:12 तर यदि तिनीहरू एउटा सम्झौता प्रवेश गर्न इच्छुक छैनन्, र तिनीहरूले युद्धमा तपाईं विरुद्ध कार्य सुरु, त तपाईं यसलाई घेर्नु पर्छ.
20:13 र प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको हातमा यो बुझाइएको छ जब, तपाईं यसलाई मा छ जो कोहीले तल प्रहार गर्नेछु, पुरुष लिङ्ग को, तरवार किनारा संग,
20:14 तर महिला र केटाकेटीलाई, न त शहर भित्र छन् कि गाई र अन्य कुराहरू. र तपाईं सैनिकहरू गर्न सबै plunder विभाजित गर्नेछ, र तपाईं भताभुंग पार्छ आफ्नो शत्रुहरूबाट खानु पर्छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
20:15 त्यसैले तपाईं जो तिमी देखि ठूलो दूरी मा हो सबै शहर गर्न गर्नु पर्छ, तपाईं एक सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो जो छैन शहर बीच ती.
20:16 तर तपाईं दिइएको गरिनेछ जो ती शहर बीच, तपाईं बाँच्न सबै जो कोहीले अनुमति छैन.
20:17 बरु, तपाईं तरवार किनारा संग मृत्यु तिनीहरूलाई राख्नु पर्छ, विशेष: को हित्ती र एमोरी र कनानी, को Perizzite र Hivite र Jebusite, बस प्रभुको रूपमा आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आज्ञा छ.
20:18 अन्यथा, तिनीहरूले तपाईंलाई जो तिनीहरूले आफ्नै देवताहरूको लागि प्रतिबद्ध छ सबै abominations गर्न सिकाउन सक्छ. र त तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नेछन्.
20:19 तपाईं लामो समय को लागि शहर घेर हुनेछ जब, र तपाईं fortifications यसलाई encircled हुनेछ, तपाईं यसलाई लडाइँ हुन सक्छ भनेर, तपाईंले एक खान सक्षम छ देखि रूखहरू काट्न पर्छ, न तपाईं आसपास क्षेत्रमा अक्षहरूमा संग devastation कारण पर्छ. यसको लागि रूख छ, र एक मानिस. यो तपाईं विरुद्ध लडिरहेका छन् गर्नेहरूको संख्या वृद्धि गर्न सक्षम छैन.
20:20 तर यदि छन् जो फलदायी कुनै पनि रूखहरू छन्, तर जंगली हो, र यी यदि अन्य प्रयोगहरू लागि फिट छन्, त्यसपछि तल तिनीहरूलाई कटौती, र मिसिन बनाउन, तपाईं विरुद्ध contending छ कि शहर कब्जा गरेको छ सम्म। "
21:1 "जब त्यहाँ देशमा पाइएको हुनेछ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, हत्या गरिएको छ मानिस को लास, र यो हत्या को दोषी छ जो ज्ञात छैन,
21:2 तपाईंको न्यायाधीशहरूले र ठूलो ती जन्म गरेर बाहिर जानेछौ र उपाय, को लास को स्थान बाट, वरपरको शहर को प्रत्येक दूरी.
21:3 र whichever एक मा तिनीहरूले अरूलाई भन्दा नजिक हुन बुझ्ने, एल्डरहरूले बथानलाई देखि एक बाछो लिन पर्छ, एक जुवा संग झिकेर छैन जो, न त एक हलो संग tilled.
21:4 र तिनीहरूले कुनै न कुनै र Stony उपत्यका यसलाई नेतृत्व गर्नेछन्, tilled कहिल्यै वा जो गरिएको छ छरिएको एक. र स्थानमा, तिनीहरूले बाछाको घाँटी कटौती गर्नेछ.
21:5 पुजारीहरूलाई लेवी छोराहरू भेट्नुपर्छ पर्छ, जसलाई प्रभु तपाईंको परमेश्वरले उहाँलाई मन्त्री गर्न चाहनुभएको छ ती, र आफ्नो नाम मा आशीर्वाद, र आफ्नो शब्द द्वारा हरेक विवाद निर्णय गर्न, र सफा छन् र कुन अशुद्ध हो जो कुराहरू न्याय गर्न.
21:6 र शहर को जन्म द्वारा ती ठूलो, slain थियो जो एक निकटतम, जानेछौ र उपत्यकाका मृत्यु भएको थियो कि बाछो भन्दा आफ्नो हात धुन पर्छ.
21:7 र तिनीहरूले भनौं: 'हाम्रो हात यो रक्तपात भएन, न त हाम्रो आँखा देख्न गर्नुभयो.
21:8 आफ्नो मान्छे इस्राएललाई दयालु हुन, जसलाई तपाईं उद्धार गर्नुभएको छ, हे प्रभु, र आफ्नो मान्छे को बीचमा इस्राएलका निर्दोष रगत तिनीहरूलाई चार्ज छैन। 'अनि त रगतको दोषी तिनीहरूलाई टाढा लगिनेछ.
21:9 त्यसपछि तपाईं निर्दोष विरुद्ध बगाएको थियो कि रगत मुक्त हुनेछ, तपाईँले गरेका हुनेछ जब प्रभु तपाईं निर्देशन छ रूपमा.
21:10 तपाईं आफ्नो शत्रुहरू विरूद्ध लडाइँ गर्न बाहिर गएका छन् भने, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो हात मा उनलाई वितरित छ, र यदि, तपाईं कैदीहरूलाई टाढा प्रमुख रूपमा,
21:11 तपाईं एउटा सुन्दर महिलाले कैदीहरूलाई संख्या बीच हेर्न, र तपाईं उनको प्रेम, र तपाईं एक पत्नी रूपमा उनको छ गर्न इच्छुक छन्:
21:12 त्यसपछि तपाईं आफ्नो घर मा उनको नेतृत्व गर्नेछन्. र त्यो उनको कपाल बन्द दाढी पर्छ, र उनको नङ छोटो कटौती,
21:13 र त्यो कब्जा जसमा लुगा हटाउन. र त्यो आफ्नो घरमा बस्न र उनको बुबा र आमा को लागि रूनु पर्नेछ, एक महिनाको लागि. र त्यासपछि, तपाईं उनको प्रविष्ट र उनको सुत्न पर्छ, र त्यो आफ्नो पत्नी हुनेछ.
21:14 तर यदि त्यस पछि त्यो राम्रो आफ्नो मन मा बस्न छैन, तपाईं उनको स्वतन्त्र हुनेछ. तपाईं मुद्रा को लागि उनको बेचन सक्दैन, न त शक्ति द्वारा उनको दमन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं उनको अपमानित गरेको लागि.
21:15 यदि मानिस दुई पत्नीहरू छ, एक प्रिय र घृणा अन्य, र तिनीहरूले उहाँलाई छोराछोरीको उत्पादन गरेको छ, र घृणा पत्नी छोरा जेठो छ भने,
21:16 र उहाँले आफ्नो छोरा बीच आफ्नो पदार्थ विभाजित चाहन्छ भने: उहाँले प्रिय पत्नी जेठो छोरा बनाउन सक्नुहुन्छ, र यति उसलाई घृणा पत्नी छोरा अघि रुचि.
21:17 बरु, उहाँले जेठो रूपमा घृणा पत्नी छोरा स्वीकार गर्नेछु, र उहाँले छ सबै को एक डबल भाग उहाँलाई दिन पर्छ. तिनी आफ्ना छोराछोरीलाई बीच पहिलो छ लागि, र जेठो को अधिकार उहाँलाई ऋण लिइएको हो.
21:18 एक मानिस एक अनाज्ञाकारी र लापरवाह छोरा उत्पादन भने, आफ्नो बुबा वा आमा को आदेश गर्ने सुन्न छैन, र, सही होने, आज्ञाकारी लागि घृणा देखाउँछ:
21:19 तिनीहरूले उहाँलाई लिन र शहर को प्राचीन र न्यायको ढोका उसलाई नेतृत्व गर्नेछन्.
21:20 र तिनीहरूले तिनीहरूलाई भनौं: 'यो हाम्रो छोरा लापरवाह र अनाज्ञाकारी छ. हाम्रो सल्लाह सुनेर तिनले घृणा देखाउँछ. उहाँले carousing संग आफूलाई ओगटेको, र आत्म-भोग, र feasting। '
21:21 त्यसपछि शहर को मान्छे हुनेछ मृत्यु उसलाई ढुङ्गा. र उहाँले मर्नेछन्, तपाईं आफ्नो बीचमा देखि दुष्ट लाग्न सक्छ भनेर टाढा. र यति इस्राएलका सबै सक्छन्, यो सुनेपछि, धेरै डराउनु.
21:22 एक मानिस एक विषयमा पाप हुनेछ जब मृत्यु द्वारा जो सजाय छ, र, मृत्यु निम्ति न्याय भएको होने, उहाँले एक Gallows मा फाँसी गरिएको छ:
21:23 आफ्नो लास रूख रहने छैन. बरु, उहाँले त्यही दिन गाडे गरिनेछ. एक रूख देखि लटकी जसले परमेश्वरले श्राप गरिएको छ लागि, र तपाईं आफ्नो देशमा गंदा छैन, जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एक सम्पत्तिको रूपमा तपाईंलाई दिनेछु। "
22:1 "आफ्नो भाइ गरेको गोरु वा भेडा तपाईं देख्नुहुन्छ भने हराउनु लक्षविना हिड्नु, तपाईंलाई पारित गर्नेछ. बरु, तपाईं आफ्नो भाइ तिनीहरूलाई फिर्ता नेतृत्व गर्नेछन्.
22:2 तर आफ्नो भाइ नजिकै छैन भने, वा तपाईंले उसलाई चिन्दिन, तपाईं आफ्नो घरमा तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नेछन्, र तिनीहरूले आफ्नो भाइ तिनीहरूलाई खोज्ने र तिनीहरूलाई प्राप्त नगरेसम्म संग हुनेछ.
22:3 तपाईं आफ्नो गधा संग त्यसैगरि मा कार्य गर्नेछ, र आफ्नो वस्त्र, र आफ्नो भाइ को सबै सम्पत्तिमाथि नष्ट गरिएका. तपाईं यसलाई पाउन भने, तपाईं यसलाई बेवास्ता छैन, यो पराई गर्न belonged भने.
22:4 तपाईं आफ्नो भाइ गरेको गधा वा गोरु बाटो साथ खसेको छ कि हेर्न भने, तपाईं यसलाई वेवास्ता छैन. बरु, तपाईं उसलाई यसलाई उचाल्न पर्छ.
22:5 एक महिला manly परिधान संग ढाकिएको हुन पर्छ, न त एक मानिस स्त्री परिधान को प्रयोग गर्नेछन्. यी जसले गर्छ कुराहरू परमेश्वरको साथ abominable छ.
22:6 यदि, तपाईं सँगसँगै हिड्ने रूपमा, तपाईं चरा गरेको गुँड फेला, एक रूख वा जमीन मा, र आमा जवान वा अन्डा बढ्न छ, तपाईं उनको जवान संग उनको लिन हुँदैन.
22:7 बरु, तपाईं जान उनको अनुमति पर्छ, तपाईं पक्रेको छ कि जवान retaining, यो राम्रो तरिकाले तपाईं संग हुन सक्छ भनेर, र तपाईं लामो समय को लागि बाँच्न सक्छ.
22:8 जब तपाईं एक नयाँ घर निर्माण, तपाईं छत वरिपरि पर्खाल बनाउन पर्छ. अन्यथा, कसैले पर्ची र हिंसापुर्वक तल पर्न सक्छ, र यति रगत आफ्नो घरमा बगाएको थियो, र तपाईं दोषी हुनेछ.
22:9 तपाईं अर्को बीउ आफ्नो दाखबारी छर्न हुँदैन, तपाईं छरिएको र के दाखबारीको देखि निस्कने Springs सँगै पवित्र हुन गरेको बीउ दुवै नत्र.
22:10 तपाईं एउटा गोरु र एउटा गधा एकै समयमा साथ सम्म छैन.
22:11 तपाईं ऊन र सनी दुवै देखि बुना गरिएको छ जो एक vestment लगाउने छैन.
22:12 तपाईं हेम साथ तार बनाउन पर्छ, तपाईंको cloak को चार कुनामा मा, जो तपाईं समेट्छ.
22:13 एक मानिस एक पत्नी लिन्छ भने, र त्यस पछि उनको घृणा छ,
22:14 र त त्यो उनको खारेज गर्ने मौका खोज्ने, यसो गरेर उनको एउटा धेरै दुष्ट नाम imputing, 'म एक पत्नी रूपमा यो महिला प्राप्त, र उनको प्रवेश गरेसँगै, म उनको कुमारी हुन फेला परेन,'
22:15 त्यसपछि उनको बुबा र आमाले लिन पर्छ, र तिनीहरूले उनको virginity को संकेत तिनीहरूलाई ल्याउन पर्छ, गेट मा भएका शहर एल्डरहरूलाई.
22:16 र पिता भनौं: 'म एक पत्नी यस मानिसलाई मेरो छोरी दिए. र उहाँले तिनलाई घृणा किनभने,
22:17 उहाँले धेरै दुष्ट नामको उनको accuses, यसो गरेर: "म कुमारी हुन आफ्नो छोरी पाउनुभयो छैन।" तर हेर, यी मेरी छोरी गरेको virginity को संकेत हो। 'अनि तिनीहरूले शहर को प्राचीन अघि वस्त्र फैलाउन पर्छ.
22:18 र शहर को प्राचीन कि मानिस पक्रनु र उसलाई हरायो पर्छ.
22:19 यसबाहेक, तिनीहरूले उहाँलाई चाँदी एक सय शेकेल ठीक पर्छ, जो त्यो केटी को पिता दिनेछु, उहाँले निन्दा प्रतिबद्ध छ किनभने, धेरै दुष्ट नामको, इस्राएलका कुमारी विरुद्ध. र त्यो एक पत्नी रूपमा उनको पाउनेछ, र उहाँले आफ्नो जीवन को सबै दिन भर उनको खारेज गर्न सक्दैन.
22:20 तर के त्यो दावी छ साँचो हो भने र virginity केटी फेला परेन छ,
22:21 त्यसपछि तिनीहरूले उसलाई तल फेंक पर्छ, उनको बुबाको घर को ढोका बाहिर, र शहर को मानिसहरू हुनेछ उनको मृत्यु पत्थर, र त्यो मर्नेछन्. त्यो इस्राएलका wickedly गर्नुभएको छ लागि, कि त्यो उनको बुबाको घरमा fornicated. र यति तपाईं आफ्नो बीचमा देखि लिन पर्छ दूर दुष्ट.
22:22 एक मानिस अर्को पत्नी संग सोता भने, त्यसपछि ती दुबै मर्नेछन्, छ, को adulterer र adulteress. र त तपाईं लिन पर्छ टाढा इजरायल बाट दुष्ट.
22:23 एक मानिस एक कुमारी छ जो एक केटी betrothed छ भने, र कसैले शहर मा उनको पाता र यदि त्यो उनको संग निहित,
22:24 त्यसपछि तपाईं शहर को गेट बाहिर उनलाई दुवै नेतृत्व गर्नेछन्, र तिनीहरूले मृत्यु ढुंगाले हानेर गरिनेछ: त्यो केटी, त्यो कराउन थिएन किनभने त्यो शहर थियो हुनत; मानिस, उहाँले आफ्नो छिमेकीलाई को पत्नी अपमानित गरेको कारण. र यति तपाईं आफ्नो बीचमा देखि लिन पर्छ दूर दुष्ट.
22:25 तर एक मानिस discovers यदि, को देहात मा, betrothed गरिएको छ जो एक केटी, र, उनको apprehending, उहाँले उनीसित निहित, त्यसपछि उहाँले एक्लै मर्नेछन्.
22:26 केटी केही ग्रस्त पर्छ, न त त्यो मृत्यु निम्ति दोषी छ. एक डाकू आफ्नो भाइ विरुद्ध अप rises र आफ्नो जीवन slays जस्तै लागि, त्यसैले पनि केटी निकै ग्रस्त गरे.
22:27 त्यो क्षेत्रमा एक्लै थियो. त्यो कराए, र कुनै एक नजिकका थियो, जो उनको उद्धार सक्छ.
22:28 एक मानिस एक कुमारी छ जो एक केटी पाउन भने, जो एक betrothal छैन, र, उनको लिइरहेको, उहाँले उनीसित निहित, र कुरा न्याय ल्याइएको हो,
22:29 त्यसपछि जो उनको सुत्थ्यौं उहाँले चाँदीको पचास शेकेल केटी को पिता दिन पर्छ, र त्यो एक पत्नी रूपमा उनको पाउनेछ, उहाँले उनको अपमानित गरेको कारण. उहाँले उनको खारेज गर्न सक्दैन, आफ्नो जीवनको सबै दिन भर.
22:30 कुनै मानिस आफ्नो बुबाको पत्नी लिन पर्छ, न त उनको कवर हटाउन। "
23:1 "एक नपुंसकको, एक जसको testicles debilitated वा बन्द कटौती गरिएको छ, वा जसको लिंग काटेर गरिएको छ, प्रभुको चर्च प्रवेश गर्नेछैनन्.
23:2 एक वेश्या को सन्तान, छ, एक वेश्या को जन्म, प्रभुको चर्च प्रवेश गर्नेछैनन्, दशौं पुस्ता सम्म.
23:3 अम्मोनको र मोआबी, पनि दशौं पुस्ता पछि, सधैंभरि प्रभुको चर्च प्रवेश गर्नेछैनन्,
23:4 किनभने तिनीहरूले रोटी र पानी बाटो साथ तपाईंलाई भेट्न इच्छुक थिएनन्, तपाईं मिश्रबाट प्रस्थान गरेको थियो जब, र तिनीहरूले तपाईंलाई बिलामले विरुद्ध भाडामा किनभने, Beor छोरा, सिरियाको मेसोपोटामिया देखि, तपाईं सराप्न क्रममा.
23:5 तर प्रभु तपाईंको परमेश्वरले बिलामलाई सुन्न इच्छुक थियो, र उहाँले आफ्नो आशिष् मा आफ्नो सराप गरिएका, उहाँले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ.
23:6 तपाईंले तिनीहरूलाई शान्ति बनाउन हुँदैन, न त आफ्नो समृद्धि खोज्नु पर्छ, सबै सधैंभरि आफ्नो जीवन को दिन भर.
23:7 तपाईं Idumea जो कोहिले घृणा छैन, लागि उहाँले आफ्नो भाइ छ, न त मिश्री, लागि आफ्नो देशमा नयाँ आगमन थिए.
23:8 तिनीहरूलाई को जन्मेको भएकाहरूलाई, तेस्रो पुस्ता मा, प्रभुको चर्च प्रवेश गर्नेछन्.
23:9 जब तपाईं आफ्नो शत्रुहरू विरूद्ध युद्ध गर्न बाहिर गएका छन्, तपाईं दुष्ट छ कि सबै आफूलाई पालन गर्नेछु.
23:10 यदि रात सपना द्वारा defiled गरिएको छ जसले तपाईंलाई बीचमा एक मानिस छ, उहाँले शिविरमा देखि प्रस्थान गर्नेछ.
23:11 र त्यो साँझ अघि फिर्ता हुँदैन, उहाँले पानी धोए गरेपछि, अनि तेस्पछि, सूर्य सेट पछि, उहाँले शिविरमा फर्कन पर्छ.
23:12 तपाईं शिविरमा परे ठाउँ जो तपाईं प्रकृति को आवश्यकताहरु लागि जाने सक्छ पर्नेछ,
23:13 आफ्नो बेल्ट मा एउटा सानो बेल्चा पूरा. र तपाईं तल बस्न जब, तपाईं वरिपरि खन्नुहोस् पर्छ, अनि तेस्पछि, माथि dug थियो माटो संग, तपाईं कवर पर्छ
23:14 जसबाट तपाईं ढुक्क भए कि. प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको आफ्नो शिविरमा बीचमा हिँड्छ, तपाईं उद्धार गर्न, र तपाईं आफ्नो शत्रुहरू उद्धार गर्न. अनि त, आफ्नो शिविरमा पवित्र होस्, र केही मलिन यो भित्र देखा पर्न गरौं, उहाँले तपाईंलाई त्याग्न नत्र.
23:15 तपाईं आफ्नो मास्टर तपाईं भागेर छ जो एक सेवक छुटकारा छैन.
23:16 उहाँले तिनलाई प्रसन्न तुल्याउने स्थानमा बस्न पर्छ, र उहाँले आफ्नो शहर मध्ये आराम गर्नेछन्. तपाईं उसलाई सन्ताप छैन.
23:17 त्यहाँ इस्राएलका छोरीहरू बीचमा कुनै वेश्यांए हुनेछ, न त इस्राएलका छोराहरू बीचमा जो कोहीले जो वेश्या दौरा.
23:18 तपाईं वेश्या पैसा प्रस्ताव छैन, न त एक कुकुर को मूल्य, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको घरमा, तपाईं वाचा हुन सक्छ के कुनै कुरा. यी दुवै लागि प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एउटा abomination छन्.
23:19 तपाईं पैसा उधारो छैन, वा अन्न, वा अरू केहि सबै, चासो आफ्नो भाइ,
23:20 तर केवल एक विदेशीले गर्न. तपाईं उहाँले चासो बिना आवश्यक जो आफ्नो भाइ उधारो पर्नेछ, त्यसैले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आफ्नो देशमा सबै कार्यहरूमा आशीर्वाद सक्छ, जो तपाईं यसलाई हासिल गर्न ताकि प्रविष्ट पर्छ.
23:21 जब तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको भाकल गरेका छन्, तपाईं यसलाई तिर्ने मा ढिलो पर्छ. प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको यो माग. तपाईं ढिलाइ यदि र, यसलाई पाप रूपमा गर्न आरोपबाट गरिनेछ.
23:22 तपाईं एउटा प्रतिज्ञा गर्न इच्छुक छैनन् भने, त्यसपछि यो पाप बिना हुनेछ.
23:23 तर बित्तिकै रूपमा आफ्नो ओठ बाट प्रस्थान गरेको छ, तपाईं पालन र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वर र प्रतिज्ञा गरेझैं गर्नु पर्छ आफ्नो आफ्नै स्वतन्त्र इच्छा द्वारा र आफ्नो मुखले तपाईं बोलेको छु जस्तै.
23:24 आफ्नो छिमेकीको दाखबारीको प्रवेश गरेसँगै, के तपाईं सकेसम्म धेरै अङ्गुर खान सक्छ कृपया. तर तपाईं संग बाहिर कुनै पनि बोक्न सक्छ.
23:25 तपाईं आफ्नो साथीको अन्न क्षेत्र प्रवेश भने, तपाईं कान बन्द तोड्न सक्छ, र आफ्नो हातमा तिनीहरूलाई RUB, तर तपाईं एक Sickle तिनीहरूलाई कटनी सक्छ। "
24:1 "यदि एक मानिस एक पत्नी लिन्छ, र उनको छ, र त्यो किनभने केही vileness आफ्नो आँखा अघि पक्षमा फेला गर्दैन, त्यसपछि उहाँले छोडपत्र को एक बिल लेख्न पर्छ, र उहाँले उनको हात गर्न दे पर्छ, र उहाँले आफ्नो घर देखि उनको खारेज गर्नेछन्.
24:2 र जब, प्रस्थान होने, त्यो अर्को विवाह गरेको,
24:3 र उहाँले त्यसै गरी उनको घृणा यदि, र उनको छोडपत्र को एक बिल दिएको छ, र आफ्नो घर देखि उनको खारेज गरेको छ, वा मृत्यु भएको छ साँच्चै यदि,
24:4 त्यसपछि पूर्व पति एक पत्नी रूपमा फिर्ता उनको लिन सक्दैन. त्यो प्रदूषित लागि गरिएको र प्रभुको दृष्टि मा abominable भएको छ. अन्यथा, तपाईं आफ्नो भूमि सक्छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एक सम्पत्तिको रूपमा तपाईंलाई छुटकारा हुनेछ जुन, पाप गर्न.
24:5 जब मानिस हालै एक पत्नी लिएको छ, उहाँले युद्ध गर्न बाहिर जाने छैन, न त कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालय उहाँमाथि enjoined गरिनेछ. बरु, उहाँले दोषी बिना घरमा निःशुल्क हुनेछ, त्यसैले एक वर्षको लागि आफ्नो पत्नी संग रमाउने सक्छ.
24:6 तपाईं जमानत रूपमा माथिल्लो वा तल्लो millstone स्वीकार गर्नेछैनन्. त्यसपछि लागि उहाँले तपाईं आफ्नो जीवन राखिएको हुनेछ.
24:7 एक मानिस इस्राएलका छोराहरू बीचमा आफ्नो भाइ प्रार्थना पक्रेको छ भने, र मूल्य प्राप्त गर्न उहाँलाई बिक्री, त्यसपछि उहाँले मृत्युदण्ड गरिनेछ. र यति तपाईं आफ्नो बीचमा देखि लिन पर्छ दूर दुष्ट.
24:8 लगनशील भई पालन, तपाईं कुष्ठरोग को घाउ लाग्न नत्र. तर तपाईं जे Levitical स्टक पूजाहारीहरूले तपाईं के गर्न सिकाउन पर्छ गर्नु पर्छ, म तिनीहरूलाई निर्देशन के अनुसार. र तपाईंले यसलाई ध्यान दिएर पूरा गर्नेछु.
24:9 प्रभु आफ्नो परमेश्वरको मरियम के गरे सम्झना, बाटो साथ, तपाईं मिश्रबाट प्रस्थान थिए.
24:10 तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई केहि देखि आवश्यक छ कि जब तपाईं उहाँले owes, तपाईं आदेश जमानत छिन्न आफ्नो घर प्रवेश गर्नेछैनन्.
24:11 बरु, तपाईं बाहिर खडा गर्नेछु, र उहाँले छ के तपाईं पूरा गर्नेछ.
24:12 तर उहाँले गरिब छ भने, त्यसपछि जमानत रात मार्फत तपाईंसँग रहन हुँदैन.
24:13 बरु, तपाईँले द्रुत उहाँलाई यो फिर्ता पर्छ, सूर्य को सेटिङ अघि, ताकि, आफ्नै लुगा मा सो, उहाँले तपाईंलाई आशिष सक्छ, र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको उपस्थिति न्याय हुन सक्छ.
24:14 तपाईं indigent र गरिब को भुक्तानी इन्कार छैन, उहाँले आफ्नो भाइ छ कि छैन भनेर, वा उहाँले देशमा तपाईंसँग बास र आफ्नो ढोकाहरू भित्र छ जो एक नयाँ आगमन छ.
24:15 बरु, तपाईं उहाँलाई नै दिन आफ्नो श्रम को मूल्य तिर्न पर्छ, सूर्य को सेटिङ अघि. लागि उहाँले कमजोर, र यो संग उहाँले आफ्नो जीवन सँभाल्नुहुन्छ. अन्यथा, उहाँले प्रभु तपाईं विरुद्ध कराउन सक्छ, र यो पाप रूपमा चार्ज हुनेछ.
24:16 को पुर्खाहरूले मृत्युदण्ड हुँदैन हुन छोराहरू तर्फबाट, न त बाबु तर्फबाट छोराहरू, तर प्रत्येकले आफ्नै पापको लागि मर्नेछन्.
24:17 तपाईं नयाँ आगमन वा अनाथ को न्याय pervert छैन, न त लिन पर्छ टाढा जमानत रूपमा विधवाको लुगा.
24:18 तपाईं मिश्र सेवा भनेर सम्झना, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको त्यहाँ तपाईंले उद्धार. त्यसैले, म यसरी कार्य गर्न निर्देश छु.
24:19 जब तपाईं आफ्नो क्षेत्र मा अन्न कटनी छ, र, भूल भएको, तपाईं एक sheaf पछि छोड्न, तपाईं टाढा लैजान फर्कन छैन. बरु, तपाईं नयाँ आगमन अनुमति पर्छ, र अनाथ, र यो टाढा लिन विधवा, त्यसैले प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आफ्नो हात को सबै कार्यहरूमा आशीर्वाद सक्छ.
24:20 तपाईं आफ्नो भद्राक्षका फल भेला भए, तपाईं रूखहरू रहने सक्छ जो भेला गर्न फिर्ता हुँदैन. बरु, तपाईं नयाँ आगमन लागि यो पछि छोड्न पर्छ, यस अनाथ, र विधवा.
24:21 तपाईं आफ्नो दाखबारी को पुराना बाली भने, तपाईं बाँकी समूहहरु भेला छैन. बरु, तिनीहरूले नौलो प्रयोग गर्न हुनेछन्, यस अनाथ, र विधवा.
24:22 तपाईं पनि मिश्र सेवा भनेर सम्झना, र त्यसैले, यस कारणले, म यसरी कार्य गर्न निर्देश छु। "
25:1 "यदि व्यक्ति बीचको मामला छ, र तिनीहरूले न्यायाधीशहरूले लागू, तिनीहरूले जसलाई तिनीहरूले बस हुन बुझ्ने एक गर्न न्याय को पाम दिन पर्छ, र तिनीहरूले impiety को impious छ जो एक निन्दा गर्नेछन्.
25:2 तर तिनीहरूले पाप छ जो एक धर्काहरू लायकको छ भनेर हेर्न भने, तिनीहरूले उहाँलाई लमतन्न परेर पसारिएका र उहाँलाई तिनीहरूलाई अघि कुटपिट गर्न गराउन पर्छ. पाप को उपाय अनुसार, त्यसैले धर्काहरू को उपाय हुनेछ.
25:3 तथापि, यी चालीस संख्या अधिक छैन. अन्यथा, आफ्नो भाइ प्रस्थान सक्छ, आफ्नो आँखा अगाडि shamefully घाइते गरिएको होने.
25:4 यो क्षेत्रमा आफ्नो बाली बाहिर treading छ रूपमा एक गोरु थूथन छैन.
25:5 जब भाइहरूले सँगै बाँचिरहेका छौं, र तिनीहरूलाई एक बच्चाहरु बिना मृत्यु, मृतक को पत्नी अर्को विवाह हुँदैन. बरु, आफ्नो भाइ उनको लिन पर्छ, र उहाँले आफ्ना भाइ लागि सन्तान हुर्काउन पर्छ.
25:6 र उनको देखि पहिलो छोरा, उहाँले आफ्नो भाइ नाम द्वारा कल पर्छ, आफ्नो नाम इस्राएलको देखि निर्मूल हुनेछैन भनेर.
25:7 तर उहाँले आफ्नो भाइ पत्नी लिन इच्छुक छैन भने, उसलाई जाने पर्छ व्यवस्था गरेर गर्ने, महिला शहर को गेट जानेछौ, र त्यो ठूलो ती जन्म द्वारा पुकारा पर्छ, र त्यो भनौं: 'मेरो श्रीमान् को भाइ इस्राएलमा आफ्नो भाइ नाम अप उठाउनु गर्न इच्छुक छैन; न त उहाँले मलाई सहभागी हुनेछ। '
25:8 अनि तुरुन्तै, तिनीहरूले उहाँलाई पठाउन बोलाउन पर्छ, र तिनीहरूले उहाँलाई प्रश्न पर्छ. यदि उहाँले जवाफ, 'म एक पत्नी रूपमा उनको स्वीकार गर्न इच्छुक छैन,'
25:9 त्यसपछि महिला प्राचीनहरूको दृष्टि उहाँलाई भेट्नुपर्छ पर्छ, र त्यो आफ्नो खुट्टा आफ्नो जुत्ता हटाउन पर्छ, र त्यो आफ्नो अनुहार मा थुक्नु पर्छ, र त्यो भनौं: 'उहाँको भाइ घरमा निर्माण गर्न इच्छुक थियो जसले मानिसलाई त्यसैले यसलाई गरेका गरिनेछ।'
25:10 र आफ्नो नाम इस्राएलका भनिनेछ: को Unshod को घर.
25:11 दुई जना पुरुष आफूलाई बीचको द्वन्द्व छ भने, र एक अन्य हिंसा गर्न सुरु, र अन्य पत्नी यदि, मजबूत हातमा देखि पतिको उद्धार गर्न चाहने, उनको हात विस्तार र आफ्नो निजी भागहरु उसलाई grasps,
25:12 त्यसपछि तपाईं बन्द उनको हात कटौती गर्नेछ. न त तपाईं कुनै पनि कृपा संग उनको भन्दा रूनु पर्नेछ.
25:13 तपाईं फरक वजन छैन पर्छ, ठूलो र कम, आफ्नो झोला मा.
25:14 न त त्यहाँ आफ्नो एक ठूलो घर मा हुनेछ र एक कम उपाय.
25:15 तपाईं एक बस र एक साँचो वजन पाउनेछ, र आफ्नो उपाय बराबर र साँचो हुनेछ, तपाईं भूमि मा लामो समय को लागि बाँच्न सक्छ भनेर, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
25:16 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरले उहाँलाई abominates यी कुराहरू गर्छ जसले, र उहाँले सबै अन्याय loathes.
25:17 अमालेक तपाईं गरे के सम्झना, बाटो साथ, जब तपाईं मिश्रबाट प्रस्थान थिए:
25:18 कसरी उहाँले तपाईं सेना को stragglers भेटे र तल कटौती, जो तल बसिरहेका थिए, निकास, भोक र कठिनाइ द्वारा खपत हुँदा, र तिनले परमेश्वरको डर छैन कसरी.
25:19 त्यसैले, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आराम दिन हुनेछ जब, र तपाईंले सबै आसपास राष्ट्रका मातहत हुनेछ, देशमा जो उहाँले तपाईंलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईं स्वर्गमा अन्तर्गत आफ्नो नाम हटाउन पर्छ. यो भूल छैन हेरविचार। "
26:1 "अनि तपाईं भूमि मा प्रवेश गर्नेछ जब प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं अधिकार गर्न दिनेछु जो, र तपाईंले यसलाई प्राप्त जब र हुनेछ यो भित्र बाँचिरहेका छौं:
26:2 तपाईं आफ्नो सबै बाली को पहिलो लिन पर्छ, र एक टोकरी तिनीहरूलाई ठाँउ, र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको चयन हुनेछ जो ठाउँमा यात्रा गर्नेछ, आफ्नो नाम त्यहाँ बोलाइएको हुन सक्छ भनेर.
26:3 तपाईंले ती दिन हुनेछ जो पुजारी भेट्नुपर्छ पर्छ, र तपाईं उहाँलाई भनौं: 'म यो दिन profess, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सामु, म उहाँले हामीलाई यो दिन भनेर हाम्रो पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो जो बारेमा भूमि मा प्रवेश गरेको। '
26:4 र पुजारी, आफ्नो हात बाट टोकरी अप लिइरहेको, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको वेदी अघि राख्न पर्छ.
26:5 र तपाईं भनौं, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा: 'सिरियाली मेरो बुबा अपनाए, जो मिश्र मा descended, र उहाँले धेरै सानो संख्या त्यहाँ sojourned, र उहाँले महान् र बलियो राष्ट्र र अनगिन्ती भीड मा वृद्धि.
26:6 र मिश्रीहरूले हामीलाई दुःख, र तिनीहरूले हामीलाई खेदो, हामीमाथि imposing सबैभन्दा Grievous बोझबाट.
26:7 र हामी प्रभु पुकारे, हाम्रो पुर्खाहरूले परमेश्वर. उहाँले हामीलाई सुने, र उहाँले हाम्रो अपमान मा अनुमोदन संग देख्यो, र कठिनाइ, र दुःखको.
26:8 र उहाँले मिश्र टाढा हामीलाई नेतृत्व, बलियो हात र एक outstretched हात संग, एक शक्तिशाली आतंक संग, संकेत र विचित्रताहरू संग.
26:9 र उहाँले यो स्थान मा हामीलाई नेतृत्व, र उहाँले दूध र मह संग बगिरहेको भूमि हामीलाई सुम्पिएको.
26:10 किनभने यो, म अब देशमा पहिलो फल जो परमप्रभुले मलाई दिनुभएको छ प्रस्ताव। 'अनि तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि तिनीहरूलाई छोड्न पर्छ, र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको पुजा गर्नु पर्छ.
26:11 र तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं र तपाईंको घरमा दिनेछु जो सबै असल कुराहरूमा भोजमा पर्छ: तपाईं, र लेवी, र नयाँ आगमन जो तपाईं को साथ छ.
26:12 जब तपाईं आफ्नो सबै बाली को tithing पूरा हुनेछ, दशांश तेस्रो वर्षमा, तपाईं लेवी यो दिन पर्छ, र नयाँ आगमन गर्न, र अनाथ गर्न, र विधवा गर्न, त्यसैले तिनीहरू आफ्नो ढोकाहरू भित्र खान र सन्तुष्ट हुन सक्छ.
26:13 र तपाईं भनौं, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा: 'म मेरो घर बाट के पवित्र थियो लिएका छन्, र म लेवी यसलाई दिइएको छ, र नयाँ आगमन गर्न, र अनाथ र विधवालाई गर्न, तिमी मलाई आज्ञा गरेझैं. म आफ्नो आज्ञाहरू transgressed छैन, न त म आफ्नो आदेशहरू बिर्सनुभएको छ.
26:14 म मेरो शोक यी कुराहरू देखि खाएको छैन, न त म कारण अशुद्धपन कुनै पनि प्रकारको तिनीहरूलाई अलग छ, न त म funerals यी कुराहरू कुनै पनि व्यय छन्. म परमप्रभु मेरो परमेश्वरको आवाज पालन गरेका छन्, र म तिमी मलाई निर्देशन गरेका छन् रूपमा बस सबै कुरा गरेका.
26:15 आकाश बीच आफ्नो पवित्र मन्दिरमा देखि र आफ्नो उच्च Habitation देखि पक्षमा संग हेर्न, र आफ्नो मान्छे इस्राएल र तपाईंले हामीलाई दिनुभएको देशमा आशीर्वाद, तपाईं हाम्रो पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो जस्तै, भूमि दूध र मह संग बगिरहेको। '
26:16 प्रभु आफ्नो परमेश्वरको निर्देशन छ आज तपाईंले यी आज्ञाहरू र इन्साफ पूरा गर्न, र राख्न र तिनीहरूलाई पूरा गर्न, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले र आफ्नो सबै प्राण संग.
26:17 आज, तपाईं आफ्नो परमेश्वरको हुन प्रभु रोजेको, तपाईं उहाँको मार्गमा हिंड्न सक्छ भनेर, र आफ्नो समारोह र आज्ञाहरू र इन्साफ राख्न, र आफ्नो आज्ञा पालन.
26:18 आज, प्रभु तपाईं छान्नुभएको छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो विशेष मानिसहरू हुन सक्छ, उहाँले तपाईंलाई भनिएको छ जस्तै, र यति भनेर आफ्नो सबै आदेशहरू पालन सक्छ,
26:19 र तपाईं जो उहाँले सिर्जना गरेको सबै राष्ट्रहरूले भन्दा बढी उच्च हुन उहाँले सक्छ भनेर, आफ्नै प्रशंसा र नाम र महिमा खातिर, अर्डर तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको लागि पवित्र मानिसहरू हुन सक्छ, जस्तै उहाँले बोलेको छ। "
27:1 त्यसपछि मोशा र इस्राएलका बूढा मानिसहरू निर्देशन, यसो: "म यो दिन तपाईं निर्देशन प्रत्येक आज्ञा राख्नुहोस्.
27:2 र तपाईं जोर्डन भन्दा क्रस जब, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो भूमिमा, तपाईं विशाल पत्थर ठाडो पर्छ, र तपाईं प्लास्टर तिनीहरूलाई कोट हुनेछ,
27:3 ताकि तपाईं तिनीहरूलाई मा यो व्यवस्था सबै शब्द लेख्न सक्षम हुन सक्छ, तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो भूमि प्रवेश गर्न ताकि यर्दन पार जब, दूध र मह संग बगिरहेको भूमि, उहाँले आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो जस्तै.
27:4 त्यसैले, तपाईं जोर्डन भन्दा क्रस जब, पत्थर ठाडो, म यो दिन गर्न निर्देशन गरेझैं, माउन्ट Ebal मा. र तपाईं प्लास्टर तिनीहरूलाई कोट हुनेछ,
27:5 र तपाईं निर्माण गर्नेछ, त्यस स्थान मा, फलाम हृदय छोयो छैन जो गरिएको प्रभु आफ्नो परमेश्वरको एउटा वेदी पत्थर बाहिर,
27:6 hewn छैन वा जो छन् पलिश पत्थर बाहिर. र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको यसमा holocausts प्रस्ताव पर्छ.
27:7 र तपाईं शान्ति सिकार immolate पर्छ. र तपाईं खान र स्थानमा भोज गर्नेछन्, प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा.
27:8 र तपाईं पत्थर मा यो व्यवस्था सबै शब्द लेख्न पर्छ, सीधै र स्पष्ट। "
27:9 र मोशा र Levitical स्टक पूजाहारीहरूले इस्राएलका सबै भन्नुभयो: "उपस्थित र सुन्न, हे इस्राएलका! आज तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको मान्छे भएका छन्.
27:10 तपाईं आफ्नो आवाज सुन्न पर्छ, र तपाईं आज्ञा र justices गर्नु पर्छ, जो म तिमीहरूलाई entrusting छु। "
27:11 मोशाले त्यस दिन मानिसहरू निर्देशन, यसो:
27:12 "यी मा माउन्ट Gerizim खडा गर्नेछु, मानिसहरूलाई आशिष् रूपमा, तपाईं जोर्डन पार हुनेछ जब: शिमोन, लेवी, यहूदाका, Issachar, यूसुफ, र बिन्यामीन.
27:13 र विपरीत क्षेत्रमा, त्यहाँ मा माउन्ट Ebal खडा गर्नेछु, एक श्राप रूपमा: Reuben, गाद, र आशेर, र Zebulun, र, र Naphtali.
27:14 र लेवीहरूले उच्चारण र इस्राएलका सबै मानिसहरूलाई घोषणा गर्नेछ, एक उच्च आवाज:
27:15 एक graven वा पिघला मूर्ति बनाउँछ मानिस BE श्राप, प्रभु गर्न एक abomination, यसको निर्माता को हात को काम, र जो एक गोप्य स्थानमा राख्छ. र सबै मान्छे प्रतिक्रिया पर्छ: Amen.
27:16 आफ्नो बाबु र आमा आदर गर्दैन नगर्ने उहाँले BE श्राप. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:17 उहाँले BE श्राप जो आफ्नो छिमेकीको स्थलहरू हटाउँदछ. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:18 उहाँले BE श्राप गर्ने यात्रामा हराउनु जान अन्धो गराउँछ. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:19 उहाँले BE श्राप नयाँ आगमन को न्याय subverts गर्ने, यस अनाथ, वा विधवा. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:20 उहाँले BE श्राप गर्ने आफ्नो बुबाको पत्नी संग निहित, र यति आफ्नो ओछ्यानमा को कवर पर्दाफास. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:21 उहाँले BE श्राप गर्ने कुनै पनि जनावर संग निहित. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:22 उहाँले BE श्राप जो आफ्नो बहिनी संग निहित, आफ्नो बुबाको छोरी, आफ्नो आमा वा. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:23 उहाँले BE श्राप जो आफ्नो सासू संग निहित. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:24 जो चुपके आफ्नो छिमेकीलाई तल प्रहार उहाँले BE श्राप. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:25 उहाँले BE श्राप निर्दोष रगत को जीवन प्रहार गर्न उपहार जो स्वीकार. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen.
27:26 यो व्यवस्था शब्दहरू मा जो रहने छैन उहाँले BE श्राप, र तिनीहरूलाई काम मा ले गर्छ. र सबै मानिसहरू भनौं: Amen। "
28:1 "त्यसैले त, यदि तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न हुनेछ, राख्न र आफ्नो सबै आज्ञाहरू गर्न ताकि, जो म यो दिन तपाईं निर्देशन, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं जो पृथ्वीमा अवस्थित सबै राष्ट्रहरूले भन्दा बढी उच्च हुन गर्नाले.
28:2 र यी सबै आशिष्हरू तपाईं आउन र तपाईं को पकड लिन पर्छ, तर यदि तपाईं केवल आफ्नो आदेशहरू सुन्न.
28:3 अनमोल तपाईं शहर हुनेछ, र क्षेत्रमा आशिष्.
28:4 अनमोल आफ्नो कम्मर को फल हुनेछ, र आफ्नो भूमि को फल, र आफ्नो गाई को फल, आफ्नो बथान को droves, र आफ्नो भेडाको Folds.
28:5 अनमोल आफ्नो barns हुनेछ, र आफ्नो storehouses आशिष्.
28:6 अनमोल तपाईं प्रवेश र प्रस्थान गरिनेछ.
28:7 प्रभु प्रदान गर्नेछ आफ्ना शत्रुहरूलाई कि, जसले तपाईंलाई विरुद्ध खडा, आफ्नो दृष्टि तल पतन हुनेछ. तिनीहरूले एउटा तरिका तपाईंलाई विरुद्ध आउनेछ, र तिनीहरूले सात तरिका आफ्नो अनुहार भाग्नेछ.
28:8 प्रभु तपाईंको Cellars मा आशिष् निस्कने पठाउने, र आफ्नो हात को सबै काम मा. र उहाँले तपाईंलाई प्राप्त गर्नेछ भन्ने देशमा दिनुहुनेछ.
28:9 प्रभु आफूलाई लागि एक पवित्र मान्छे तपाईं उठाउनु हुनेछ, उहाँले तपाईंलाई कसम खाएँ जस्तै, यदि तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेछ, र उहाँको मार्गमा हिंड्न.
28:10 र पृथ्वीका सबै मानिसहरूले प्रभुको नाम तिमी माथि बोलाइएको गरिएको देख्नेछन्, र तिनीहरूले तपाईंलाई डर पर्छ.
28:11 प्रभु तपाईं हरेक असल कुरा प्रशस्त हुन गर्नाले: आफ्नो गर्भमा को फल मा, र आफ्नो गाई को फल मा, र आफ्नो भूमि को फल मा, जो प्रभु उहाँले तपाईंलाई दिन भनेर आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो.
28:12 प्रभु आफ्नो उत्कृष्ट खजाना खुल्नेछ, आकाश, यो समयमा वर्षा वितरण ताकि. र उहाँले आफ्नो हात को सबै काम दिनुहुनेछ. र तपाईं धेरै जातिहरूलाई उधारो पर्छ, तर तपाईं कसैलाई केही उधारो हुनेछ.
28:13 र प्रभु टाउको रूपमा नियुक्त गर्नेछ, र पुच्छर रूपमा. र तपाईं सधैं माथि हुनेछ, र मुनि. तर तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आज्ञा सुन्न भने मात्र, जो म यो दिन तपाईं सुम्पिन्छु, र राख्न र तिनीहरूलाई के हुनेछ,
28:14 र तिनीहरूलाई देखि अलग बारी छैन, न सही गर्न, न त बायाँ, न त अनौठो देवताहरूतर्फ, न त तिनीहरूको पूजा.
28:15 तर प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न तपाईं इच्छुक छैनन् भने, राख्न र आफ्नो सबै आज्ञा र समारोह गर्न ताकि, जो म यो दिन तपाईं निर्देशन, यी सबै curses तपाईं आउन पर्छ, र तपाईं को पकड लिन.
28:16 श्राप तपाईं शहर हुनेछ, खेतमा श्राप.
28:17 श्राप आफ्नो बच्चाहरु हुनेछ, र आफ्नो storehouses श्राप.
28:18 श्राप आफ्नो कम्मर को फल हुनेछ, र आफ्नो भूमि को फल, तपाईंको बैलों को बथान, र आफ्नो भेडाको बगाल.
28:19 श्राप तपाईं प्रवेश गरिनेछ, र प्रस्थान श्राप.
28:20 प्रभु तिमीहरूमा अनिकाल र भोक पठाउने, र तपाईं सबै काम मा एक rebuke, उहाँले चाँडै कुचल र तपाईं perishes सम्म, किनभने तपाईंको धेरै दुष्ट नवाचारै को, जो तपाईंले मलाई त्याग्ने.
28:21 प्रभु तपाईं एउटा pestilence सामेल हुन सक्छ, उहाँले देशमा तपाईंले खपत सम्म, अधिकार रूपमा जो तपाईं त प्रविष्ट पर्छ.
28:22 प्रभु destitution तपाईंलाई प्रहार हुन सक्छ, ज्वरो र चिसो संग, बलिरहेको र गर्मी संग, र प्रदूषित हावा र क्षय हुनु संग, र उहाँले तपाईं नष्ट सम्म पछि लाग्न सक्छ.
28:23 जो तपाईंले माथि छन् आकाश पीतल को हुन सक्छ, र जमीन जो मा तपाईं tread फलाम को हुन सक्छ.
28:24 प्रभु तपाईंको भूमि मा तपाईं वर्षा को सट्टा धूलो दिन सक्छ, र खरानी तिमी माथि स्वर्गबाट ​​धमकना सक्छ, तपाईं टाढा सखाप भएको छ सम्म.
28:25 प्रभु हात तिमी माथि आफ्नो शत्रुहरू झुक्नुपर्छ गर्न सक्छ. तपाईं एउटा तरिका तिनीहरूलाई विरुद्ध निस्कनेछ सक्छ, र सात तरिका द्वारा भाग्न, र तपाईं पृथ्वीका सबै राज्यहरू मार्फत छरिएका हुन सक्छ.
28:26 र आफ्नो लास हावा सबै उडान कुराहरू र भूमि जङ्गली जनावर लागि खाना हुन सक्छ, र कुनै एक दूर तिनीहरूलाई चलाउनु हुन सक्छ.
28:27 प्रभु मिश्र को अल्सर तपाईंलाई प्रहार हुन सक्छ, र उहाँले आफ्नो शरीर को भाग प्रहार हुन सक्छ, जो मार्फत गोबर बाहिर जान्छ, रोग साथै चिलाउनु संग, यति तपाईं निको हुन असमर्थ छौं भनेर.
28:28 प्रभु उन्माद र अन्धो र मन को पागलपन तपाईंलाई प्रहार हुन सक्छ.
28:29 र तपाईं midday मा grope सक्छ, अन्धो मानिस अन्धकारमा grope गर्न accustomed छ जस्तै, र आफ्नो बाटो सीधा हुन सक्छ. र सबै समय मा तपाईं निन्दा ग्रस्त हुन सक्छ र हिंसा थिचोमिचो गर्न, र तपाईं मुक्त हुन सक्छ जसले कुनै एक हुन सक्छ.
28:30 तपाईं एक पत्नी लाग्न सक्छ, उनको अर्को सोता हुनत. तपाईं एक घर निर्माण हुन सक्छ, तर यो भित्र बस्न छैन. तपाईं दाखबारी रोपेर सक्छ, र यसको पुराना भेला छैन.
28:31 आफ्नो गोरु तपाईंले पहिले immolated हुन सक्छ, हुनत तपाईं यसलाई देखि खान छैन. आफ्नो गधा आफ्नो दृष्टि मा जफत हुन सक्छ, र तपाईं पुनःस्थापित छैन. आफ्नो भेडा आफ्ना शत्रुहरूलाई दिइएको हुन सक्छ, र त्यहाँ तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ जसले कुनै एक हुन सक्छ.
28:32 आफ्नो छोरा र आफ्नो छोरी अर्को मानिसहरूलाई भन्दा हस्तान्तरण हुन सक्छ, आफ्नो आँखा हेर्न र दिन भर तिनीहरूलाई को नजर मा languish रूपमा, र त्यहाँ आफ्नो हातमा कुनै बल हुन सक्छ.
28:33 तपाईंलाई थाहा छैन एक मान्छे आफ्नो भूमि को फल खान सक्छ आफ्नो सबै मेहनत को र. र तपाईं निरन्तर निन्दा र दमन हरेक दिन देखि ग्रस्त हुन सक्छ.
28:34 र तपाईं आफ्नो आँखा देख्ने कुराहरू को आतंक मा stupefied हुन सक्छ.
28:35 प्रभु को घुँडा मा एक धेरै Grievous अल्सर संग र खुट्टा तपाईं प्रहार हुन सक्छ, र तपाईं स्वास्थ्य प्राप्त गर्न असमर्थ हुन सक्छ, टाउको को शीर्ष गर्न खुट्टा को एकमात्र देखि.
28:36 प्रभु तपाईं र तपाईंको राजा सक्छ, जसलाई तपाईं आफैलाई नियुक्त हुनेछ, तपाईं र तपाईंको पुर्खाहरूले ज्ञात छ जो एउटा राष्ट्र. र तपाईं विदेशी देवताहरूको सेवा गर्नेछन्, काठ को र पत्थर को.
28:37 र तपाईं एक हितोपदेश तर केही र प्रभु तपाईं नेतृत्व कसको सबै मानिसहरूका लागि एउटा छोटो कथा हुनेछ.
28:38 तपाईं जमीन मा धेरै बीउ छर्न हुनेछ, तर तपाईं सानो बाली हुनेछ. को सलह सबै निल्न गर्नेछ.
28:39 तपाईं खन्नुहोस् र दाखबारी रोपेर हुनेछ, तर तपाईं रक्सी पिउन छैन, न त यो देखि सबै केहि भेला. यसलाई कीडे तबाह गरिनेछ.
28:40 तपाईं आफ्नो सबै सीमाना मा भद्राक्षका हुनेछ, तर तपाईं तेल अभिषेक गरिने छैन. को जैतून लागि गिर र नष्ट हुनेछ.
28:41 तपाईं छोरा र छोरी गर्भ धारण गर्नेछ, र तपाईं तिनीहरूलाई आनन्द छैन. तिनीहरूले कैद मा नेतृत्व गरिनेछ लागि.
28:42 Rot सबै रूखहरू उपभोग गर्नेछ, साथै आफ्नो भूमि को फल रूपमा.
28:43 देशमा तपाईंसँग बसोबास गर्ने नयाँ आगमन तिमी माथि चढ्नु हुनेछ, र उच्च हुन. तर तपाईं धमकना हुनेछ, र कम हुन.
28:44 उहाँले तपाईंलाई उधारो हुनेछ, र तपाईं उहाँलाई उधारो छैन. उहाँले टाउको रूपमा हुनेछ, र तपाईं पुच्छर रूपमा हुनेछ.
28:45 र यी सबै curses तपाईं आउन पर्छ, र तपाईं खेदो गर्नेछ, र तपाईं को पकड लिन पर्छ, तपाईं टाढा पारित सम्म, किनभने तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न छैन, र तपाईं उहाँको आज्ञा र समारोह सेवा छैन, जो उहाँले तपाईंलाई निर्देशन छ.
28:46 र तपाईं संग संकेत र portents हुनेछ, र आफ्नो सन्तान जन्माएर, सधैंभरि.
28:47 किनभने तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सेवा गरेनन्, gladness र आनन्दित हृदयले, सबै कुरा को प्रशस्त भन्दा.
28:48 तपाईं आफ्नो शत्रु सेवा गर्नेछन्, प्रभु तपाईं कसलाई पठाउने, भोक र तिर्खा र nakedness मा, र सबै कुराको destitution मा. र उहाँले आफ्नो घाँटी मा एक फलाम जुवा राख्नेछ, उहाँले तपाईंलाई चोट नभएसम्म.
28:49 प्रभु टाढा बाट एक राष्ट्र तिमी माथि नेतृत्व गर्नेछन्, पनि पृथ्वीको furthest भागबाट, ठूलो शक्ति भएको चीललाई उडान जस्तै, जसको भाषा बुझ्न सक्षम छैनन्:
28:50 धेरै अशिष्ट राष्ट्र, जो प्राचीन कुनै सम्मान देखाउने, न त साना मा दया लिन.
28:51 र उहाँले आफ्नो गाई को फल निल्न हुनेछ, र आफ्नो भूमि को फल, तपाईं बितिसकेका छन् सम्म, तपाईं गहुँ पछि नछोडी, वा रक्सी, वा तेल, वा बैलों बथान, वा भेडाको बगाल: उहाँले utterly तपाईं नाश सम्म.
28:52 र उहाँले आफ्नो सबै शहर मा तपाईं नाश गर्नेछ. र आफ्नो बलियो र उच्च पर्खाल, जसमा तपाईं विश्वसनीय, आफ्नो सबै भूमि भर नष्ट हुनेछ. तपाईं आफ्नो सबै भूमि भर आफ्नो ढोकाहरू भित्र घेर गरिनेछ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो.
28:53 र तपाईं आफ्नो गर्भमा को फल खान हुनेछ, र आफ्नो छोरा को र आफ्नो छोरी को शरीर, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको दिनेछु जो, कारण जो आफ्नो शत्रु तपाईं दमन हुनेछ वेदनामा र devastation गर्न.
28:54 लाड प्यार र धेरै आत्म-indulgent तपाईं बीच आफ्नै भाइ संग देखा देखी हुनेछ मानिस, र आफ्नो Bosom मा निहित जो पत्नी संग,
28:55 उहाँले आफ्नो छोराहरूको शरीर देखि तिनीहरूलाई दिन नत्र, जसमा उनले खान हुनेछ. उहाँले कारण कब्जाको र destitution गर्न अरू केही छ लागि, जो आफ्नो शत्रुहरू आफ्नो सबै ढोकाहरू भित्र तपाईं अत्याचार हुनेछ.
28:56 कोमल र लाड प्यार महिला, जो माटो मा हिंड्न छैन, न त कारण उनको धेरै ठूलो कोमलता र कोमल गर्न दृढ उनको खुट्टा संग कदम, श्रीमान्सँगै देखा देखी हुनेछ, जो उनको Bosom मा निहित, छोरा को र छोरी को शरीर माथि,
28:57 र afterbirth को फोहर भन्दा, जो उनको जांघों बीच बाट निस्कने जान्छ, र एउटै घण्टामा जन्म छन् जो बच्चाहरु माथि. तिनीहरूले गोप्य तिनीहरूलाई खान गर्नेछ, कारण कब्जाको र devastation समयमा सबै कुराको scarcity गर्न, जो आफ्नो शत्रु तपाईं आफ्नो ढोकाहरू भित्र दमन हुनेछ.
28:58 यदि तपाईं राख्न छैन र यो व्यवस्था सबै शब्द के, जो यो मात्रा लेखिएको छ, र उहाँको महिमित र भयानक नाम डर, छ, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको,
28:59 त्यसपछि प्रभु तपाईंको विपत्तिहरूका वृद्धि हुनेछ, र आफ्नो सन्तान को विपत्तिहरूका, विपत्तिबारे ठूलो र चिरकालीन, रोगबिमारीले धेरै Grievous र लगातार.
28:60 र उहाँले मिश्र को सबै कष्ट तिमीहरूमा फिर्ता हुनेछ, जो तपाईं डर, र यी तपाईं अपनाउँछन् हुनेछ.
28:61 साथै, प्रभु तपाईं माथि यो व्यवस्था को मात्रा मा लेखिएको छैन भनेर सबै रोगहरु र विपत्तिहरूका नेतृत्व गर्नेछन्, उहाँले तपाईं कुचल सम्म.
28:62 र तपाईं नम्बर मा केही रहनेछ, तपाईं भीड मा स्वर्ग को तारा जस्तै अघि थिए हुनत, किनभने तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न छैन.
28:63 र बस अघि रूपमा, प्रभु तपाईं रमाए गर्दा, तपाईं को लागि राम्रो गरिरहेको र गुणन गर्दाको, त्यसैले उहाँ आनन्दित हुनेछन्, तितर-बितर र तपाईं overturning, देशमा टाढा तपाईं लिन ताकि, जो तपाईं अधिकार गर्न प्रविष्ट पर्छ.
28:64 प्रभु सबै मानिसहरूका बीचमा तपाईं फैलाने हुनेछ, पृथ्वीको हाइट्स यसका furthest सीमाका. र तपाईं काठ को र पत्थर को विदेशी देवताहरूको सेवा गर्नेछन्, जो तपाईं र तपाईंको पुर्खाहरूले थाहा थिएन.
28:65 त्यसैगरि, तपाईं सौहार्द हुनेछैन, पनि ती जातिहरूलाई भित्र, न त त्यहाँ आफ्नो खुट्टा को कदम को लागि कुनै पनि बाँकी हुनेछ. प्रभु लागि स्थान एक डरलाग्दो हृदयमा दिनेछु, र असफल आँखा, र जीवन खपत शोक संग.
28:66 यो तपाईं अघि झुन्डिएको थिए भने र आफ्नो जीवन हुनेछ. तपाईं भयभीत रात र दिन हुनेछ, र तपाईं आफ्नो जीवनमा भरोसा छैन.
28:67 बिहान तपाईं भन्नेछन्, 'कसले मलाई साँझ प्रदान गर्नेछ?'र साँझ, 'कसले मलाई बिहान प्रदान गर्नेछ?'किनभने तपाईंको हृदय को खूंखार को, जो तपाईंलाई आत्तिनुपर्ने हुनेछ, र किनभने तपाईंले आफ्नो आँखाले देख्ने ती कुराहरू.
28:68 प्रभु तपाईं जहाज को एक छिटो संग मिश्र फिर्ता नेतृत्व गर्नेछन्, बाटो साथ, जो बारेमा उहाँले तपाईं यसलाई फेरि देख्न भनेर तपाईं भन्नुभयो. त्यस स्थान मा, तपाईं आफ्नो शत्रुहरूलाई पुरुष र महिला सेवकहरू रूपमा बिक्री को लागि माथि राख्नु हुनेछ, तर कुनै एक तपाईँले किन्न इच्छुक हुनेछ। "
29:1 यी मोआब देशमा इस्राएलका छोराहरू संग गठन गर्ने परमप्रभुले मोशालाई निर्देशन जो करारको शब्दहरू हुन्, उहाँले Horeb तिनीहरूलाई संग प्रहार जो त्यो करार छेउमा.
29:2 मोशाले इस्राएलका सबै भनिन्छ, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तपाईंले प्रभु फिरऊनलाई मिश्र देशमा आफ्नो दृष्टि मा गरेको सबै कुरा देखेको छु, र आफ्ना सबै सेवकहरूलाई, र आफ्नो सम्पूर्ण देशमा:
29:3 ठूलो परीक्षा, जो आफ्नो आँखा देखेको छु, ती विशाल संकेत र विचित्रताहरू.
29:4 तर प्रभु तपाईं समझ हृदय दिइएको छैन, र देखेर आँखा, र सुन्न सक्षम छन् कि कान, पनि यस वर्तमान दिन.
29:5 उहाँले मरुभूमि मार्फत चालीस वर्ष लागि नेतृत्व. आफ्नो लुगा बाहिर पहना गरिएको छैन, न त आफ्नो खुट्टा मा जूता उमेर द्वारा खपत गरिएको छ.
29:6 रोटी खान थिएन, न त रक्सी वा रक्सी पिउन गर्नुभयो, तपाईं म प्रभु तपाईंको परमेश्वर हुँ भनेर थाहा थियो कि त.
29:7 र तपाईं यस ठाउँमा आइपुगेको. र सीहोन, Heshbon राजा, र अनि, बाशानका राजा, युद्धमा हामीलाई भेट्न बाहिर गए. र हामी तिनीहरूलाई मारे.
29:8 र हामी आफ्नो भूमि लिए र Ruben र गाद एक सम्पत्तिको रूपमा यसलाई बुझाइएको, र मनश्शेलाई कुलका आधा गर्न.
29:9 त्यसैले, यो करार शब्दहरू राख्न, र तिनीहरूलाई पूरा, तपाईं सबै तपाईं गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न सक्छ भनेर.
29:10 आज, तपाईं सबै प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि खडा: आफ्नो नेता, र कुल, र जन्म द्वारा ती ठूलो, र शिक्षकहरू, इस्राएलका सबै मानिसहरू,
29:11 छोराछोरीलाई श्रीमतीले, र शिविरमा तपाईंसँग बास गर्ने नयाँ आगमन, अलग काठ काट्न गर्नेहरूलाई देखि, र पानी ल्याउन गर्नेहरूलाई,
29:12 तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको करार मा पार गर्न सक्छ भनेर, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आज तपाईंसँग प्रहार जो शपथ मा.
29:13 त्यसैले उसले आफूलाई एउटा मान्छे माथि तपाईं उठाउनु पर्छ, र त त्यो आफ्नो परमेश्वरको हुनेछ, उहाँले तपाईंलाई भनिएको छ जस्तै, र उहाँले आफ्नो पिता शपथ खानुभयो जस्तै: अब्राहाम, इसहाक, र याकूब.
29:14 र म यो करार गठन होइन र एक्लै तपाईं यी अवसरहरूमा शपथ खाएको पुष्टि,
29:15 तर साथै वर्तमान हो अनुपस्थित भएकाहरूलाई रूपमा भएका सबैलाई साथ.
29:16 तपाईंलाई थाहा लागि हामी मिश्र देशमा बस्ने कसरी, र हामी राष्ट्रका बीचमा मार्फत पारित कसरी. र तिनीहरूलाई मार्फत पारित गर्दा,
29:17 तपाईं आफ्नो abominations र फोहर देखे, छ, काठ को र पत्थर को आफ्नो मूर्तिहरू, चाँदी र सुनको, जो तिनीहरूले पूजा,
29:18 ताकि तपाईं बीच हुन मानिस वा महिला, परिवार वा कुलको, जसको हृदय हाम्रो प्रभु परमेश्वर यो दिन टाढा बन्द गरिएको छ, जाने र ती राष्ट्रका देवहरूको सेवा गर्न ताकि. त्यसपछि लागि तपाईं बीच हुनेछ मूल निस्कने पित्त र तीता springing.
29:19 र उहाँले यस शपथ शब्दहरू सुन्न थिए भने, उहाँले यसो आफ्नै हृदयमा आफूलाई आशीर्वाद थियो: 'त्यहाँ मेरो लागि शान्ति हुनेछ, र म मेरो हृदयको depravity हिंड्न हुनेछ। 'अनि त, inebriated छ जो तिर्खाएको छ जो एक उपभोग थियो एक.
29:20 तर प्रभु उसलाई बेवास्ता थियो. बरु, त्यो समयमा, आफ्नो उतेजना र zealousness धेरै निकै कि मानिसको विरुद्धमा enflamed हुनेछ, र यो मात्रा लेखिएको छ जो सबै curses उहाँमाथि बसोबास थियो. र प्रभु स्वर्गमा अन्तर्गत आफ्नो नाम उठाउन् थियो,
29:21 र इस्राएलका सबै कुल बाहिर perdition निम्ति उहाँलाई उपभोग, यो व्यवस्था पुस्तकमा र करार मा निहित छन् जो curses अनुसार.
29:22 र पछि पुस्ता बाहिर बोल्न हुनेछ, जो पछि पैदा हुनेछ छोराहरू साथ. र sojourners, टाढा बाट जो पुग्नु हुनेछ, कि भूमि को विपत्तिहरूका र प्रभु यो दुःख हुनेछ जो संग रोगबिमारीले देख्ने,
29:23 सल्फर र पिघला नुन संग जलाए भएको, यो अब रोप्न सकिन्छ भनेर. र निश्चित कुनै greenery अप वसन्त थियो, सदोम र गमोराको विनाशबाट उदाहरण जस्तै, Admah र Zeboiim, जो परमप्रभुले आफ्नो क्रोध र उतेजना संग पल्टाइदिनुभयो.
29:24 अनि त, सबै जातिका भन्नुहुन्छ: 'किन छ प्रभु यो भूमि तिर यसरी काम? आफ्नो उतेजना को यो विशाल क्रोध के हो?'
29:25 र तिनीहरूले प्रतिक्रिया हुनेछ: 'किनभने तिनीहरूले प्रभुको करार त्यागेर, जसमा उनले आफ्नो बाबु संग गठन, उहाँले मिश्र देशमा तिनीहरूलाई टाढा नेतृत्व गर्दा.
29:26 र तिनीहरूले विदेशी देवताहरूको सेवा गरेको, र तिनीहरूलाई लाग्यो, हुनत तिनीहरूले छैन थाहा भएन, र तिनीहरूले तिनीहरूको लागि छुट्याइयो थियो हुनत गरिएको.
29:27 यस कारण, प्रभुको उतेजना यो भूमि विरुद्ध enraged थियो, यो भन्दा यो मात्रा लेखिएको छ जो सबै curses नेतृत्व गर्न ताकि.
29:28 र उहाँले आफ्नै भूमि तिनीहरूलाई डाली छ, रिस र उतेजना संग, र एक धेरै ठूलो indignation संग, र त्यो एक अनौठो भूमिमा तिनीहरूलाई हालियो छ, जस्तै यो दिन सिद्ध भएको छ। '
29:29 हाम्रो प्रभु परमेश्वर यी लुकेको कुरा हामीलाई र perpetuity हाम्रो छोराहरू प्रकट गरिएको छ, ताकि हामी यो व्यवस्था सबै शब्द पूरा गर्न सक्छन्। "
30:1 "अब यी सबै कुराहरू तपाईं भन्दा पतित हुनेछ जब, आशिष् वा म तपाईंको दृष्टि मा निस्केको सेट छन् कि श्राप, र तपाईं जो प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं dispersed हुनेछ सबै जातिहरू बीचमा आफ्नो हृदयमा गल्तीको पश्चात्ताप गर्न नेतृत्व गरिएको हुनेछ,
30:2 र तपाईं उसलाई फर्के हुनेछ जब, उहाँको आज्ञा पालन गर्न ताकि, म यो दिन तपाईं निर्देशन गरेझैं, आफ्नो छोरा संग, आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राण संग,
30:3 त्यसपछि प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंलाई कैद टाढा नेतृत्व गर्नेछन्, र उहाँले तपाईं दया हुनेछ, र उहाँले अघि तपाईं dispersed थियो जो सबै जातिका फेरि भेला हुनेछ.
30:4 तपाईं स्वर्गको डंडे रूपमा टाढा छरिएका हुनेछ गरिएका समेत, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको त्यहाँ तपाईंले पुन: प्राप्त गर्नेछ.
30:5 र उहाँले तपाईंलाई लाग्न र आफ्नो बाबु नजिकै थियो जो भूमिमा तपाईं नेतृत्व गर्नेछन्, र तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्नेछ. र तपाईं आशिष्, आफ्नो बाबु कहिल्यै थिए भन्दा उहाँले तपाईंलाई नम्बर मा ठूलो गर्नेछ.
30:6 प्रभु तपाईंको परमेश्वरले तपाईंको हृदय लिङगगको छाला काट्नु हुनेछ, र आफ्नो सन्तान को हृदय, ताकि तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले र आफ्नो सम्पूर्ण प्राण संग प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम गर्न, ताकि तपाईं बाँच्न सक्षम हुन सक्छ.
30:7 र उहाँले आफ्ना शत्रुहरूलाई मा यी सबै curses हुनेछ, र घृणा र खेदो गर्नेहरूलाई मा.
30:8 तर तपाईं फर्कन पर्छ, र तपाईं प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न पर्छ. र तपाईं जो म यो दिन तपाईं entrusting छु सबै आज्ञा पूरा गर्नेछु.
30:9 र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं आफ्नो हात को सबै कार्यहरूमा प्रशस्त हुन हुनेछ, आफ्नो गर्भमा को progeny मा, र आफ्नो गाई को फल मा, आफ्नो भूमि प्रजनन मा, र सबै कुराको एउटा प्रशस्त साथ. प्रभु फिर्ता हुनेछ, उहाँले सबै राम्रो कुरामा तपाईं रमाउनुहोस् ताकि, उहाँले आफ्नो बाबु आनन्दित जस्तै:
30:10 तर केवल तपाईंले प्रभु तपाईंको परमेश्वरको आवाज सुन्न भने, र आफ्नो आदेश र समारोह राख्न, जो यस व्यवस्थामा लेखिएको छ, र मात्र तपाईंले आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सबै प्राण संग प्रभु फर्कन भने आफ्नो परमेश्वरको.
30:11 यो आज्ञा, जो आज म तपाईंलाई सुम्पिन्छु, तपाईंले माथि उच्च छैन, न त यो टाढा राखिएको छ.
30:12 न त स्वर्ग मा छ, ताकि तपाईं भन्न सक्षम हुनेछ, 'हामी कुन स्वर्ग चढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ, यसले हामीलाई फिर्ता पूरा गर्न ताकि, र त हामी सुन्न र काम मा पूरा गर्न सक्छ भन्ने?'
30:13 न त समुद्र परे यो छ, तपाईं यसो आफैलाई माफ हुनेछ भनेर, 'हामी कुन समुद्र पार गर्न सक्षम छ, र यसले हामीलाई फिर्ता पूरा गर्न, हामी सुन्न सक्षम हुन सक्छ र निर्देशन गरिएको छ के गर्न भनेर?'
30:14 बरु, शब्द तपाईं नजिक छ, आफ्नो मुख र आफ्नो हृदयमा, त्यसैले तपाईं यसलाई के हुन सक्छ कि.
30:15 म यो दिन आफ्नो दृष्टि मा निस्केको सेट के विचार, जीवन र राम्रो, वा, विपरीत पक्षमा, मृत्यु र दुष्ट,
30:16 ताकि तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम गर्न, र उहाँको मार्गमा हिंड्न, र उहाँको आज्ञा र समारोह र इन्साफ राख्न, र यति भनेर बाँच्न सक्छ, र उहाँले तपाईं गुणा र देशमा तपाईं आशीर्वाद सक्छ, जो तपाईं अधिकार गर्न प्रविष्ट पर्छ.
30:17 तर आफ्नो हृदय फर्काए हुनेछ गरिएका यदि, त्यसैले तपाईं सुन्न इच्छुक छैन भन्ने, र, त्रुटि द्वारा धोका गरिएको होने, तपाईं अनौठो देवताहरूको पुजा गर्नु र तिनीहरूको सेवा,
30:18 त्यसपछि म यो दिन तपाईं भविष्यवाणी तपाईं नष्ट हुनेछ कि, र तपाईं देशमा मात्र छोटो समयको लागि रहने, जसको लागि तपाईं जोर्डन पार गर्नेछ, र जो तपाईं अधिकार गर्न प्रविष्ट पर्छ.
30:19 म यो दिन स्वर्ग र पृथ्वी साक्षी कल, म जीवन र मृत्युको अघि सेट गरेको, आशिष् र श्राप. त्यसैले, जीवन रोज्न, कि तपाईं र तपाईंको सन्तान दुवै बाँच्न सक्छ त,
30:20 र यति भनेर प्रभु आफ्नो परमेश्वरको प्रेम गर्न, र आफ्नो आवाज पालन, र उसलाई अपनाउँछन्, (लागि उहाँले आफ्नो जीवन र आफ्नो दिन को लम्बाइ छ) र तपाईं देशमा बाँच्न सक्छ भनेर, जो बारेमा प्रभु तपाईंको पुर्खाहरूले शपथ खानुभयो, अब्राहाम, इसहाक, र याकूब, उहाँले तिनीहरूलाई यो दिन भनेर। "
31:9 अनि त, मोशाले यो व्यवस्था लेखे, र उहाँले पुजारीहरूलाई यसलाई हस्तान्तरण, लेवी छोराहरू, जो प्रभुको सन्दूक लगे, र इस्राएलका सबै एल्डरहरूलाई.
31:10 अनि उहाँले तिनीहरूलाई निर्देशन, यसो: "सात वर्ष पछि, छूट को वर्ष मा, Tabernacles को भोज को solemnity मा,
31:11 प्रभु तपाईंको परमेश्वरको दृष्टि मा इस्राएलका सबै क्रममा convened छ जब देखा पर्न, ठाउँ जो प्रभु चयन गर्नेछ, तपाईं इस्राएलका सबै अघि यो व्यवस्था शब्दहरू पढ्न पर्छ, आफ्नो सुनुवाइ मा.
31:12 र मान्छे जब भेला गरेका छन्, मानिसहरू साथै महिला र साना बच्चाहरु, र आफ्नो ढोकाहरू भित्र जो नयाँ आगमन, तिनीहरूले सिक्न सक्छ भनेर तिनीहरूले सुन्न पर्छ, र प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर हुन सक्छ, र राख्न र यो व्यवस्था सबै शब्द पूरा हुन सक्छ,
31:13 र पनि यति भनेर आफ्नो छोरा, जो अहिले नजान्ने हो, सुन्न सक्षम हुन सक्छ, र प्रभु तिनीहरूले देशमा बाँच्ने तपाईं यात्रा हुनेछ जो परमेश्वरले सबै दिन डर हुन सक्छ, यसलाई प्राप्त गर्न यर्दन पार। "
31:14 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "हेर, आफ्नो मृत्युको दिन नजिक. कल यहोशू, र गवाही को बासस्थान खडा, म उहाँलाई निर्देशन सक्छ भनेर। "त्यसैले, मोशा र यहोशू गए र गवाही को बासस्थान उभिएर.
31:15 र प्रभु त्यहाँ देखा, बादल खाँबो मा, जो बासस्थानको को प्रवेश उभिरहेका.
31:16 र परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो: "हेर, तपाईं आफ्नो बाबु सुत्न पर्छ, र यो मानिसहरूलाई उठ्नेछ र विदेशी देवताहरूको पछि fornicate हुनेछ, देशमा जो तिनीहरूले प्रविष्ट हुनेछ तिनीहरूले बस्न सक्छ. त्यस स्थान मा, तिनीहरूले मलाई त्याग्नुहुनेछैन, र तिनीहरूले म तिनीहरूलाई गठन गरेको छ कि करार शून्य गर्नेछ.
31:17 र मेरो उतेजना तिनीहरूलाई विरुद्धमा दिनमा enraged गरिनेछ. र म तिनीहरूलाई त्याग्नुभएन हुनेछ, र म तिनीहरूलाई मेरो अनुहार लुकाउन हुनेछ, र तिनीहरूले devoured गरिनेछ. हरेक दुष्ट र कष्ट तिनीहरूलाई पाउनुहुनेछ, धेरै तिनीहरूले त्यस दिन भन्नेछन् भनेर: 'साँच्चै, परमेश्वरले यी दुष्कर्मलाई मलाई फेला मलाई साथ छैन किनभने यो छ। '
31:18 तर म लुकाउन हुनेछ, र म त्यो दिन मेरो अनुहार लुकाउनु हुनेछ, किनभने तिनीहरूले गरेका सबै दुष्कर्मलाई को, किनभने उनीहरू अनौठो देवताहरूको पछ्याएका छन्.
31:19 अनि त, अहिले यो छोटे गीत लेख्न, र इस्राएलका छोराहरू यो सिकाउन, तिनीहरूले स्मृति मा राख्ने ताकि, र मुख गरेर गाउन सक्छ, र त्यसैले यो पद इस्राएलका छोराहरू बीचमा मलाई एक गवाही हुन सक्छ.
31:20 लागि म भूमिमा तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नेछन्, जो बारे म आफ्नो बाबु शपथ खानुभयो, दूध र मह संग बगिरहेको भूमि. र जब उनि खानु भएको छ, र satiated र fattened गरिएको छ, तिनीहरूले विदेशी देवताहरूको गर्न तर्फ हुनेछ, र तिनीहरूले सेवा गर्नेछन्. र तिनीहरूले मलाई disparage हुनेछ, र तिनीहरूले मेरो करार nullify हुनेछ.
31:21 र पछि धेरै दुष्कर्मलाई र कष्ट तिनीहरूलाई बढ्तै छ, यो छोटे गीत एक गवाही तिनीहरूलाई जवाफ हुनेछ; यो OBLIVION मा पारित कहिल्यै पर्छ, टाढा आफ्नो सन्तान को मुख बाट. म आफ्नो विचार थाहा र के तिनीहरूले आज बारे हुनुहुन्छ लागि, पनि म जो म तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिमा तिनीहरूलाई नेतृत्व अघि। "
31:22 त्यसैले, मोशाले छोटे गीत लेखे, र उहाँले इस्राएलका छोराहरू यसलाई सिकाउनुभयो.
31:23 र प्रभु यहोशू निर्देशन, नन छोरा, र, उहाँले भन्नुभयो: "बलियो र साहसी हुनुहोस्. तपाईं जो म प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिमा इस्राएलका छोराहरू नेतृत्व पर्नेछ, र मैले तपाईंलाई हुनेछ। "
31:24 त्यसैले, मोशा मात्रा मा यो व्यवस्था शब्दहरू लेखिएको थियो पछि, र यो समाप्त भएको थियो,
31:25 उहाँले लेवीहरूले निर्देशन, जो प्रभुको सन्दूक लगे, यसो:
31:26 "यो पुस्तक लिनुहोस्, र प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सन्दूक भित्र ठाँउ, यो तपाईं विरुद्ध गवाही रूपमा हुन सक्छ भनेर.
31:27 म तिम्रो contentiousness र आफ्नो धेरै कडा घाँटी थाहा. म अझै पनि जीवित र तपाईंसँग प्रवेश छु गर्दा पनि, तपाईं सधैं प्रभुको विरुद्ध contention संग काम छ. कति थप त्यसैले म मरेको हुनेछ जब?
31:28 आफ्नो कुल भर जन्म द्वारा मलाई सबै ठूलो ती भेला, साथै आफ्नो शिक्षकहरू, र म आफ्नो सुनुवाइ यी शब्दहरू बोल्न हुनेछ, र म स्वर्ग र पृथ्वी तिनीहरूलाई विरुद्ध साक्षी कल गर्नेछ.
31:29 मलाई थाहा लागि भनेर, मेरो मृत्यु पछि, तपाईं iniquity संग कार्य गर्नेछ, र तपाईं चाँडै म तिमीलाई निर्देशन गरेको बाटो बाट प्रस्थान गर्नेछ. अनि त, दुष्कर्मलाई अन्त समय मा तपाईं पूरा हुनेछ, तपाईं प्रभुको दृष्टि मा दुष्ट गरेका हुनेछ जब ताकि आफ्नो हात को काम मार्फत उहाँलाई प्रकुपित गर्न। "
31:30 यसरी मोशा बोल्न गरे, इस्राएलका सम्पूर्ण विधानसभा को सुनुवाइ मा, यो छोटे गीत को शब्द, र उहाँले आफ्नो धेरै अन्त गर्न यो पूरा.
32:1 "सुन्नुहोस्, हे स्वर्गमा, म भन्दै छु के गर्न. पृथ्वी मेरो मुखबाट शब्दहरू सुन्न गरौं.
32:2 मेरो सिद्धान्त को वर्षा जस्तै जम्मा गरौं. को शीत जस्तै मेरो eloquence फारम गरौं, को बोट मा एक तुवालो जस्तै, घाँस मा र जस्तै पानी थोपाहरूद्वारा.
32:3 म प्रभुको नाम आह्वान गर्नेछ. हाम्रो परमेश्वरको वैभवशाली स्वीकार!
32:4 परमेश्वरको काम सिद्ध छन्, र आफ्ना सबै मार्गमा इन्साफ. भगवान विश्वासी र कुनै पनि iniquity बिना छ. उनले र भला हुनुहुन्छ.
32:5 तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा पाप गरेका छन्, र आफ्नो फोहर मा तिनीहरूले आफ्नो छोरा छन्. तिनीहरूले एक पतित र perverse पुस्ता हो.
32:6 यो कसरी तपाईं प्रभु गर्न प्रस्ताव थियो फिर्ती हुन सक्छ, हे मूर्ख र बेहोस मान्छे? उहाँले आफ्नो पिता छ, जसले तपाईंलाई नजिकै छ, र तपाईं गरे, र तपाईंले सिर्जना?
32:7 प्राचीन को दिन सम्झना. प्रत्येक पुस्ता विचार. आफ्नो बुबा प्रश्न, र उहाँले तपाईंलाई यो घोषणा हुनेछ. आफ्नो प्राचीन प्रश्न, र तिनीहरूले तपाईंलाई यो भन्नेछु.
32:8 सबैभन्दा उच्च जाति विभाजित गर्दा, उहाँले आदम छोराहरू अलग गर्दा, उहाँले इस्राएलका छोराहरू संख्या अनुसार मानिसहरूले सीमा नियुक्त.
32:9 तर प्रभुको भाग आफ्नो मान्छे छ: याकूबले, आफ्नो सम्पत्तिको को धेरै.
32:10 उहाँले मरुभूमि देशमा उहाँलाई पत्ता, हरर को ठाउँ र एक विशाल मरूभूमिमा. उहाँले वरिपरि उहाँलाई नेतृत्व र उसलाई सिकाउनुभएको, र उहाँले आफ्नो आँखा को छात्र जस्तै उहाँलाई गार्ड सहित,
32:11 एक चीललाई यसको जवान प्रोत्साहन जस्तै उड गर्न, र, तिनीहरूलाई माथि उडान, यसको पखेटा बाहिर फैलिएको, र ती लिन्छ, र यसको काँध मा तिनीहरूलाई वहन.
32:12 प्रभु एक्लै आफ्नो नेता थियो, र त्यहाँ उसलाई कुनै अनौठो भगवान थियो.
32:13 उहाँले एक उच्च भूमि मा उहाँलाई उभिए, उहाँले क्षेत्रहरू फल खान सक्छ भनेर, उहाँले चट्टान देखि मह खान सक्छ भनेर, र मुश्किल पत्थर देखि तेल,
32:14 बथानलाई देखि मक्खन, र भेडा बाट दूध, को पाठाहरूलाई देखि बोसो संग, र बाशानका छोराहरू देखि मेढे र बाख्राको संग, गहुँ को कर्नेल संग, र उहाँले अंगूर को undiluted रगत पिउन सक्छ भनेर.
32:15 प्रिय बोसो वृद्धि, र उहाँले kicked. बोसो र बाक्लो र व्यापक हुर्किसकेका भएको, उहाँले परमेश्वरको त्यागेर, आफ्नो निर्माता, र उहाँले परमेश्वरको हटाउनुभएपछि, आफ्नो मुक्तिदाता.
32:16 तिनीहरूले अनौठो देवताहरूको उहाँलाई सुनेपछि, र तिनीहरूले abominations द्वारा रिस उसलाई भड्काए.
32:17 तिनीहरूले परमेश्वरको दुष्ट गर्न immolated र, तिनीहरूले थाहा थिएन जसलाई छैन देवतालाई, जो नयाँ र हाल आगमन थिए, जसलाई आफ्नो बाबु उपासना गरेनन्.
32:18 तपाईं जसले तपाईंलाई गर्भधारण परमेश्वर त्याग्ने, र तपाईं जसले तपाईंलाई सिर्जना प्रभु बिर्सनुभएको छ.
32:19 प्रभु देख्यो, र उहाँले रिस गर्न भड्काए थियो. आफ्नै छोरा र छोरी को लागि उसलाई सुनेपछि.
32:20 अनि उहाँले भन्नुभयो: 'म तिनीहरूलाई मेरो अनुहार लुकाउन हुनेछ, र म आफ्नो धेरै अन्त विचार गर्नेछौं. यस को लागि एक perverse पुस्ता छ, र तिनीहरूले अविश्वासी छोराहरू छन्.
32:21 तिनीहरूले थियो जो परमेश्वरले कि मलाई सुनेपछि छ, र तिनीहरूले खालीपनको मलाई रिसाउँछन् छ. अनि त, म तिनीहरूलाई प्रकुपित हुनेछ जो एक मान्छे छ, र म एक मूर्ख राष्ट्र तिनीहरूलाई रिस हुनेछ.
32:22 आगो मेरो उतेजना मा kindled गरिएको छ, र यो गहिरो नरक पनि बाल्न हुनेछ, र यो आफ्नो उत्पादन पृथ्वी निल्न हुनेछ, र यो पहाड को नींव बाल्न हुनेछ.
32:23 म तिनीहरूमाथि दुष्कर्मलाई हिप हुनेछ, र म तिनीहरूलाई बीच मेरो तीर expend हुनेछ.
32:24 तिनीहरूले अनिकाल द्वारा खपत हुनेछ, र एक धेरै तीतो खानको साथ चराहरूले निल्न हुनेछ. म तिनीहरूलाई बीच जङ्गली जनावर को दाँत निस्कने पठाउने, जमीन मार्फत scurry कि प्राणीहरू को उतेजना साथ, र serpents को.
32:25 बाहिर, तरवार तिनीहरूलाई अत्याचार हुनेछ; र भित्र, त्यहाँ भय हुनेछ, को प्रथम लागि रूपमा जवान लागि धेरै, र पुरानो मानिस लागि रूपमा जन्मेका लागि धेरै.
32:26 मैले भने: तिनीहरूले जहाँ? मैले मानिसहरूलाई बीचबाट बन्द गर्न आफ्नो स्मृति कारण हुनेछ.
32:27 तर किनभने शत्रुहरूको क्रोधको, म यसलाई ढिलाइ गरेको छ. अन्यथा, सायद आफ्नो शत्रुहरू घमण्डी हुनेछ र भन्नुहुन्छ: "हाम्रो उच्च हात, र प्रभु, यी सबै कुराहरू गर्नुभएको छ। "
32:28 तिनीहरूले सल्लाह बिना र प्रूडेंस बिना राष्ट्रको छन्.
32:29 म तिनीहरू बुद्धिमानी र समझ भनेर इच्छा, र धेरै अन्त लागि प्रदान हुनेछ। '
32:30 कसरी यो छ कि एक हजार pursues, र दुई chases दस हजार? छ यो किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई बेचिएको छ, र प्रभु तिनीहरूलाई संलग्न छ किनभने?
32:31 हाम्रो परमेश्वरले तिनीहरूको देवताहरूको रुचि छैन. र हाम्रो शत्रु न्यायाधीशहरूले छन्.
32:32 आफ्नो बोटहरू सदोम को बोटहरू को हो, तर गमोराको उपनगर देखि. आफ्नो अङ्गुर पित्त को अङ्गुर छन्, र आफ्नो अंगूर समूहहरु भन्दा तीतो छन्.
32:33 आफ्नो रक्सी सांप को पित्त छ, र यो asps को जाती नहुने venom छ.
32:34 यी कुराहरू मलाई साथ भण्डारण छ नहीं गरिएको, र मेरो सम्पत्तिहरू बीच अप छाप?
32:35 बदला लिने काम मेरो हो, र म समयमा तिनीहरूलाई चुक्ता हुनेछ, त्यसैले आफ्नो खुट्टा पर्ची र पर्न सक्छ भन्ने. perdition दिन नजिकै छ, र समय देखा पर्न rushes। '
32:36 प्रभु आफ्ना मानिसहरूलाई न्याय, र उहाँले आफ्ना सेवकहरूलाई मा दया हुनेछ. उहाँले आफ्नो हात कमजोर गरिएको देख्ने, संलग्न गरिएको भएकाहरूलाई त्यसै असफल गरेको, र त्यागेका छन् गर्नेहरूलाई खपत गरिएको छ कि.
32:37 र उहाँले भनौं: 'आफ्नो देवताहरूलाई कहाँ छन्, जसलाई तिनीहरूले विश्वास थियो?
32:38 तिनीहरूले सिकार को बोसो खाए, र तिनीहरूले libations को रक्सी पिए. त्यसैले यी माथि उठ्नेछ गरौं, र तपाईं राहत ल्याउन, र आफ्नो दुःख मा रक्षा.
32:39 म एक्लै छु भनेर हेर्न, र त्यहाँ मलाई छेउमा कुनै अन्य भगवान छ. म मार्नेछ, र म बाँच्न कारण हुनेछ. म प्रहार गर्नेछ, म र निको हुनेछ. र त्यहाँ मेरो हात बाट उद्धार गर्न सक्षम छ जो कुनै एक छ.
32:40 म स्वर्ग मेरो हात माथि हुनेछन्, र म भन्न हुनेछ: म सदाको बस्ने.
32:41 जब म बिजुली जस्तै मेरो तरवार तिखार्ने, र मेरो हात न्यायको पकड लिन्छ, त्यसपछि म मेरो शत्रुहरूलाई बदला प्रस्तुत हुनेछ, र मलाई घृणा गर्नेहरूलाई चुक्ता हुनेछ.
32:42 म रगत मेरो तीर inebriate हुनेछ, र मेरो तरवार शरीर निल्न हुनेछ: को slain रगत बाट र कैद देखि, शत्रुलाई को उजागर टाउको देखि। '
32:43 तपाईं राष्ट्रका, आफ्नो मान्छे प्रशंसा! उहाँले आफ्ना सेवकहरूको रगतको बदला गर्नेछ. र उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई बदला वितरण हुनेछ. र उहाँले आफ्नो मान्छे को देशमा दयालु हुनेछ। "
32:44 त्यसैले, मोशाले मानिसहरूको कान यो छोटे गीत को सबै शब्द गए र बोले, उहाँले र यहोशू दुवै, नन छोरा.
32:45 र उहाँले यी सबै शब्द पूरा, इस्राएलका सबै कुरा.
32:46 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "जो म यो दिन तपाईं testifying छु सबै शब्द मा आफ्नो हृदय सेट. त्यसैले तपाईं आफ्नो छोरा आज्ञा गर्नेछु, राख्न, र के गर्न, र यो व्यवस्थामा लेखिएको छ कि सबै कुरा पूरा गर्न.
32:47 यी कुराहरू लागि कुनै उद्देश्य तपाईं सुम्पिएको गरिएको छैन, तर यति भनेर प्रत्येक तिनीहरूलाई द्वारा बाँच्न थियो, र यति भनेर, यी गरिरहेको मा, तपाईं देशमा लामो समय को लागि जारी हुन सक्छ, जो तपाईं क्रम यो अधिकार मा यर्दन पार मा प्रवेश गर्नेछ। "
32:48 र प्रभु मा नै दिन मोशाले कुरा, यसो:
32:49 "यो पहाड चढ्नु, Abarim, (छ, क्रसिंग को) माउन्ट नबो मा, जो मोआब देशमा छ, विपरीत यरीहो, र कनान हेर्न, जो म यो प्राप्त गर्न इस्राएलका छोराहरू गर्न बचाउनुहुनेछ. र तपाईं पहाड मा मर्नेछन्.
32:50 यो चढाई पछि, तपाईं आफ्नो मानिसहरूलाई सामेल गरिनेछ, बस आफ्नो भाइ रूपमा हारून माउन्ट सींगदा मृत्यु, र आफ्नो मान्छे संग राखिएको थियो.
32:51 तपाईं इस्राएलका छोराहरू बीचमा मेरो विरुद्धमा trespassed लागि, कन्ट्राडिक्शन को वाटर्स मा, Kadesh मा, पापको मरुभूमिमा. र तपाईं इस्राएलका छोराहरू बीचमा मलाई पवित्र छैन.
32:52 तपाईं विपरीत देशमा देख्नेछन्, जो म इस्राएलका छोराहरू दिनेछु, तर तपाईं यो प्रवेश गर्नेछैनन्। "
33:1 यो आशिष् हो, जो मोशाले संग, परमेश्वरको मानिस, आफ्नो मृत्यु अघि इस्राएलका छोराहरू आशिष्.
33:2 अनि उहाँले भन्नुभयो: "प्रभु सिनाई देखि गयो, र उहाँले Seir हामीलाई लागि उठ्दा. उहाँले माउन्ट पारान देखि देखा, र पवित्र जनहरूको हजारौं उसलाई थिए. आगोको व्यवस्था आफ्नो दाहिने हात थियो.
33:3 उहाँले मानिसहरूलाई प्रेम; सबै पवित्र जनहरूलाई आफ्नो हात मा हो. र जो आफ्नो खुट्टा भेट्नुपर्छ ती आफ्नो सिद्धान्त प्राप्त गर्नेछ.
33:4 मोशाले व्यवस्थामा हामीलाई निर्देशन, याकूबका भीड को उत्तराधिकार.
33:5 राजा ठूलो धार्मिकता हुनेछ, इस्राएलका कुल संग मान्छे को राजकुमार को सभा मा.
33:6 बाँच्न Ruben गरौं, र मर्न छैन, र उहाँले नम्बर मा सानो हुन सक्छ। "
33:7 यो यहूदाका आशिष् हो. "सुन्नुहोस्, हे प्रभु, यहूदाका आवाज, र आफ्नो मान्छे उसलाई नेतृत्व. आफ्नो हात उहाँको लागि लड्न पर्छ, र उहाँले आफ्नो विरोधीहरू विरुद्ध आफ्नो सहायक हुनेछ। "
33:8 त्यसै गरी, लेवी उहाँले भन्नुभयो: "तपाईंको पूर्णता र आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो पवित्र मानिस लागि हो, जसलाई प्रलोभनको तपाईंलाई सिद्ध गरेका छन्, र जसलाई तपाईंले कन्ट्राडिक्शन को वाटर्स मा न्याय गरेका छन्.
33:9 उहाँले आफ्नो बुबालाई र आफ्नो आमा भने छ, 'मैले तपाईलाई चिन्दिन,'र आफ्ना भाइहरूलाई, 'म तपाईंलाई वेवास्ता हुनेछ।' अनि तिनीहरूले आफ्नै छोरा ज्ञात छैन. यी आफ्नो वचन पालन गरेका छन् र आफ्नो करार पालन गरेका छन्:
33:10 तपाईंको इन्साफ, हे याकूबका, तपाईंको व्यवस्था, हे इस्राएलका. तिनीहरूले आफ्नो उतेजना र आफ्नो वेदीमा एक आहुति अघि धूप राख्न पर्छ.
33:11 हे प्रभु, आफ्नो शक्ति आशीर्वाद, र आफ्नो हात को काम प्राप्त. आफ्ना शत्रुलाई को पीठ प्रहार, र उसलाई घृणा गर्नेहरूलाई खडा गरौं गर्छन्। "
33:12 र बिन्यामीन उहाँले भन्नुभयो: "सबै भन्दा प्रभुको प्रिय उहाँलाई विश्वस्त बस्नेछन्. उहाँले लामो सबै दिन रहनेछ, एक दुल्हन कोठामा मा भने, र उहाँले तिनलाई काखमा बीच आराम गर्नेछु। "
33:13 त्यसै गरी, यूसुफलाई उहाँले भन्नुभयो: "उहाँको भूमि प्रभुको आशिष् बाट हुनेछ, स्वर्गको फल देखि, र शीत देखि, र पातालमा देखि जो तल निहित,
33:14 सूर्य र चन्द्र अन्तर्गत बाली फल देखि,
33:15 पुरातन पहाड को हाइट्स देखि, यस अनन्त पहाडहरु को फल देखि,
33:16 र यसका सबै plenitude पृथ्वी को फल देखि. May बुश मा देखा जो उहाँको आशिष्, यूसुफको शिरमा बसोबास, र आफ्ना भाइहरूलाई बीच Nazarite को टाउको को शीर्ष मा.
33:17 आफ्नो उत्कृष्टता पहिलो-जन्म साँढेको जस्तो छ. आफ्नो सीङ एक गैंडा को सीङ जस्तै हो; उहाँले अन्यजातिहरूको विरुद्ध यी brandish पर्छ, पनि पृथ्वीको अन्त्य गर्न. यी एप्रैम को असंख्य मानिसहरूले छन्, र यी मनश्शेका हजारौं। "
33:18 र Zebulun उहाँले भन्नुभयो: "आनन्द गर, एक Zebulun को, आफ्नो प्रस्थान मा, र Issachar, तपाईंको tabernacles मा.
33:19 तिनीहरूले पहाड गर्न मानिसहरूका बोलाउन पर्छ. त्यहाँ, तिनीहरूले न्यायको सिकार immolate पर्छ, जो समुद्र को बाढी खान्छन्, दूध मा भने, र बालुवा को लुकेका खजानाहरू मा। "
33:20 र उहाँले भन्नुभयो गाद गर्न: "धन्य गाद आफ्नो चौडाई छ. उहाँले सिंह जस्तै विश्राम छ, र त्यो हात र टाउको को शीर्ष जफत गरेको छ.
33:21 र उसले आफ्नो पूर्व-eminence देखेको छ, जो आफ्नो शिक्षक आफ्ना भाग रूपमा भण्डारण छ. उहाँले मानिसहरूको राजकुमार थियो, र उहाँले प्रभुको justices पूरा, र इजरायल आफ्नो न्याय। "
33:22 त्यसै गरी, दान गर्न उहाँले भन्नुभयो: "दान एक जवान सिंह छ. उहाँले Bashan देखि plentifully प्रवाह गर्नेछु। "
33:23 र Naphtali उहाँले भन्नुभयो: "Naphtali प्रशस्त आनन्द पर्छ, र उहाँले प्रभुको आशिष् को पूर्ण हुनेछ. उहाँले समुद्र र मेरिडियन अधिकार गर्नेछन्। "
33:24 त्यसै गरी, आशेर उहाँले भन्नुभयो: "दिनुहोस आशेर छोराहरू संग आशिष्. उहाँलाई आफ्ना भाइहरूलाई खुसी होस्, र उसलाई तेल मा आफ्नो खुट्टा डिप गरौं.
33:25 आफ्नो जुत्ता फलाम को र पीतल को हुनेछ. रूपमा आफ्नो युवा को दिन थिए, त्यसैले पनि आफ्नो पुरानो उमेर हुनेछ.
33:26 त्यहाँ सबैभन्दा धार्मिक एक परमेश्वर जस्तै कुनै अन्य भगवान छ. आकाश मा सवारी जसले आफ्नो सहायक छ. उहाँको वैभवशाली बादल छरिन्छ.
33:27 आफ्नो Habitation माथि छ, र अनन्त हतियार तल छन्. उहाँले आफ्नो अनुहार अघि शत्रु फ्याँकिएको पर्छ, र उहाँले भनौं: 'Utterly हुनुहोस् भङ्ग!'
33:28 इजरायल विश्वास र एक्लै बस्न पर्छ, अन्न र रक्सी को एक देशमा याकूबका आँखा रूपमा; र आकाश शीत संग कुइरो लागेको हुनेछ.
33:29 अनमोल तपाईं, हे इस्राएलका. जसले तपाईंलाई जस्तै छ, प्रभु द्वारा सुरक्षित छन् जो मानिसहरू? उहाँले आफ्नो सहयोग को ढाल र आफ्नो महिमा को तरवार छ. आफ्ना शत्रुहरूलाई तपाईं स्वीकार गर्न इन्कार हुनेछ, र त तपाईं आफ्नो necks मा tread गर्नेछु। "